Posted by Fros March 05, 2016
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း (၁.၇ သန်း) မှစ၍ လူသား မျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခု ရှိပါသည်၊ သမိုင်း မှတ်တမ်းကို (ဘီစီ ၂၂ ရာစု) ထဲက တွေ့ရ၏၊ ရှေးနှစ်လေးထောင် ကပင် အဆင့်မြင့် ပိုးထည် ရက်လုပ်တတ်သည်၊ နှစ် ၃၅၀၀ ကျော်ထဲက ကြေးသွန်းနှင့် ကြွေထည် လုပ်ငန်း တတ်မြောက်သည်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ပညာများ ထွန်းကား၏၊ ရေအား စွမ်းအင်၊ ရေနာရီ၊ လေရဟတ်၊ ယမ်း နှင့် ပုံနှိပ် အတတ်များ ကို စောစီးစွာ တတ်မြောက်ခဲ့၏၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် နည်းပညာ ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဟင်းခတ် အမွေးအကြိုင်၊ ကြွေထည် နှင့် ပိုးထည် များကို အနောက် ကမ္ဘာက မက်မောစွာ ကုန်သွယ် ခဲ့ရ၏၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးပညာ၊ စစ်ပညာ နှင့် နက္ခတ္တဗေဒများ တဘက် ကမ်းခတ် ထွန်းကားခဲ့သည်၊ ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် မဟာတံတိုင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ ၁၈ ရာစုက ဗြိတိသျှတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သော သင်္ဘော များထက် သုံးဆကြီးသော သစ်သား သင်္ဘောကို ၁၅ ရာစု ကပင် ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်၊ (Treasure) ရတနာ အမည်ရှိ သင်္ဘောသည် တန်ချိန် ၇၀၀၀ ရှိပြီး နောင် နှစ်လေးရာ ကြာမှ အလားတူ သင်္ဘောမျိုးကို ကမ္ဘာက ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ စာဖတျမရလြှငျ ဒီကိုနှိပျပါ
ဤမျှ ကြီးမားသော သမိုင်းကြောင်းရှိသည့် နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အသာ စီးရမှု ကြောင့်မည်သူကိုမှ အထင်မကြီးဘဲ တံခါး ပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးကာ ကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်ခဲ့သည်၊ ဥရောပ၏ စက်မှု တော်လှန်ရေး နှင့် နည်းပညာ ထွန်းကားမှုကို လျစ်လျူရှုခဲ့၏၊ ထို အကျိုးဆက် များကြောင့် ၁၉ ရာစု တွင် ဗြိတိသျှတို့ ကျူးကျော်မှု နှစ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပြီး သယံဇာတ နှင့် အခွင့်အရေး များစွာ ပေးခဲ့ရသည်၊ (၁၉၁၂) ခုနှစ် တွင် ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြင့် သမ္မတနိုင်ငံ စတည်ထောင် သည်၊ တည်ထောင်ပြီး ၁၉ နှစ် အကြာတွင် တိုင်းပြည် အရှေ့ မြောက်ဘက် ကို ဂျပန်တို့ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်သည်၊ နောင် ၆ နှစ်အကြာ တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဝင်ရောက် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သည်။
Copy from Phyo Ko Ko Naing Facebook post. All Credit to Original Writer, Phyo Ko Ko Naing.
ဂျပန်တို့၏ အံ့မခန်း ရက်စက်မှုကို အနစ်နာဆုံး ခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်၊ နမူနာ ပြရသော် နန်ဂျင်းမြို့ တမြိ်ု့တည်းတွင် ဂျပန်တို့မှ လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော်အား ခြောက်ပတ် အတွင်း နည်းလမ်း မျိုးစုံဖြင့် ရက်စက်စွာ သတ်ပြခဲ့သည်၊ အမျိုးသမီး နှစ်သောင်း ကျော် အား အဓမ္မပြုကျင့်၊ ကိုယ်လုံးတီး တန်းစီ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူပြီး အရှက် တကွဲ ဖြစ်စေခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့၏ မျိုးရိုးမာန်ကို ချိုးနှိမ်ရန် တမင်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ထိုထဲတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ ကလေးငယ် များ နှင့် အရွယ်လွန် အမျိုးသမီး များ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းလဲ ခံခဲ့ရသည်၊ မြို့သုံးပုံနှစ်ပုံကို ရစရာ မရှိအောင် ဖျက်ဆီး ခဲ့သည်၊ နေရာအနှံအပြား ထိုသို့ ကျူးကျော် ခံခဲ့ရသည်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျပန်တို့ စစ်ရှုံးမှသာ သက်သာရာ ရခဲ့၏၊ ထိုနောက် မပြီးဆုံးသေးသော ပြည်တွင်းစစ်ကို ဆင်နွဲရပြန်သည်။
ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် တိုင်းပြည် ပြန်လည် တည်ထောင်သည်၊ တည်ထောင်ပြီး တစ်နှစ် အကြာတွင် ကိုရီယားစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ဝါဒရေးရာ မဟာမိတ် မြောက် ကိုရီးယား ဘက်မှ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်သည်၊ အင်အား ကြီး အမေရိကန်မှ တောင် ကိုရီးယား ဘက်မှ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာ စစ်စရိတ် များစွာ ဆုံးရှုံးပြန်သည်၊ ပြည်တွင်းတွင်လည်း မဟာ ခုန်ပျံကျော်လွားမှု၊ ဘုံ လယ်ယာမြေ စနစ် နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး စသည့် မူဝါဒ အမှားကြောင့် (၂၆ နှစ်) အကြာတွင် တိုင်းပြည် သည် အဆိုးဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။
ထိုချိန်တွင် စက်မှုတော်လှန်ရေး နှင့် နည်းပညာများ လျင်မြန်စွာ ထွန်းကား လာသည်၊ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပတို့မှ နည်းပညာတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ဦးဆောင် လာသည်၊ ဆိုဗီယက်နှင့် အာရှ ကွန်မြူနစ် သြဇာကို ထိန်းချုပ်ရန် အမေရိကန်၏ ကူညီမှုကြောင့် ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား စသည့် အာရှ ကျားများ ပေါ်လာသည်၊ ထိုပြင် အမေရိကန်မှ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ တံကျင်လျှို ပေးသည့်နှယ် ရန်သူတော် ထိုင်ဝမ် ကို စက်မှုနိုင်ငံကြီး အဖြစ် တည်ထောင် ပေးလိုက်သည်၊ နံကြားထဲ ထိုးသည့် နောက် ဓားတချက် အနေဖြင့် ရန်သူဟောင်း အင်္ဂလိပ် ကလည်း ဟောင်ကောင်ကို ဈေးကွက် စီးပွားရေး ထူထောင် ပေးသည်၊ ပေါ်တူဂီ လက်အောက် ရောက်နေသော မကာအို မှာလည်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်၊ ထိုပြင် သမိုင်းရန်ကြွေး အကြီးဆုံး ဂျပန်သည် အဆမတန် ကြွယ်ဝချမ်းသာ လာသည်။
မှန်ကန်သောမူဝါဒ ဖော်ဆောင်ခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ နိုင်ငံသားများ နှစ်ဘက်ပြိုင်၍ အနိုင်ကြဲခဲ့သော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်၊ တမျိုးသားလုံး တအုံနွေးနွေး ခံစားခဲ့ရသည့် နာကျည်းစိတ် ကို စီးပွားရေးဘက်တွင် ဖောက်ခွဲခဲ့သော ကမ္ဘာ ကျော် ပုံပြင် တစ်ပုဒ် လည်းဖြစ်၏၊ "ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် ပုံပြင်" ဟု အမည် တပ်လိုပါသည်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်ပျော်နေခဲ့သော တရုတ် နဂါးကြီး နိုးလာခဲ့သည် ဟုလည်း ဆိုနိုင် ပါသည်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၂)
၁၉၆၀ လောက်မှစ၍ ဆင်းရဲ ငတ်မွတ် လွန်း သောကြောင့် တရုတ်ပြည်မှ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာ လာသော အသက် ၁၅ နှစ်မှ အသက် ၃၀ ကြား တရုတ် လူငယ် မျိုးဆက်တစ်ခု ရှိပါသည်၊ နီးစပ်ရာ အာရှ နိုင်ငံများ၊ ဥရောပ နှင့် အမေရိကတိုက် သို့ ရရာနည်း ဖြင့် ထွက်ခွာကြသည်၊ ရောက်ရှိရာ ကမ္ဘာအနှံ့ရရာအလုပ်ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲ ကြီးစွာ လုပ်ကြသည်၊ ၎င်းတို့၏ တစ်ခု တည်းသော အာရုံမှာ နာကျည်းစိတ်မှ ပေါက်ဖွားလာသော ကြီးပွားလို စိတ်ပင် ဖြစ်သည်၊ ဘိုးဘွားများ ပြောပြ သော အတိတ်က ခမ်းနားသည့် ပုံပြင်များကို နားထောင်သည်၊ ကွန်ဖြူးရှပ် အဆုံးအမ များကို နာယူသည်၊ ရွှေရောင် လွမ်းခဲ့သည့် အချိန်ကို အာရုံ ပြုသည်၊ သို့သော် လက်တွေ့ ရင်ဆိုင် နေရသည်က လူရာ မဝင်သည့် ဘဝ နှင့် ခက်ခဲသည့် ပတ်ဝန်းကျင် သစ်၊ အမိမြေကို ထပြန်ချင် လှသော်လည်း မိသားစု အနာဂါတ် ကို စဉ်းစားပြီး နေရာသစ် တွင် ရှင်သန် နိုင်ရန်သာ ကြိုးစားကြသည်။
ရှေးရာစုနှစ်များက ကြိုရောက် နေသော တရုတ်များက ထိုမျိုးဆက်သစ်အတွက် ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်ပျက်ရန် ဘုံကျောင်းများ တည်ထောင် သည်၊ ဘုံကျောင်းမှတဆင့် အတွေး အခေါ်၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အကူအညီ များ လက်ဆင့်ကမ်း ကာ တရုတ် လူငယ် တို့၏ မခံချင်စိတ် ကို မြေတောင်မြှောက် ပေးခဲ့ကြသည်။
တိုးတက်လိုစိတ်ဖြင့် အလုပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ကြိုးစားသည်၊ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်များကို မခိုမကပ် လုပ်သည်၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကန် လုပ်ငန်းရှင် များမှာ တရုတ်တို့ကို ခိုင်းရတာ တန်သည်၊ ၎င်းတို့ နိုင်ငံသားများ ထက် လစာ သုံးဆလျော့ပေးသည်၊ တရုတ် လူငယ် များသည် အိမ်ထောင်ကျ ပြီးတာတောင် အိမ်ခန်း ငှားမနေကြ၊ စက်ရုံဟောင်းများတွင် ညအိပ်ကြသည်၊ ဖြစ်သလို စားသည်၊ အင်္ကျီများကို စုတ်ပြတ်နေသည့် အထိ ဝတ်သည်၊ တနေ့ ၁၂ နာရီ အနည်းဆုံး အလုပ် လုပ်၏၊ တချို့ နာရီ ၂၀ နီးပါး အလုပ်လုပ်၍ ၄ နာရီ ခန့် သာ အိပ်စက်ကြသည်။
ခေါင်းဆောင်း၊ ခါးပတ်၊ ခါးသိုင်းကြိုးများ မပါသော တရုတ် အလုပ်သမား များသည် အထပ် ၈၀ တိုက် များ ပေါ်တက်ကာ တနေ့ ၁၂ နာရီ အလုပ် လုပ်ကြ သည်၊ မကြာခင် တွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အတော်ဆုံး သူများ ဖြစ်လာ သည်၊ သူတို့နဲ့ ယှဉ်သော် ဒေသခံ အလုပ်သမား များကို လုပ်ငန်းရှင်များမှ မခိုင်း လိုတော့၊ ထိုကြောင့် ဒေသခံများမှ လုပ်စရာ ဈေးကွက် ပျောက်လာ၍ အလုပ်သမား သမဂ္ဂကို တိုင်ကြား ကြသည်၊ တရုတ်များ အချိန်ပို အလွန် အကျွံ ဆင်းနေသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမား အခွင့် အရေးကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည်ဟု တင်ပြ ကြသည်၊ ထိုကြောင့် တနေ့နာရီ ၂၀ လုပ်ခြင်းကို ရပ်နား လိုက်ရသည်၊ တရုတ် တို့မှာ မကျေနပ်ကြ၊ သူတို့မှာ အလုပ် များများလုပ်၍ ငွေများများ ရလိုသူများ ဖြစ်သည်။
ငွေကြေးကို တတ်နိုင်သမျှ ချွေတာ၍ စုဆောင်းသည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း လုပ်နေ သည်ဖြစ်စေ၊ တနေ့ ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်ရမည်ဟု စိတ်ကူး ယဉ်ကြသည်၊ တရုတ်ပြည်ထုတ် ဈေးအပေါဆုံး ဖီးနစ် (မီးငှက်) တံဆိပ် သားရေ ဖိနပ်များကို စုတ်ပြတ် သည်ထိ ဝတ်ကြသည်၊ သွားပွတ်တံ များ စုတ်ပြတ်နေမှ အသစ် ဝယ်သည်၊ ထိုကြောင့် ဥရောပသား များက ဖီးနစ်တွေ (အပေါစားကောင်) ဟု နှိမ်ခေါ်ကြ၏ ။
ဤကား နိမိတ်ကြိုဖတ်သည့်နှယ် ဖြစ်သည်၊ ဖီးနစ် ငှက်သည် ဒဏ္ဏာရီလာ မသေသည့် ငှက်မျိုး၊ သေခါနီး အချိန်တွင် မီးလျှံထဲသို့ ခုန်ချ၊ နုပျိုမှုများ ပြန်ရပြီး တဖန် ပြန် ရှင်သန် သည့် မှော်မီးငှက် ဖြစ်သည်၊ မည်မျှ ရှုံးနှိမ့် နေပါစေ၊ မလျော့သော ဇွဲဖြင့် မူလထက်ပင် ပိုမို အောင်မြင်အောင် လုပ်ခဲ့သူ တို့ကို ဖီးနစ်ဟု တင်စားကြသည်။
ဖီးနစ်တို့ သည် ထိုသို့ အနှိမ် ခံရင်း အလုပ်စုံ သိမ်းကျုံး လုပ်ကိုင်၍ နည်းပညာ ယူသည်၊ ငွေကြေးစုမိ လာသည်နှင့် တပိုင်တနိုင် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ စ တည်ထောင်သည်၊ တရုတ်ပြည်မှ ဆွေမျိုး များကို ၎င်းတို့ဆီခေါ်၍ အလုပ် သွင်းပေးသည်၊ ရောက်လာသမျှ တရုတ် များမှာ အောက် သက်ကြေပြီး အလုပ်စုံ သိမ်းကျုံး လုပ်သည်၊ အလုပ် ကြိုးစားရင်းနှင့် တရုတ် မီးငှက် မျိုးဆက်သည် အဝေး မှနေ၍ သူတို့ ချစ်သော အမိမြေကို မျှော်ကြည့် နေခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၆ တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး မော်စီတုန်း ကွယ်လွန်သည်၊ ၁၉၇၈ တွင် အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် အဖိုးအို တိန့်ရှောင်ဖိန် လက်ထဲ အကြွင်းမဲ့ အာဏာ ရောက်ရှိ လာသည်၊ ဦးထုတ်နီ ဆောင်းထားသော တိန့်က "ချမ်းသာတာ မင်္ဂလာပါ" ဟု မိန့်ခွန်း စချွေသည်၊ "ကြောင်ဖြူ ကြောင်မည်း အရေးမကြီးဘူး၊ ကြွက်ခုတ်ရင် ရပြီ" ဟု ဆိုသည်၊ "အရင် ချမ်းသာဖို့ လိုသည်၊ မည့်သည့် စနစ်မဆို တိုင်းပြည် အတွက်ကောင်းရင် လက်ခံ မည်" ဟု ဆိုလိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုမိန့်ခွန်းဖြင့် ပြည်တွင်းရှိ တရုတ်တွေကို စိတ်ကူးယဉ် ကွန်မြူနစ် နိဗ္ဗာန်ဘုံ ထဲမှ လှုပ်နိုးလိုက်သည်၊ လန့်နိုးလာ၍ ဘေးပတ်ဝန်း ကျင် ကို ကြည့်လိုက်ရာ အားလုံး နတ်ဘုံ နတ်နန်း လို ဖြစ်နေပြီ၊ မခံချင်စိတ်က ငယ်ထိပ်ဆောင့် တက်လာသည်၊ ဥက္ကဌ မော်၏ သြဝါဒ များကို မေ့လိုက်ပြီ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း တွင် ၎င်းတို့၏ ပြင်းပြသော ခံစားချက် များကို ဖောက်ခွဲရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ။
တိန့်သည် အာဏာ ရပြီးသည်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး နှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု များစွာ လုပ်သည်၊ နိုင်ငံရေး တွင် စစ်ကို ရှောင်ရှားရန် ရန်လိုသော မူဝါဒ အစား စီးပွားရေးသာ အဓိက မူဝါဒကို ပြောင်းလိုက်သည်၊ အာရှနိုင်ငံ များသို့ ကွန်မြူနစ် အတွေး အခေါ် ထုပ်ပိုး တင်ပို့ ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်၊ ဥက္ကဌ မော် လက်ထက်ထဲက အစပျိုးခဲ့သော အမေရိကန် နှင့် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာသည်၊ အမေရိကန် ကို မဟာ ဗျူဟာ ရန်ဘက်မှ မဟာဗျူဟာ ပြိုင်ဘက် အဆင့် သို့လျော့ချ နိ်ုင်ခဲ့သည်။
တိန့်သည် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်ကို ရဲရဲ ကျင့်သုံးခဲ့၏၊ တရုတ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကွန်မြူနစ်စနစ် ကို မဖြိုဖျက်ဘဲ နှင့် ဈေးကွက် စီးပွားရေး တည်ဆောက် အောင်မြင်ခဲ့သော ပထမဆုံး အံ့မခန်း မော်ဒယ်သစ် ဖြစ်၏၊ နိုင်ငံပိုင် မြေယာ အများစုကို ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းပစ် သည်၊ ပြည်သူပိုင် စက်ရုံ များကို ပုဂ္ဂလိက သို့ လွဲပေးသည်၊ စက်မှုဇုန်များ သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံခြားသား များ ဈေး သက်သာစွာ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်နိင်ရန် စီစဉ်ပေး၏၊ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု မြန်ဆန်ရန် ကြိုးနီ စနစ်ကို လျော့ချပစ်၏၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ စက်မှုဇုန်များ တွင် လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များ ပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင် ပေးသည်၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးသည်။
နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကို အားပေးသော ဥပဒေ များစွာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ စက်ကိရိယာ များ တင်သွင်းပါက အခွန် ကင်းလွတ် ခွင့် ပြုသည်၊ ပြည်ပ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ခွင့်ပြုသည်၊ တချို့နေရာ များတွင် ကာလ တစ်ခု အထိ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် အမြတ်ခွန် ကင်းလွတ် ခွင့် ပြုသည်၊ တရုတ် နိုင်ငံသား တို့နှင့် ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ပါက အခွန် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံ လျော့ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သည်၊ ယခင်က ပြည်ပ ထွက်ခွာ သွားသော တရုတ်များကို သစ္စာဖောက် ဟု သတ်မှတ်သော အစဉ် အလာကို ပြောင်းလဲ၍ လူငယ်များကို နိုင်ငံ ရပ်ခြား သို့ သွားရောက် ပညာ သင်ရန် သို့အလုပ်လုပ်ရန် လွယ်ကူ အောင် စီစဉ် ပေးသည်။
ကမ္ဘာ့နည်းပညာကို ပြန်ဦးဆောင်နိုင်ရန် နှင့် ပြည်ပမှ လာရောက် ဖွင့်လှစ်သော စက်ရုံ များတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရရှိရန် ပညာရေး စနစ်ကို အဓိကထား ပြုပြင် ခဲ့သည်၊ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သော ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း ၏ ပညာရေး ပြုပြင်ရန် အတွေးအခေါ် ကို တိန့်က ဆက်ခံသည်၊ ၁၉၇၈ မှ စ၍ စာမေးပွဲ ဦးတည် ကျက်မှတ် ပညာရေးမှ နိုင်ငံ အတွက် လိုအပ်သော အရည် အသွေး ရရှိစေမည့် ပညာရေး ဖြစ်ရန် ပညာရှင် များနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်း၍ ဥပဒေ များစွာ ထုတ်၊ အပြီးတိုင် ပြင်ဆင် ခဲ့သည်၊ ချူနှင့် တိန့် တို့ မျိုးစေ့ချ ခဲ့သော ကမ္ဘာ အဆင့် ပညာရေး အောင်မြင်မှု အိမ်မက်ကိုတော့ ၎င်းတို့ မမြင်တွေ့ နိုင်လိုက်ပါ၊ နောင် နှစ်နှစ်ဆယ် အကြာ ကျန်ဇီမင်း လက်ထက် တွင် သီးပွင့် လာသော အဆင့်မှီ ပညာရေး ကို တမလွန်မှ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦး မြင်ပါက ပီတိ ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တက်လာပြီ ဆိုသည်နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ တရုတ်တို့၏ စိတ်အား ပြန်တက်လာသည်၊ ပြည်ပရောက် ဖီးနစ်များမှာ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှု သတင်းများ နားထောင်ပြီး ထိန်းသိမ်း မရအောင် တက်ကြွ လာသည်၊ အမိမြေ ကို လွမ်းလှပြီ၊ ဆွေမျိုး တွေနှင့် ပြန်တွေ့ချင်ပြီ၊ ပြည်ပတွင် မွေးခဲ့သော သားသမီးတွေကို မိခင်တိုင်းပြည် ကို ပြန်ခေါ်ပြမည်၊ ကိုယ်မြေကိုယ်ရေ တွင် ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် ဖန်တီးကြမည်၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ပြည့်ခါနီး တွင်တော့ ဖီးနစ်များ သူတို့ ချစ်သောမြေကို ပြန်လာ ပါပြီ၊ အလုပ်ကြမ်း သမား များ ဘဝဖြင့် ပြန်လာခြင်း တော့ မဟုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ အရင်းအနှီး နှင့် နည်းပညာများ ယူ၍ ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အပေါစား ဖိနပ် စီးသော မီးငှက်တို့ မကြာခင် တောင်ပံ ထခတ်တော့ မည် ဖြစ်သည်၊ နာကျည်း စိတ်ဖြင့် အံကြိတ် နေခဲ့ရသော ကာလများ၏ နောက်ဆုံး အချိန် နီးကပ် လာပါပြီ၊ ခေါင်းဆောင် နှင့် နိုင်ငံသား များ ပြိုင်တူထ တွန်းရာမှ ရာဇဝင် ရဟတ်ဘီး တပတ် ပြန်လည်တော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၃)
အမိမြေ ပြန်လာသော ဖီးနစ် တို့ကို ခေါင်းဆောင် များက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသည်။ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်တည်ဆောက်ရန် ၎င်းတို့ အားပါမှ ရမည်ကို ကောင်းစွာသိသည်။ ဦးစွာ ပြည်ပ ဖီးနစ်တို့ ၏အားကို အသုံးပြု၍ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း မြင့်တင်မည် ဆုံးဖြတ်သည်။ ဖီးနစ်တို့ကို ကျေးလက် များတွင် စက်ရုံများ တည်ထောင် နိုင်ရန် ငွေချေး ပေးသည်။ ရည်မှန်းချက် ကြီးသော ဖီးနစ် တို့သည် မကြာမီ တရုတ် ကျေးလက် တွင် ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ များ တည်ထောင် လာကြသည်။ ဘာသာစကား တတ်မြောက် လာခြင်း၊ ပြည်ပ အတွေ့ အကြုံ၊ နည်းပညာ များ နှင့် အဆက် အသွယ် များ ပါလာခြင်း တို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် တရုတ် စီးပွားရေး၏ အဓိက မောင်းနှင် အား ဖြစ်လာသည်။
ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ ၎င်းတို့ အလုပ်ကြမ်း လုပ်ခဲ့သော စက်ရုံဟောင်း များကို အောက်ဈေး နှိုက်ကာ ပြန်ဝယ်ယူ သည်။ ထိုသို့ ဝယ်ယူနိုင်ရန် အစိုးရ မှ ငွေထုတ်ချေးသည်။ ထိုစက်အစုတ် များမှ အခြေခံ နည်းပညာများ ရှာဖွေသည်။ နည်းပညာဟောင်း များသည် တရုတ်တို့ အတွက် တော့ အသစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုမှ တဆင့် ၎င်းတို့၏ ဉာဏ်နှင့် ပေါင်း စပ်ကာ နည်းပညာသစ်များ တီထွင်သည်။
ပြည်ပရောက် တရုတ်ဖီးနစ်တို့၏ အဆက် အသွယ် နှင့် နည်းပညာ ရရှိလာမှု၊ တရုတ်ပြည်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒ ပြောင်းလဲမှု၊ ဈေးပေါသော အလုပ်သမား များစွာ ရှိမှုတို့ကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စီးပွားရေး သမား များ တရုတ်ပြည် သို့ လာရောက် ရင်းနှီး မြုပ်နှံ ကြသည်။ အစိုးရမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို၍ ဥပဒေနှင့် အကာအကွယ် ပေးသည်။
ထိုချိန်တွင် အနောက်ကမ္ဘာ နှင့် ဂျပန် လုပ်ငန်းရှင်တို့ ရင်ဆိုင်ရသော ပြဿနာမှာ လုပ်အားခ ဈေးကြီးခြင်း နှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး များစွာပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ တိန့်က ဈေးပေါသော အလုပ်သမား ထုကြီး ကို ပြကာ ပြည်ပ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု များကို ဖိတ်ခေါ်သည်။ လုပ်သား ဈေးကွက် ကို မက်မောသဖြင့် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များ ဝင်ရောက်လာ သည်။ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ မှ ပြန်လာသော တရုတ် လုပ်သား များမှာ နိုင်ငံခြား စက်ရုံ များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ် ဝင်လုပ်ကြသည်၊ နည်းပညာ များကို လျင်မြန်စွာ အတုခိုး ကြသည်။ ပြည်ပမှ ပြန်ရောက် လာသော တရုတ်များသည် တကမ္ဘာလုံး မှ နည်းပညာ အခြေခံများ တတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ရာ လျင်မြန်စွာ အတုခိုးနိုင်သည်။
ဥပမာ ဆိုရသော် အီတလီသို့ ၁၉၈၉ တွင် ခိုးဝင်လာသော ဝမ်ရီဟွား သည် ရောက်ခါစတွင် အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိသေး သည်။ အင်္ကျီဆိုင်တွင် မဖြစ်စလောက် လခ ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ငွေကိုစုပြီး လမ်းဘေး အထည်ဆိုင် ဖွင့်သည်။ ထိုမှ တဆင့် အရောင်း သွက်လာကာ ဆိုင်ကြီး ဖြစ်လာသည်။ အင်္ကျီ ဒီဇိုင်းများကို မှတ်သားပြီး အီတလီ ဒီဇိုင်းနာ တစ်ဦးကို အလုပ်ခန့်၍ ဒီဇိုင်းဆွဲစေသည်။ ထိုနောက် တရုတ်ပြည် ပြန်ပို့၍ ချုပ်စေသည်။ ဝမ်၏ ဒီဇိုင်းများကို တရုတ်ပြည်မှ တသွေ မတိမ်း လက်ရာတူ ပြန်ချုပ်၍ အီတလီ သို့ ပြန်ပို့သည်။ အီတလီရှိ အလုပ်သမားခ ထက် ဆယ်ဆ သက်သာ သွားပြီး အမြတ် အစွန်း များစွာ ရရှိ၍ မကြာခင်တွင် Great Fashion ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သည်။ အီတလီ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း များကို ယှဉ်ပြိုင်သည်။ အရည်အသွေး ထပ်တူ ကြပြီး လုပ်အားခ သက်သာလှသော တရုတ် အထည် များကို အီတလီ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင် များ မယှဉ်နိုင်ဘဲ ပိတ်သိမ်းရသည် အထိ ဖြစ်ကုန်သည်။
ထိုကြောင့် တရုတ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အီတလီ လုပ်ငန်းရှင်များမှ လုပ်ခ ဈေးပေါသော တရုတ်ပြည်တွင် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ ချုပ်လုပ်ပြီး ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်သည်။ အီတလီမှ ဒီဇိုင်းနှင့် ချုပ်နည်းစနစ် ပို့ပေးလိုက်သည်။ မကြာခင်တွင် တရုတ်ပြည် စက်ရုံရှိ တရုတ် လုပ်သား တို့မှ ဒီဇိုင်းနှင့် နည်းပညာ အကုန် ရယူသွားရာ အီတလီ အထည် လုပ်ငန်းရှင် များမှာ ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူး ဖြစ်ကုန်သည်။
အမေရိကန်တွင် စစ်လက်နက် ထုတ်လုပ်သော ရော့ခ်ဖို့ဒ် အမည်ရှိ မြို့ ရှိသည်။ ထိုမြို့ရှိ ဆန်းထရင်း ကုမ္ပဏီမှ လေယာဉ် အဆင်းအတက် ကိစ္စများကို ထိန်းချုပ်သော အီလက် ထရောနစ် နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ၎င်းတို့၏ စက်ရုံပစ္စည်း အဟောင်း များကို စွန့်ပစ်ရာ ဖီးနစ်တို့မှ ဈေးပေါပေါဖြင့် ဝယ်ယူသွားပြီး နည်းပညာ ရယူခဲ့ပြန်သည်။ ထိုမြို့ရှိ အင်ကာဆို ကား ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံဟောင်းကြီး ကို ရောင်းချပြန်ရာ ဖီးနစ်များမှ ဝယ်ယူပြီး တရုတ် ပြည် သို့ စက်ရုံတစ်ခုလုံး ဖြုတ်သယ်သွားသည်။ ထိုစက်ရုံဟောင်းမှ နည်းပညာကို လေ့လာပြီး နည်းပညာသစ် ပံ့ပိုး၍ ကားသစ်များ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် တရုတ်တို့ ကား ထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာ ရသွားပြန်သည်။
ထိုပြင် အင်ကာဆို စက်ရုံ ၏ ရေဒါ မမိအောင် ပြုလုပ်သည့် သတ္ထုများ ထုတ်လုပ် သည့် သံပြားကြိတ်စက် ကို ဖီးနစ်တို့ အမှိုက်ဈေးဖြင့် ဝယ်ရန် ချောင်းနေ ပြန်သည်။ တရုတ်တို့ စွန့်ပစ်စက်ရုံ ပစ္စည်းများကို နည်းပညာရယူရန် လိုက်ဝယ် နေခြင်းကို စီအိုင်အေ ပင် သတိ မထားမိပါ။ ကွန်ဂရက် အမတ် မန်ဇာလို မှ သတိ ထားမိလာ၍ အစိုးရကို အသိပေး သောကြောင့် ထို စက်ရုံ ပစ္စည်းဟောင်း များကို တရုတ် တို့ကို မရောင်းဘဲ အီတလီ ကုမ္ပဏီ ကမ်မိုဇီ သို့ ရောင်းလိုက်သည်။ အမေရိကန် မသိလိုက် သည်မှာ ကမ်မိုဇီ သည်လည်း တရုတ် အစိုးရမှ တဘက်လှည့်နှင့် အီတလီ တွင် ဟန်ပြ ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ မကြာခင် တွင် ထိုစက်ရုံဟောင်းနှင့် နည်းပညာ အကုန် တရုတ်တို့ လက်ထဲပါ သွားပြန်သည်။
ဂျာမနီ သည် ဥရောပ စီးပွားရေး၏ အဓိက မောင်းအားဖြစ်သည်။ စက်မှု အထွန်းကားဆုံး ဒေသမှာ ဒေါ့မွန်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့သို့ တရုတ် ဖီးနစ် များသည် ပန်းကန်ဆေး၊ သန့်ရှင်းရေး စသည့် အောက်ခြေ အလုပ်များလုပ်ရန် ရောက်လာသည်။ ဖိနပ်စုတ် စီး၍ ငွေစုသည်။ ဘာသာ စကား သင်သည်။ ထိုနောက် နည်းပညာကို ကြိတ် အတုယူသည်။ အရင်းအနှီး နှင့် နည်းပညာ ရသည်နှင့် တရုတ်ပြည် သို့ ပြန်ယူသွားကာ စက်မှု လုပ်ငန်း ပြန် ထူထောင်သည်။ ထိုဖီးနစ် များသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်တွင် ဂျာမနီသို့ ပြန်လာသည်။ ယခင် ကလို အလုပ်ကြမ်းသမား အဖြစ်တော့ မဟုတ်။ လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် အစိုးရ ချေးငွေပါလာသည်။
ဒေါ့မွန် တွင်ရှိသည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ထဲက လက်ကျန် သံတိုသံစ များကို အမှိုက်ဈေးဖြင့် ဝယ်သည်၊ အမှိုက်များကို မမြင်လိုသည့် ဂျာမန်များမှ ပေါပေါနှင့် ရောင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် လန်ဒန်ရှိ သံရည်ကြို စက်ရုံဟောင်း အစိတ်အပိုင်း များ ဝယ်ပြန်သည်။ ဂျာမနီရှိ သက်ဆင်ကရပ် သံမဏိ စက်ရုံကြီးကို အောက်ဈေး (ဒေါ်လာ ၃၇.၂ သန်း) ဖြင့် ဝယ်သည်။ ထိုနောက် တရုတ်ပြည်သို့ သံတို သံစနှင့် စက်ရုံ အစိတ်အပိုင်း များပို့၍ ပြန်လည် တပ်ဆင်ကာ သံမဏိပြားမှ ထုတ်လုပ်ကာ တရုတ် သံမဏိခေတ် ပြောင်းစေခဲ့ သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များမှ သံမဏိ ဘုရင် ရှန်ဝန်ယုံ စသူတို့ ပေါ်ထွက် လာသည်။
သံတိုသံစများ ရှင်းလင်းသွားသော ဒေါ့မွန်မြို့ လမ်းမကြီးတွင် အီတလီမှ နည်းပညာ ရယူလာ သော ဖီးနစ်များမှ အထည်ချုပ် စက်ရုံများ လာဖွင့်သည်။ ၎င်းစက်ရုံထွက် အထည်များမှာ ဈေးချို၍ အရည်အသွေး ကောင်းလှသော ကြောင့် ဂျာမန် အိမ်ရှင်မ များတန်းစီ ဝယ်ကြသည်။ ယခင်က ဂျာမနီတွင် အိုးတိုက် ပန်းကန်ဆေး ခဲ့သော တရုတ်ဖီးနစ် တို့ မှာ ၎င်းတို့ ဆီမှ အထည်များ တန်းစီ ဝယ်နေသည့် ဂျာမန် အိမ်ရှင်မ များကို စောင့်ကြည့်၍ ပီတိဖြစ် နေခဲ့ပါသည်။
နမူနာ တချို့ ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ် ပစ္စည်း များကို စားသုံးသူက ကြိုက်နေတော့ ပြိုင်ရ ခက်လှသည်။ တချိန်က တရုတ်ပြည်ကို ဘိန်းစစ်ဖြင့် အဓမ္မ တံခါး တွန်းဖွင့်၍ ဝင်လာခဲ့သော ဥရောပသားမှာ တရုတ်တို့၏ လုပ်သား နှင့် ဈေးကွက် စစ် ဖြင့် ပြန် တိုးဝင်လာ ခြင်းကို အလူးအလဲ ခံနေရသည်။ အမေရိကန် နှင့် ဂျပန် တို့ပါ ပြေးမလွတ်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၄)
၁၉၇၅ ဝန်းကျင်တွင် တရုတ်ပြည် ရင်ဆိုင်ရသော အဓိက ပြဿနာမှာ မြေယာ ရှားပါးမှုနှင့် လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မတူသည့် အချက်မှာ တိုင်းပြည် ကြီးသော်လည်း စိုက်ပျိုးမြေ ရှားပါးခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ စိုက်ပျိုး၍ ရသောမြေဖြစ်သည်။ နေရာ အများစုမှာ ကျောက်တောင်များ၊ သဲကန္တာရ များ ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ထိုကြောင့် မကြာခဏ စားနပ် ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှု ဖြစ်ပြီး လမ်းမ ပေါ်တွင် လူများ သေဆုံးသည် အထိ ဖြစ်ရသည်။ တရုတ်ပြည် တည်ထောင် ကာစ ၁၉၅၃ တွင် လူဦးရေ ၅၈၂.၆ သန်းရှိပြီး ၁၉၇၅ ရောက် လာသောအခါ လူဦးရေ သန်း ၉၀၀ ကျော်လာ သည်။ လူဦးရေ အဆမတန် တိုးလာ သော်လည်း ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း မတိုးတက်လာ။ ပြည်ပသို့ ပို့ရန် မဆိုထားနှင့်၊ ပြည်တွင်း၌ပင် မလုံလောက်။ တရုတ် ခေါင်းဆောင် များမှာ တိုးလာသော ပါးစပ် ပေါက် များကို ဘယ်နည်းဖြင့် ရှာကျွေး ရမည် မသိဘဲ အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေသော အချိန် ဖြစ်သည်။
တိန့်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း မတိုးတက်သည့် ကိစ္စကို အလေးအနက် စဉ်းစားသည်။ လူဦးရေ ဆက်တိုးနေသော ကြောင့် တိုင်းပြည်က ကျွေးရ မည့် ပါးစပ်ပေါက် များလာသည်။ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းတွင် သုံးမရသည့် ပါးစပ်ပေါက် များလေ၊ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲလေ ဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်တွင် အလုပ်မရှိဘဲ ဟိုယောင် ဒီယောင် လုပ်နေသော လူငယ်စုကို မိခင် တိုင်းပြည်အတွက် ရုန်းကန်ခိုင်း မည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။ တရုတ် လူငယ်များ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းတွင် ဘာကြောင့် မအောင်မြင် လဲကို လေ့လာရာ ရှေးရိုး စာမေးပွဲ ဦးတည် ကျက်မှတ် ပညာရေး ကြောင့် ဆိုသည်ကို တွေ့ရ သည်၊
တရုတ်တို့ အရိုးထဲ စွဲမြဲနေသော ပညာရေး မှာ နန်းတွင်းသို့ ဝင်၍ ကဗျာ၊ စာများ အလွတ် ရွတ်ပြ ကာ အစစ်ခံသော ပညာရေး ဖြစ်သည်၊ ဖတ်အားကောင်း သူများသာ အောင်မြင်သော စနစ်ဖြစ်သည်၊ ထိုသူများကို ဘုရင်မှ ပညာရှိ အဖြစ် ရွေးချယ်၍ သူကောင်းပြုသည်၊ ထိုစနစ်သည် အလွတ်ကျက် ပညာရေး ဖြစ်သဖြင့် တရုတ်တို့၏ ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တီထွင် ဖန်တီးမှု ဆုတ်ယုတ် စေသည် ဟု တိန့်က ဆုံးဖြတ်သည်၊ ထိုကြောင့် ၁၉၈၀ မှစ၍ တီထွင် ဖန်တီးတတ်သော ဦးနှောက် ဖြစ်စေ ရန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အတွက် အသုံးဝင် ရန် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များစွာ လုပ်ခဲ့သည်၊ ပညာရေး ပြင်ဆင်ချက်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ပြဌာန်းခဲ့သည်။
တိန့် ၏ ပညာရေး ပြောင်းလဲမှုက နောင် ၁၀ နှစ် ကျော်အကြာတွင် အကျိုး သက်ရောက် လာသည်။ တရုတ် တို့၏ ဗီဇ အသိဉာဏ် ကောင်းမွန်မှု၊ တအုံနွေးနွေး ပေါက်ကွဲလိုသော အမျိုးသားရေး စိတ် နှင့် ကြီးပွားလိုစိတ် တို့ကို ပညာရေးဖြင့် လမ်းခင်းပေးမည်။ ထိုနောက် စီးပွားရေး သို့ လမ်းကြောင်းလွဲ ပေးလိုက်ပါက လူငယ်တို့ စိတ်ပါသွား နိုင်သည် ဟု ခေါင်းဆောင်တို့ တွက်ဆ၏။ တွက်ကိန်း မလွဲခဲ့ပါ။ လမ်းမ ပေါ်တွင် ဘာစလုပ်ရမှန်း မသိ၍ အချိန်ကုန် နေသော တရုတ်လူငယ် တို့မှာ အသိပညာ အနည်းငယ် ရသည် နှင့် ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း လမ်းကြောင်းပေါ် ခုန်တက်လာသည်။
တရုတ်ပြည် အဆမတန် တိုးတက်ခဲ့ရာတွင် ပြည်သူ လူထုကို ချန်၍မရ။ ထိုစဉ်က တရုတ် မျိုးဆက်မှာ ကမ္ဘာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတွင် ကြီးခဲ့ရာ အလုပ် ကြိုးစား သလောက် အသုံး အစွဲ လည်းချွေတာလှ သည်။ မြေဆီ မြေသြဇာ မကောင်းသော မြေမှာ စိုက်ပျိုးစေကာမူ တရုတ်တို့ တဧက ထွက်နှုန်းသည် မြေသြဇာ ကောင်းသော ပါကစ္စတန်၏ ထွက်နှုန်း ထက် ပိုသည်ဟု တရုတ်ပြည် လာလည်သော ပါကစ္စတန် တရားသူကြီးချုပ် မှတ်တမ်း တင်ဖူး သည်။ ပြည်သူရော အစိုးရရော ဟန်ပြအလုပ် လုပ်တာ မရှိ။ ရိုးရိုးစင်းစင်းသာ ကြိုးစားကြ သည်မှာ ပါကစ္စတန်တို့ အတုယူဖွယ်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် ခေါင်းဆောင်တို့က လမ်းခင်း ပေးလိုက် သည်နှင်တပြိုင်နက် ခုန်တက် ခဲ့သော လူထု၏ စုပေါင်း အားမာန်က တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲတွင်းမှ ဆွဲထုတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်မီးငှက် မျိုးဆက်မှ အချို့ကို နမူနာပြ လိုပါသည်။
၁။ သံမဏိသူဌေး ရှန်ဝန်ယုံ
၁၉၄၆ တွင် ရှန်စီမြစ် အောက်ဘက်ရှိ ရွာငယ်လေး တွင် မွေးသည်။ အစာရေစာ အမြဲ ငတ်မွတ်သော ရွာလေးဖြစ်သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်တွင် ချည်မျှင် စက်ရုံ တစ်ခုတွင် အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရသည်။ ထိုစက်ရုံ တွင် အလုပ် လုပ်နေရာမှ နောက်ပိုင်း စက်မှု လုပ်ငန်း ဖွင့်ဖြိုး၍ စက်ရုံများ တည်ပါက သံမပါလျှင် မပြီးသည်ကို သဘော ပေါက်လာ သည်။ ထိုကြောင့် ငွေကြေး စုဆောင်း၍ သံတိုသံစ များ နှင့်သံရည်ကျို စက် အဟောင်း တစ်လုံး ဝယ်ကာ လုပ်ငန်း စတင်သည်။
အသက် ၂၉နှစ်တွင် Shagang Group ကို စတည်ထောင်သည်။ တိန့် အာဏာ ရလာသော အခါ ငွေချေးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ချဲ့ရန် အားပေးခြင်းကြောင့် ရှန်သည် အလုပ်ရုံ ထပ် တိုးချဲ့သည်။ အလုပ်သမား များပိုမို ခန့်ထား၍ လည်ပတ်ရာမှ လုပ်ငန်း အောင်မြင် လာသည်။ သူ့စက်ရုံမှ တစ်နှစ် သံတန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲ ထုတ် နိုင်လာသည်။ ထိုနောက် လုပ်ငန်း တိုးချဲ့လို၍ အင်္ဂလန်မှ လျှပ်စစ် သံရည်ကျို စက်ရုံ အဟောင်း ကြီး ကို ဝယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းသည်။ မအောင်မြင်ဘဲ ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှု များ ဖြစ်သွား သည်။ ၁၉၉၂ အသက် ၄၆ နှစ်တွင် အကြွေးများ ပတ်လည် ဝိုင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ် ကျလွန်း ၍ အားလျော့ခါနီး တွင် တိန့်မှ "သတ္တိ နည်းနည်း ပိုရှိလိုက်" ဟုတိုင်းပြည်ကို လှုံ့ ဆော် ရာမှ စိတ်ပြန် တင်း၍ ကြိုးစားသည်။ ထိုမှ လုပ်ငန်းများ ပြန် လည်ပတ်လာသည်။
၁၉၉၅ တွင် တရုတ် စီးပွားရေး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် လာသည်။ ကမ်းစပ်မြို့များတွင် စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင် ပေးရာမှ လျင်မြန်စွာ ဖွံဖြိုး လာသည်။ တရုတ်များ ငွေကြေးပြေလည် လာသည်။ မကြာခင် ကားဝယ်စီးလိမ့်မည် ဟု ရှန်က တွက်ဆပြီး ကားတွင် တပ်ဆင်မည့် သံမဏိပြား ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးစားသည်။ ထိုနောက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန် သံမဏိ စက်ရုံဟောင်း သက်ဆင်ကရပ် ကို အောက်ဈေး ဒေါ်လာ ၃၇.၂ သန်းဖြင့် ငွေချေးဝယ်သည်။ ထိုကြောင့် ကမ္ဘာက သူ့ကို သတိထား မိလာသည်။ ထိုစက်ရုံကို သူဇာတိ မြို့ ကိုသယ်ဆောင်၍ မူလီတစ်ချောင်း မကျန် ပြန် တပ်ဆင်၍ သံမဏိပြား စထုတ်သည်။ ၂၀၀၄ တွင် သံမဏိ ဈေးကောင်း လာရာမှ ရှန်သည် အကြွေး များ ကြေကာ အလွန် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာသည်။
၁၉၇၅ က ချေးငွေ ယွမ် လေးသိန်းခွဲနှင့် စခဲ့သော သူ့ ကုမ္ပဏီ Shagang Group သည် ၂၀၀၇ တွင် အလုပ်သမားပေါင်း ၂၆၇၀၀ ကို အလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ယွမ် ဘီလီယံ ၁၀၀ ကျော် ကြွယ်ဝ လာသည်။ နှစ်စဉ် သံတန်ချိန် ၂၃ သန်း ထုတ်လုပ် ပေးနေပြီး ကမ္ဘာအနှံ သို့ ပြန်လည် တင်ပို့ ရောင်းချ သည်။ တရုတ်ပြည်၏ အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် သံမဏိ စက်ရုံ ဖြစ်သည်။
ရှန်သည် တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ချိန် သူ့ အသက်၂၉ နှစ်တွင် ထရုန်းကန် ခဲ့သော မီးငှက် မျိုးဆက် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ယခု ၆၉ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ငတ်ပြတ်နေသည့် မိခင်နိုင်ငံကို ထမင်း ပြန်ခွံ့ ကျွေးခဲ့သော သားကောင်း တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၅)
၂။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို လေယာဉ်လေးစီးနှင့် လဲခဲ့သူ
လေယာဉ်လေးစီး ကို ခေါက်ဆွဲခြောက် ဖြင့် လဲလို့ ရမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ တရုတ် ဖီးနစ် တစ်ယောက် ကတော့ လဲပြ ဖူးပါသည်။ သူ့နာမည်က မော်ကီချောင်း။ ၁၉၇၉ တွင် ထောင်မှ လွတ်လာ သည်။ အစိုးရထံမှ ငွေချေးကာ နိူးစက်နာရီ များစရောင်းသည်။ ထိုမှ တဆင့် အမြတ် ရရှိလာသည်။ ကြီးပွားမည့် အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေရာမှ စီချွမ် လေကြောင်းလိုင်း အကြောင်း သိလာသည်။ ၎င်းတို့မှာ လေယာဉ် ဝယ်၍ ပျံသန်း လိုသော်လည်း ဝယ်ရန် ငွေမရှိ။ ၎င်းတို့ လိုချင်သော လေယာဉ်မှာ ဆိုဗီယက်တွင် ရှိသည်။
မည်သို့ အကျိုးဆောင်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရာမှ ဆိုဗီယက်တို့လည်း လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ အရေးတကြီး လိုအပ် နေသည်ကို သိလာသည်။ တရုတ်မှာလည်း အသေးစား လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြိုး နေပြီဖြစ်ရာ ထိုပစ္စည်း များ ကောင်းစွာ ထုတ်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ဆိုဗီယက် တာဝန်ရှိသူ များကို သွားရောက်၍ အထည်၊ ဖိနပ်နှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက် များကို လေယာဉ်နှင့် လဲရန်ညှိသည်။ ဆိုဗီယက် တို့က လေယာဉ်ကို ရောင်းရန်သာ စိတ်ဝင်စား သော်လည်း မော်ကီချောင်း အကြိမ်ကြိမ် ညှိရာမှ သဘောတူပြီး အလဲအလှယ် ဖြစ်သွားသည်။ နောက်ဆုံး တရုတ် လုပ် အထည်၊ ဖိနပ်နှင့် ခေါက်ဆွဲခြောက် ရထား အစီးငါးရာတိုက် ဖြင့် ဆိုဗီယက် လေယာဉ် လေးစီး လဲယူခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ် ပြီးနောက် မော်ကီချောင်းမှာ နာမည်ကြီး လာပြီး ဆိုဗီယက် အာဏာပိုင် များ နှင့် ရင်းနှီး လာကာ ဆိုဗီယက် ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရေး တွင်ပါ ရင်းနှီး မြုပ်နှံခဲ့သည်။
မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်ရသော အရောင်းအဝယ်ကို စိတ်ရှည်စွာ ရအောင် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်း ခဲ့သည့် မော် သည် တရုတ်တို့ ၏ စိတ်ကူး အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များတွင် ပါလာ သည်။ မြန်မာတို့ ၏ ပြန်မရနိုင်သော သဘာဝ သယံဇာတ များကို တန်ဖိုး မရှိသည့် တရုတ် ထုတ်ကုန်များနှင့် လဲနေရခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ် စေချင်ပါသည်။ မော်က တော့ စီချွမ် လေကြောင်း သမိုင်းတွင် ခေါက်ဆွဲခြောက် နှင့်လေယာဉ် လဲစီးခဲ့သူ ဟု သမိုင်းဝင် ခဲ့သည်။
၃။ အချိုရည် လုပ်ငန်းရှင် လီရှောင်ဟွေး
ငယ်စဉ် စာသင်နေချိန်တွင် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန် ရေး ဂယက်ကြောင့် ရုရှားနယ်စပ် ပို့ခံရပြီး တောင်သူ လုပ်ရသည်။ ပညာရေး တပိုင်းတစ ဖြစ်သွားသော လီရှောင်ဟွေးမှာ အသက် ၃၀ မှ မြို့ပေါ် ပြန်ရောက်သည်။ ရောက်ရောက်ခြင်း လုပ်စရာ အလုပ်မရှိ၍ နာရီတု များ ရောင်းချသည်။ ထိုနောက် ထို အလုပ်ကို မကြီးပွား နိုင်ဟု ဆုံးဖြတ် စွန့်လွတ်ကာ အမေရိကန် လုပ် ပက်စီ၊ ကိုကာကိုလာ များ စရောင်းသည်။ ထိုမှတဆင့် အချိုရည် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး ရောင်းချ သည်။ထိုလုပ်ငန်းကို ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်ရာမှ ၁၉၉၄ တွင် တရုတ်ပြည်၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး အချိုရည် လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လာသည်။
၄။ အသက် ၄၀မှ စာအုပ်လက်ပွေ့ ရောင်းရသူ (သို့) လီဖန်း သူဌေး ယင်မင်ရှန်
၁၉၄၀ တွင်မွေးသည်။ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်တွင် လက်ယာ အတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးသည် ဆိုပြီး ကျောင်းထုတ်ခံရသည်။ နောက် သုံးနှစ်အကြာတွင် အရင်းရှင် ဝါဒ ကိုင်းညွတ်သည် ဆိုကာ ထောင် ၉ လ ချခံရသည်။ အသက် ၂၃ ရောက်သော အခါ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကို အမေရိကန် သွားနိုင်ရန် ကူညီမိ သောကြောင့် သစ္စာဖောက်ဟု တံဆိပ် တပ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် နှစ်ဆယ် ချခံရပြန်သည်။ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် တွင် ထောင်မှ လွတ်လာသည်။
ထောင်မှ လွတ်လာချိန်တွင် ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် စစဉ်းစားသည်။ တိန့် အာဏာရသွားပြီး စီးပွားရေး မူဝါဒ ပြောင်းလဲမည် ဟု သတင်းကြား၍ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ထူထောင်ရန် ကြံစည်သည်။ အစိုးရဆီမှ အသေးစား ချေးငွေ ချေး၍ စာအုပ်လက်ပွေ့ ရောင်းသည်။ ဝန်ထမ်း ဘဝထက် ဝင်ငွေပိုရ လာသည်။ မကြာမီ စာအုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာသည်။ စာအုပ်ဆိုင် ထိုင်ရင်း အသွားအပြန် လုပ်နေသော လူများကို ကြည့်ကာ မော်တော် ဆိုင်ကယ် ရောင်းရင် ကောင်းမလား ဟု အတွေး ပေါ်လာသည်။ ထိုနောက် ၁၀ နှစ်နီးပါး လုပ်ကိုင် ခဲ့သော စာအုပ်ဆိုင်ကို ရောင်းချကာ ဆိုင်ကယ် စတင် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်သည်။
အသက် ၅၂ အရွယ် ၁၉၉၂ တွင် ယင် သည် ဝန်ထမ်း ၉ ယောက်ငှားကာ ချုံကင်း မြို့တွင် ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရန် စတင်သည်။ ကနဦး ရင်းနှီးငွေ (ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀) ဖြစ်သည်။ ဂျပန် ဟွန်ဒါ (Honda) ကို သဘောကျ၍ သူဆိုင်ကယ်ကို (Hongda) ဟု ဆင်တူယိုးမှား နာမည်ပေးသည်။ မကြာမီ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင် လာသည်။ ထိုနောက် ဈေးကွက် ကို မခန့်မှန်းဘဲ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲပြီး ဆိုင်ကယ် ၁၅ သန်း ထုတ်လိုက်ရာ ၅ သန်းသာ ရောင်းထွက် ပြီး ကျန် ဆိုင်ကယ် ၁၀ သန်းကို သံရည်ကျို ဈေးဖြင့် ရောင်းလိုက်ရသည်။ စီးပွားပျက်မလို ဖြစ် သွား ချိန်တွင် ဂျပန် ကုမ္ပဏီ ဟွန်ဒါမှ ဆင်တူယိုးမှား နာမည် သုံးသဖြင့် တရားစွဲခံရသည်။
ယင် သည် ဇွဲမလျော့ဘဲ ဆက်ကြိုးစား ပြန်သည်။ မကြာခင် ပြည်တွင်းတွင် ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ် သည့် စက်ရုံပေါင်း တစ်ထောင် ကျော် ဖြစ်လာ ပြန်ရာ ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန် လာသည်။ ထိုကြောင့် ဗီယက်နမ် ဈေးကွက် သို့ ဝင်ရန် ကြိုးစားသည်။ ဗီယက်နမ် တွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ဟွန်ဒါက ဈေးကွက် အုပ်ထားသည့် အပြင် ယင်၏ Hondga နာမည်ကို တရားစွဲ ထားသောကြောင့် နာမည်သစ် လီဖန်း (Lifan) ကို သုံးကာ ဝင်ပြိုင်ရာမှ မထင်မှတ်ဘဲ ဈေးကွက်သစ် ရရှိ အောင်မြင် ခဲ့သည်။
ယခုအသက် ၇၅ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သော ယင် သည် တရုတ် ၏ အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များမှ တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီး ဝန်ထမ်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်ခန့် ပေးထားနိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ချုံကင်း ပြည်နယ် အစိုးရအကြံပေး အဖွဲ့၏ ဒုဥက္ကဌ လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၂ မှ စ၍ ယနေ့ထိ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်း များ အတွက် ယွမ် (၆၄၁၃) သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စာရင်း အရ လီဖန်း ဆိုင်ကယ်နှင့် လယ်ယာ သုံး စက်များ၊ ကားများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ သို့ ယွမ် (၁၂.၁၆) ဘီလီယံဖိုး ရောင်းချခဲ့ရသည်။
ငယ်ဘဝ နှစ်နှစ်ဆယ် ကို အပြစ်မရှိဘဲ ထောင်ထဲ တွင် အချိန်ကုန်ခဲ့ရသော၊ အသက် ၄၀ မှ စီးပွားရေး စလုပ်ခဲ့ရသော၊ အရှုံးများစွာ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည့် စာအုပ် လက်ပွေ့ ရောင်းသူ သည် နောင် ၂၅ နှစ် အကြာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တွင်တော့အစိုးရသို့ အခွန် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ဆောင်နိုင် သည့် လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လာ သည်။ သူသည် မိခင်တိုင်းပြည် အတွက် အရှုံးမပေး တတ်သော ကျားကုတ် ကျားခဲ ဇွဲကြီးလှသည့် စိတ်ဓာတ် ပိုင်ရှင် သားကောင်း တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၆)
၅။ ရေခဲမုန့် ရောင်းတဲ့ ချောင်ကျင်ဟို
၁၉၄၅ တွင်မွေးသည်။ အတန်းပညာ ပုံမှန်သာ တတ်သည်။ ကျောင်းပြီးချိန်တွင် လယ်တော၌ အလုပ် လုပ်ရသည်။ အသက် ၃၄ နှစ်မှ မိခင်ဖြစ်သူ ကျောင်းဆရာမ အလုပ်မှ အနားယူ သောကြောင့် လုပ်ကျွေးရန် အိမ်ပြန် လာသည်။ မွေးရပ်မြေတွင် အလုပ်ရှာရာ သာမန် ပညာ အရည်အချင်း ဖြစ်၍ အလုပ်ကောင်း မရ။ အလုပ်ကြမ်းများ လုပ်ရင်း ငွေစု နေခဲ့သည်။
အသက် ၄၀ ရောက်မှ ကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် အသေးစား ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်ခွင့် ရသည်။ ထိုနေရာ တွင် စာရေးကိရိယာ၊ အချိုရည်၊ ရေသန့်၊ ရေခဲမုန့် နှင့် နို့ပုလင်းများ ရောင်းရာမှ အကြံပေါ်လာသည်။ ရေခဲမုန့် နှင့် နို့ ကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်ရောင်းမည် ဆုံးဖြတ်ပြီး စက်နှင့် ပစ္စည်းဖိုး အရင်း တွက်ကြည့် ရာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ကျော် (ယွမ် ၁၄၀၀၀၀) ကျနေသည်။ ထို ငွေမရှိ သောကြောင့် အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာ နှစ်ဦး နှင့် ရှယ်ယာ စပ်၍ ငွေချေး လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းရှိ ကလေးများ စိတ် ဝင်စားရန် "ဝါးဟားဟား" ဟု နာမည် တံဆိပ် တပ်၍ ကုမ္ပဏီ တည်ထောင် ခဲ့သည်။
နောင် အနှစ်သုံးဆယ် အကြာတွင် ကျောင်း ကုန်စုံဆိုင်လေးမှ သန္ဓေ စတည်ခဲ့သော ဝါးဟားဟား ကုမ္ပဏီ သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရေသန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ နို့၊ အချိုရည် နှင့် ရေခဲမုန့် ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ချောင်သည် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ၈၅% ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၂၀၁၂ တွင် တရုတ်ပြည်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် စာရင်းတင်ခံရသည်။ ၂၀၁၃ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ နောက်ပိုင်းတွင် အိုင်တီ နည်းပညာ ပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် ချောင်သည် တရုတ် နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး နေရာကို ဒုတိယ မျိုးဆက်မှ အိုင်တီ လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်သော အလီဘာဘာ စီအီးအို "ဂျက်မား" နှင့် ရှောင်းမီ စီအီးအို "လေကျွင်း" သို့ ဖယ်ပေး လိုက်ရသည်။ ၂၀၁၄ တွင် ချောင် ဝင်ငွေ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းပြီး ဝါးဟားဟား၏ ရောင်းအား ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ရှိသည်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီး ကယ်လီချောင် သည် ဝါးဟားဟား၏ အရိုက် အရာကို ဆက်ခံ မည့်သူ ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်၏ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ချောင်၏ လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံ ရှိမည် ဟု ခန့်မှန်း ရသည်။
အသက် ၇၀ ရှိပြီ ဖြစ်သော ချောင်သည် အလုပ် စွဲနေသူ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ထိ လည်း အနား မယူသေး။ နေရာအနှံ့ တွင် သူ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များစွာရှိသည်။ အမေရိကန် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် ကိုင်ထားကာ ကမ္ဘာအနှံ့ သွား၍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကွပ်ကဲ သည်။ ကျောင်း ကုန်စုံဆိုင်လေးတွင် ရေခဲမုန့် နှင့် နို့ရောင်းသည့် ချောင်သည် ကံ စီရင်သမျှကို လက်မခံဘဲ သူ ကြမ္မာ သူ ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
မြောက်မြားစွာသော မီးငှက် မျိုးဆက် များ ကျန်ပါသေးသည်။ ၎င်းတို့ အကြောင်းရေးပါက ကုန်နိုင်ဖွယ် မရှိ။ လက်ရှိ တရုတ် ပြည်မကြီး တွင်ပင် ဘီလီယံနာ ၅၉၆ ဦး ရှိကာ အမေရိကန် ထက် ပိုများပါသည်။ အမေရိကန် တွင် လက်ရှိ ဘီလီယံနာ ၅၃၇ ဦး ရှိပါသည်။ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ် နှင့် မကာအိုရှိ ဘီလီယံနာ ၁၁၉ ယောက် နှင့် ထပ်ပေါင်းပါက စုစုပေါင်း တရုတ် ဘီလီယံနာ ၇၁၅ ယောက် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ တရုတ် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အိမ်ခြံမြေ၊ ဟိုတယ်၊ စူပါမားကတ် နှင့် ရုပ်ရှင်ရုံ ကွင်းဆက် လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်နေသော ဝမ်ဒါ အုပ်စု၏ သူဌေး ဝမ်ကျန်လင် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ (၃၄.၄) ဘီလီယံ ကြွယ်ဝမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ဒုတိယမှာ အလီ ဘာဘာ သူဌေး ဂျက်မား ဖြစ်ပါသည်။
တိန့်၏ တချို့လူတွေကို အရင်ပေး ချမ်းသာ လိုက်ပါ။ ချမ်းသာတာ ကျက်သရေ ရှိပါတယ် ဆိုသည့် မိန့်ခွန်းက တရုတ် တို့၏ ချမ်းသာလိုစိတ် ကို နှိုးဆွခဲ့ပြီး တိန့်ဖွင့် ပေးသော စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်း တံခါးမှ တရုတ် လူငယ်တို့ ထပြေး၍ ကမ္ဘာ အလယ်တွင် အောင်ပွဲ ခံခဲ့ပါသည်။
တရုတ်တို့၏ နည်းပညာ စုပ်ယူမှုများ
တရုတ်ပြည် ခေတ်နောက်ကျ ခဲ့ခြင်းမှာ နည်းပညာ နောက်ကျခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဟု တိန့်က သုံးသပ် သည်။ ဥရောပသည် ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေး တွင် နည်းပညာ အသစ်များ တီထွင် ဦးဆောင်နိုင်၍ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ကာ ချမ်းသာလာသည်။ ယခုရာစုသစ် တွင်လည်း နည်းပညာကို ဥရောပနှင့် အမေရိကန် ကသာ ဦးဆောင် နေသည်။ နည်းပညာ လိုက်မမှီ ပါက ယှဉ်နိုင်ဖို့ မလွယ်။ ထိုကြောင့် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာ ကို အချိန်တို အတွင်း စုပ်ယူရန် စီမံကိန်းများ ချခဲ့သည်။
တရုတ် ခေါင်းဆောင် များမှ ဈေးပေါသော သန်းတစ်ထောင် လုပ်သားဈေးကွက် ကိုပြ၍ အနောက် ကမ္ဘာမှ လုပ်ငန်းရှင်များကို ဆွဲဆောင် သည်။ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်းများ ဖွင့်ပေးသည်။ လုပ်ငန်းရှင် များ ဝင်ရောက်လာသော အခါ တရုတ် အလုပ်သမား များကို အလုပ်ကြမ်း တွင် သာမက ပညာရှင်ပိုင်း တွင်ပါ မဖြစ်မနေ ထည့်သုံးခိုင်းသည်။ လုပ်ငန်းရှင် များလည်း နည်းပညာ ပြရမည့် အပိုင်းကို တရုတ် တို့အား မခိုင်းလို သော်လည်း ဈေးပေါသော လုပ်အား ဈေးကွက်ကို လက်မလွတ် နိုင်၍ အလျော့ပေး လိုက်ရသည်။ တရုတ်များကို ၎င်းတို့ နိုင်ငံသို့ ခေါ်၍ သင်တန်းများ တက်စေပြီး လေ့ကျင့်ပေးရ၏။ ထိုမှ တဆင့် တရုတ်တို့ နည်းပညာ ရရှိလာသည်။
ပြည်တွင်းတွင်လည်း အစိုးရမှ နည်းပညာ အတုခိုးရန် ဌာန တစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်။ ထိုဌာနတွင် အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ပညာရှင်များစွာ ခန့်ထား၍ တရုတ်ပြည်သို့ လာရောက်သော ပြည်ပ စက်ရုံ များမှ နည်းပညာ များကို သုတေသန ပြုစေသည်။ ထိုပြင် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှ ဝယ်ယူ လာသော စက်ရုံဟောင်း များကို နှစ်မျိုး အသုံးချသည်။ တရုတ်တို့ သုံးစွဲရန် ထုတ်ကုန် ထုတ်ခိုင်းသည့် အပြင် ထိုစက်များ အလုပ် လုပ်ပုံကို လေ့လာ စေသည်။ တဘက်တွင်လည်း ဉာဏ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တီထွင်မှု တိုးတက်စေသော ပညာရေး ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်သည်။ ထိုမှတဆင့် တရုတ်တို့သည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက် အတုယူ ကူးချသည့် နေရာတွင်ပါ အလွန်အမင်း ထူးချွန် လာသည်။
ဥပမာ- ဂျေကေရိုးလင်း က ဟယ်ရီပေါ်တာ အတွဲ ၆ မရေးခင် တရုတ်တို့က ကြိုရေး၍ ရောင်းသည်။ အင်္ဂလိပ် လိုရေးသည့် အစစ် ပေါ်လာရင်လည်း ချက်ခြင်း ဘာသာပြန်၍ တင်ရောင်းသည်။ စာရေးဆရာ ၏ ဇာတ်သိမ်း မကြိုက်ရင် ပြင်၍ ပင်ရေးသေးသည်။ တခြား နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ တို့၏ စာအုပ်များ အကုန် ကူးယူခြင်း ခံရသည်။ ဟောလိဝုဒ်တွင် ဇာတ်ကား တစ်ကား ရုံတင်၍ အောင်မြင်ပြီး ခွေ မထုတ်ရသေးချိန် တရုတ်ပြည်တွင် ထိုခွေ စရောင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့် များ ချိုးဖောက် ရာတွင် တရုတ် တို့ကို မှီသူမရှိ။
၁၉၉၀ တွင် ဗောက်(စ်)ဝက်ဂင် ကား ကုမ္ပဏီ တရုတ် သို့ ရောက်လာသည်။ Jekka မော်ဒယ်ကို ထုတ်လုပ်ရာ မကြာမီ သူနှင့် ပုံစံတူ ချယ်ရီကား ပေါ်လာသည်။ ဈေးကို တဝက်ဖြင့် ချရောင်းသည်။ ဂျပန်က ယာမဟာ မော်ဒယ် Jinbao ဆိုင်ကယ်ကို ၁၉၉၅ တွင် ထုတ်ရောင်းသည်။ လအနည်းငယ် အတွင်း Jinbao အတု စက်ရုံ ၃၆ ရုံ ပေါ်လာသည်။ မူရင်းနှင့် ခွဲမရအောင် တူသော ထို ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာ ဈေးကွက် သို့ပင် ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ တရုတ်တို့၏ ထူးခြားချက် မှာ မည်သည့် နည်းပညာ များကို မဆို လျင်မြန်စွာ အတုခိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ် တို့သည် သူတို့ မလုပ် နိုင်သော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အနောက် ကမ္ဘာ မှ ကုမ္ပဏီ များကို ဖိတ်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာ စွာ တင်ဒါ ခေါ်စေသည်။ အကောင်းဆုံး နှင့် ဈေး အသက်သာ ဆုံး ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်သည်။ ထို တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွင် တရုတ် အင်ဂျင်နီယာ တို့ကို မဖြစ်မနေ ထည့်သုံး ရသည်။ ထိုလုပ်ငန်း ပြီးသည် နှင့် တပြိုင်နက် နည်းပညာကို တရုတ်တို့ လက်ထဲ ကျန်ရစ် စေရန် တခါတည်း စီမံထားသည်။ ထိုမှတဆင့် မီးရထားလမ်း၊ ကားလမ်း၊ မိုးပျံရထား၊ ရေအောက်လမ်းများ ဆောက်လုပ်မှု အတတ် ပညာ၊ ရေကာတာ နှင့် ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်ယူမှု၊ မြို့ပြ တည်ဆောက်မှု နည်းပညာ အကုန် တရုတ်တို့ လက်ထဲ ပါသွားပြန်သည်။
ပြည်ပမှ လာရောက် အခြေစိုက် သော ကုမ္ပဏီ များစွာ၏ နည်းပညာများ အားလုံး တရုတ်တို့ လက်ထဲရောက်ကာ တရုတ်ပြည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်။ အနောက်တိုင်းမှ ပညာရှင် များက တရုတ်တို့သည် နည်းပညာကို သုတေသန ဖြင့် အဓိက မရယူဘဲ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ များနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပြုလုပ်ပြီး ထိုမှ တဆင့်စုပ်ယူ ၍ ကြီးထွားစေ ခဲ့သော နိုင်ငံဟု သုံးသပ်ကြ၏။ တရုတ် တို့မှာ နည်းပညာကို စုပ်ယူရင်း တပြိုင်နက် တည်း ကမ္ဘာကျော် မိုက်ခရိုဆော့၊ တိုယိုတာ အစရှိသော ကုမ္ပဏီ တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ နည်းပညာ သုတေသန လည်း ပြုလုပ် နေပါသည်။
၁၉၇၃ တွင် ကုန်သွယ်ရေး ပေါ်လစီနှင့် ပတ်သတ်၍ မော်စီတုန်း နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျား တို့ ပြောခဲ့သော စကားဝိုင်း တစ်ခုရှိသည်။ မော်က တရုတ်ပြည် တွင် ဘာပို့ကုန် မှ မထုတ်လုပ် နိုင်ကြောင်း၊ ပေါပေါ များများ ပို့စရာ အမျိုးသမီး များသာ ရှိကြောင်း စိတ်ပျက်စွာ ပြောဖူးသည်။ ကစ်ဆင်းဂျား မှ ထိုပစ္စည်း များဆို အခွန်မကောက်ပါ ဟုပင် အရွှန်းဖောက် ဖူးသည်။ ယခုတော့ တရုတ် တို့သည် သူတို့ အမျိုးသမီး များကို ပို့မည် မဟုတ်တော့ပါ။ ကလေး တစ်ယောက် ပေါ်လစီ ကြောင့် တရုတ်တို့၏ အမျိုးသမီး လိုအပ်ချက် လွန်စွာ ကြီးမားလာပြီး နှစ်စဉ် သတို့ သမီး သန်း ၂၀ ခန့် ပြန်လို နေပါသည်။ နီးစပ်ရာ မြန်မာ အပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံ များနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ များမှ အမျိုးသမီး များကို ပြန်လည် လူကုန်ကူး၍ ရယူနေပြီ ဖြစ်သည်။
တချိန်က ပြည်တွင်း၌ပင် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်း လုံလောက်အောင် မထုတ်နိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံ သည် နည်းပညာများ စုပ်ယူ၍ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်း အများဆုံး ပြည်ပသို့ ပြန် တင်ပို့သော နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် နှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ သည်။ ထို စွမ်းဆောင်မှု တွင် ခေါင်းဆောင် တို့၏ တိုင်းပြည် အပေါ် စေတနာ ထားမှု နှင့်အတူ ပြည်သူ တို့၏ ကြိုးပမ်းမှု တို့က အခရာ ကျခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်း၊ ချွေတာ သုံးစွဲခြင်း၊ အပင်ပန်းခံ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ရည်မှန်းချက် ကြီးမားခြင်း နှင့် အချင်းချင်း ကူညီ စောင့်ရှောက်ခြင်း တို့သည် တရုတ် မီးငှက် မျိုးဆက်ကို အောင်ပွဲရစေခဲ့သော အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်များကို လုပ်ကိုင်သော မည်သည့် နိုင်ငံသား မဆို ကမ္ဘာ ရှေ့တန်းသို့ ပြန်ရောက် နိုင်သည်ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်လေးဆယ်က ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး တရုတ် နိုင်ငံသား တို့က သက်သေ ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိ မြန်မာ မီးငှက် (ခွပ်ဒေါင်း) မျိုးဆက် အနေဖြင့် လာမည့် နှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း ထိုသို့ ယှဉ်ပြိုင် သက်သေပြ ပြီး ကမ္ဘာ မျက်နှာစာ သို့ ပြန်ရောက်လို လှသည်။
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၇)
နှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း အံ့မခန်း တိုးတက်မှုများ
အမေရိကန်သည် (၁၉၅၀ မှ ၁၉၉၀ ထိ) နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် အတွင်း ဒေါ်လာ ၁ တစ်ထရီလီယံ (ဘီလီယံ ၁၀၀၀) အကုန်ခံ၍ အဝေးပြေး လမ်းမကြီး များ ဖောက်လုပ်သည်။ တရုတ်တို့လည်း ထို နမူနာကို ယူ၍ (၁၉၉၀ မှ ၂၀၂၀ ထိ) နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ် အတွင်း ၎င်းတို့ ၏ ပင်မ အဝေးပြေး လမ်းမကြီး (National Trunk Highway) ကို ကီလိုမီတာ (၈၆၀၀၀) အရှည်ထိ ဖောက်လုပ်ရန် ပစ်မှတ် ချခဲ့သည်။
ထို ပစ်မှတ်ကို သတ်မှတ်ချိန်ထက် ၈ နှစ် စောပြီး ၂၀၁၂ တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်းလမ်းမ ကြီးတွင် တောင်/ မြောက် ချိတ်ဆက် ထားသော လမ်းမကြီး ၉ လမ်းနှင့် အရှေ့ /အနောက် ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းမကြီး ၁၈ လမ်း ပါဝင် သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကီလိုမီတာ တစ်သိန်း တစ်သောင်း ကျော်ထိ ထပ်မံ တိုးမြင့် ဖောက်လုပ် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ထဲက တရုတ်တို့ ၏ ထိုလမ်းကြီးသည် အမေရိကန်တို့၏ အဝေးပြေးလမ်းမ များတွင် အရှည်ဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို လွဲယူ ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ တွင် အဝေးပြေးလမ်းများကို ကီလိုမီတာ သုံးသန်းထိ တိုးမြှင့် ဖောက်လုပ်ရန် ပစ်မှတ် ချထားသည်။ ယခင်က ကြာမြင့် စွာ သွားရသော မြိ်ု့များကို အချိန်နှင့် ကုန်ကျ စရိတ် သုံးပုံ နှစ်ပုံထိ သက်သာ သွားအောင် ပြုလုပ် ပေးနိုင်ခဲ့၍ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အထူး တိုးတက် လာကာ ကုန်စည် စီးဆင်းမှု မြန်ဆန် စေခဲ့သည်။
ကီလိုမီတာ တစ်ထောင်ကိုးရာ ကျော် ရှည်လျားသည့် ကွန်ဟိန်း - တိဘက် မီးရထား လမ်းကို ဖောက်လုပ် ခဲ့သည်။ (၈၁၅) ကီလိုမီတာ ကို ၁၉၈၄ ထဲက ဖောက်လုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် အထက် အမြင့်ပေ (၁၄၅၀၀) ကျော်တွင်ရှိသော (၁၁၄၂) ကီလိုမီတာကို ၂၀၀၆ တွင် ဖောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ အမြင့်ဆုံး မီးရထားလမ်း အဖြစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး တံတားပေါင်း (၆၇၅) ခုပါသည်။ တရုတ် အင်ဂျင်နီယာ တို့မှ အမေရိကန် တို့၏ ဆာရာ နာဗာဒါး (Sierra Navada) ဒေသတွင် ဖောက်လုပ် ခဲ့သည့် ဗဟိုမီးရထား ကွန်ယက်ကို နည်းပညာ အသာစီး ယူ၍ ဖောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာက အသိအမှတ် ပြုရသည်။
ရှန်ဟိုင်းတွင် မြေအောက် မီးရထားလမ်း ငါးလိုင်း ရှိသည်။ နေ့စဉ်လူဦးရေ နှစ်သန်း သယ်ယူ ပို့ဆောင် ပေးသည်။ ယခုနောက်ထပ် ခြောက်လိုင်း တိုးချဲ့နေရာ ပြီးဆုံးပါက ကမ္ဘာအကြီးဆုံး မြေအောက် မီးရထားလမ်း ဖြစ်လာမည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ရှစ်ဆယ်ကျော်က တရုတ် ခေါင်းဆောင် ဆွန်ယက်ဆင်မှ ယန်စီမြစ် နှင့် မြစ်ဝါမြစ်ကို ရေကာတာ ဆောက်ရန် စိတ်ကူး ယဉ်ဖူးသည်။ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါက မြင်းကောင်ရေ သန်း ၁၀၀ ရှိသော စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဆွန်ယက်ဆင် အိမ်မက် သည် ၂၀၁၃ တွင်တော့ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယန်စီမြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာကြီး သုံးခု (Three Gorges Dam) သည် အမေရိကန်တို့ ဆောက်လုပ်ထားသော ရေကာတာ များကို ကျော်တက်၍ ကမ္ဘာ အကြီးဆုံး ရေကာတာ ဖြစ်သွားသည်။ ထိုရေကာတာ များမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် များစွာ ရသည့် အပြင် ချုံကင်း ရေလှောင်ကန်ကို ၂၀၀၄ မှ စ၍ ရေဖြည့် ပေးနိုင်သောကြောင့် ယန်စီ မြစ်ညာပိုင်းနှင့် ချုံကင်းတို့ ဆက်စပ်သွားကာ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောများ ချုံကင်းထိ သွားလာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ချုံကင်းတွင် ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကို ထပ်မံ တည်ဆောက်နေရာ လုပ်ငန်းပြီးစီးပါက ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ်ကို ၇၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့ချ နိုင်မည် ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ ဖြိုးမှုအောင်ပွဲ
၂၀၀၇ တွင် တကမ္ဘာလုံး စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှုန်းတွင် တရုတ်က အမေရိကန်ကို ပထမဆုံး ကျော်တက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် အနေဖြင့် ၁၉၃၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကျော်ခံ လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များ၏ ခန့်မှန်းချက် အရ ၂၀၂၀ တွင် တရုတ် ဂျီဒီပီ သည် ဒေါ်လာ ၃၀ ထရီလီယံ ရှိမည် ခန့်မှန်းထားပြီး အမေရိကန် ဂျီဒီပီမှာ ၂၈ ထရီလီယံ သာ ရှိနိုင်၍ တရုတ်တို့ နံပါတ်တစ် နေရာကို ယူလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ဥရောပသားတို့ နှစ်နှစ်ရာ နီးပါး ဖြတ်သန်းပြီးမှ ရရှိခဲ့ရသော မြို့ပြ တည်ဆောက်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့် နည်းပညာ ဖွံဖြိုးမှု အားလုံးကို တရုတ် တို့က နှစ်နှစ်ဆယ်ဖြင့် အမှီ လိုက်ခဲ့သည်။ ဆယ်ဆ အမြန်နှုန်း ဖြင့် လိုက်ခဲ့သည် ဟုဆိုရမည်။ နည်းပညာ စုပ်ယူမှုကြောင့် မယုံနိုင်ဖွယ် ဧရာမ ခုန်ပျံ ကျော်လွှားမှုကြီး ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ မြို့ကြီးများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ လမ်း တံတားများ၊ ဆိပ်ကမ်းများကို ဤနှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း ပေါ်ထွက်စေခဲ့ပြီး လူပေါင်း သန်း ၄၀၀ ကို ဆင်းရဲတွင်းမှ ဆွဲထုတ်နိုင် ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၂ မှစ၍ ပရောဂျက် ၉၂၁ အမည် ပေးထားသော အာကာသ စီမံကိန်း စတင်ခဲ့သည်။ လူမဲ့ လွှတ်တင်မှုများကို ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်များတွင် လေးကြိမ် စမ်းသပ် လွှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၂၃ တွင် အာကာသယာဉ် ရှင်ဇူး ၅ (Shenzhou -5) ကို လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ် အာကာသ ယာဉ်မှူး ရန်လီဝေ လိုက်ပါ သွား၍ ကီလိုမီတာ ရှစ်သိန်း အထိ ပျံသန်း နိုင်ခဲ့ သည်။ ၂၁ နာရီ ၂၂ မိနစ် ၄၅ စက္ကန့် ကြာသည်။ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၅ တွင် ရှင်ဇူး ၆ ကို လူနှစ်ယောက် လိုက်ပါသွားပြီး ထပ်မံ၍ အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ အာကာသ အောင်ပွဲကို နိုင်ငံ တကာမှ စစ်ရေးအတွက် လွှတ်တင်သည်ဟု သံသယ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တရုတ်တို့သည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အတွက်သာ ဦးတည်ခဲ့သည်။
ဤမျှ တိုးတက်ခဲ့သည့် တရုတ်တို့၏ အတိတ်ကို တချက် ပြန်ကြည့် ရအောင်။
၁၉၇၅ စက်တင်ဘာ တွင် ဗီယက်နမ် အလုပ်သမား ပါတီ အတွင်းရေးမှုး လီဒွပ် တရုတ်တို့ထံမှ အကူအညီ တောင်းခံရန် ရောက်လာသည်။ မော်စီတုန်းက "ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်က အဆင်းရဲဆုံး မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဆင်းရဲ ဆုံးက ကျုပ်တို့။ လူဦးရေ သန်း ၈၀၀ ကျော်တယ်။ စားဖို့တောင် မလောက်ဘူး။ ခေါင်းဆောင် ပိုင်း မှာလည်း လုပ်နိုင်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူး။ ထူထူ ထောင်ထောင် ဆိုလို့ တိန့် တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်" ဟု ညည်းတွား ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မော် သည် ၈၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်းမှာ ဆေးရုံပေါ်တွင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြင့် နောက်ဆုံး အချိန် ဖြတ်သန်းနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကစ်ဆင်းဂျားနှင့် မော် ထပ်တွေ့ခဲ့သည်။ မော်က အမေရိကန် နှင့် ဆိုဗီယက် တို့ နှစ်ဘက် အစည်းအဝေးများ စိပ် လာခြင်းကို သံသယ ရှိနေ၍ ကစ်ဆင်းဂျားမှ လာရောက် ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးရာမှ ကစ်ဆင်းဂျားမှ အမေရိကန်သည် တရုတ်အပေါ် အမြတ်ထုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောသောအခါ မော်က ဒေါပွ၍ ဤသို့ ပြော၏။
မော်စီတုန်း - တရုတ်ဆီက ခင်ဗျားတို့ ထိုင်ဝမ်ကို အမြတ် ထုတ်ပြီး ပြီလေ။
ကစ်ဆင်းဂျား - ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ ညှိပြီးပြီလေ ဥက္ကဌကြီးရယ်။
မော်စီတုန်း - ဟုတ်ပါပြီလေ။ ခင်ဗျား ပြန်ပေး ရင်တောင် ကျုပ်ခု မယူနိုင်ပါဘူး။ နောင် နှစ်တစ်ရာ ဆိုရင်တော့ ပြန်ယူမယ်။
ကစ်ဆင်းဂျား - (ရယ်မောရင်း) နှစ်တစ်ရာတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဥက္ကဌကြီးရယ်။
မော်စီတုန်း - (မျက်နှာကြက် ကို ငေးမောနေရင်း ငိုင်သွားကာ) တကယ်လို့ ကျုပ် ကောင်းကင်ဘုံ မှာ ဘုရားသခင် နဲ့ တွေ့ခဲ့ရင် ထိုင်ဝမ်ကို အမေရိကန် လက်ထဲမှာပဲ ထားမယ် ပြောမိမှာပါ။
ကစ်ဆင်းဂျား - ဗျာ ...... ဘုရားသခင် တော့ အံ့သြ ကုန်တော့မှာပဲ ဥက္ကဌကြီးရယ်။
မော် သည် ထိုင်ဝမ်ကို တရုတ်ပြည်မ ထဲသို့ ရအောင် ပြန်သွင်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ် ထားသည့် အတင်းမာဆုံး လူဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်ကိစ္စမှ လွဲ၍ အမေရိကန်နှင့် အားလုံး ညှိနှိုင်း နိုင်သည် ဟုပြောခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ အနုမြူကိုပင် ဂရုမစိုက်၊ စက္ကူကျား ဟုပြောခဲ့သော ဧရာမ အာဏာရှင်ကြီး ၏ နောက်ဆုံး အချိန် တွင်တော့ ၎င်း၏ ကျဆုံး တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်နေသည့် ထိုင်ဝမ်နှင့် ယှဉ်ကြည့်၍ စိတ် အားလျော့ ခဲ့ဟန် တူပါသည်။
ထို အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံသည် မူဝါဒ ပြောင်းလဲပြီး နောင် နှစ်သုံးဆယ် ခန့် အကြာ တွင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ၏ စူပါ ပါဝါ နေရာကို စိန်ခေါ်လိမ့်မည် ဆိုတာ ကိုတော့ မော် တွက်ဆ နိုင်လိုက် မည် မထင်ပါ။ မော် ကွယ်လွန်ပြီး ၁၉၇၈ ဝန်းကျင်ထိ နိုင်ငံတကာနှင့် ပတ်သတ်မှု မရှိဘဲ အထီးကျန် နေသော တရုတ် တို့သည် တိန့်၏ဦးဆောင်မှု အောက်တွင် ကမ္ဘာ မျက်နှာစာ သို့ပြန်ရောက်လာသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံ တကာ ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ (GATT) ယခု (WTO) ကို လေ့လာသူ အဖြစ် ၀င်ရောက် နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေး ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (IMF) နဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘဏ် တို့၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာ ပါသည်။
ထိုစဉ်က အာရှတိုက်၏ အလားအလာ အကောင်းဆုံး ကြယ်ပွင့် ဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ၁၉၇၄ မဆလ တစ်ပါတီ ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အုပ်ချုပ် လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာဘဏ်တွင် ရှိနေသော စံလင်း ၊မောင်ကောင်း တို့၏ ငွေကြေး အာမခံ ရွှေများ စတင် ကုန်ခမ်း နေပြီ ဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း တရုတ် ခေါင်းဆောင် နှင့် ပြည်သူ တို့ ဆင်းရဲတွင်းမှ ရုန်းထ နေသည့် တချိန်တည်းတွင် စစ်ခေါင်းဆောင် တို့ ၏ မှားယွင်းသော အုပ်ချုပ်မှု ကြောင့် အာရှ ၏ ထိပ်ဆုံး နေရာမှ ကမ္ဘာ ဘိတ်ဆုံး ဆင်းရဲ တွင်း ထဲသို့ ခုန်ဆင်း ခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံ အဖြစ်မှာ ရင်နာစရာ ကောင်းလွန်း လှပါသည်။
ဖီးနစ် သို့မီးငှက် (၈)
တရုတ်တို့ ၏ အံမခန်း တိုးတက်မှုနှင့် အတူ အပြစ် အနာဆာများ ရောပါလာခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ အဆမတန် တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် သဘာဝ ဂေဟ စနစ်ကို ထိခိုက်စေသော ပြဿနာ များစွာပေါ်လာသည်။ ဥပမာ ချုံကင်းမြို့တစ်မြို့ ထဲတွင် နှစ်စဉ် အညစ် အကြေး တန်ချိန် တစ်ဘီလီယံ ထွက်သည်။ ၎င်းကို ယန်စီမြစ်ထဲသို့ပိုက်လုံးကြီးများ နှင့် စွန့် ပစ်နေရာ ရေထု ညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ထိုပမာဏမှာ လျော့ရန် မရှိဘဲ နှစ်စဉ် တိုးရန်သာ ရှိသည်။ သန့် ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိဖို့ လည်း အခက်အခဲ ကြုံနေ သည်။ ရှန်ဟိုင်း တွင် ရရှိနိုင်သော မြေပေါ်ရေ ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း သာ သောက်သုံးရန် စိတ်ချရသည်။
ပီကင်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ ကွမ်ကျိုး ၊ ဟောင်ကောင် စသော မြို့ ကြီးများတွင် လေထု ညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ များပြားလှသော စက်ရုံ များကြောင့် ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု တွင်လည်း အမေရိကန် နှင့် ဂျပန်ကို ကျော်တက် သွားသည်။ ဓာတ် မြေသြဇာ အဆမတန် အသုံးပြု ခြင်းကြောင့် မြေထုတွင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း အာနိသင် များပြားပြီး မြေဆီလွှာ ပျက်ဆီးမှု များ ရင်ဆိုင် နေရသည်။
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဆည်များ ဆောက်လုပ် ခြင်းကြောင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ရရှိပြီး ပို့ ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူလာ သော်လည်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် များစွာ ထိခိုက်ပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေ ခဲ့သည်။ နမူနာ ဆိုရသော် ယန်စီမြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာကြီး သုံးခုကြောင့် လူပေါင်း ၁၃ သိန်း နေရာ ရွေ့ ပေး ခဲ့ရပြီး ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေများစွာ ရေလွှမ်းမိုး ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့် တရုတ်တို့ သည် အနာဂါတ် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အတွက် အခြားနိုင်ငံများတွင် မြစ်ဆုံကဲ့သို့ သော ဆည်များ ဆောက်လုပ်ပြီး ရယူရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ ခြင်းကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ် နေသည်။
လူဦးရေ များပြားခြင်း ကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရန် မွေးမြူရေး တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရသည်။ ထိုနေရာများ တွင် ကြက်/ ငှက် တုပ်ကွေး၊ ဆားစ် ကဲ့သို့ သော ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပါက ထိန်းချုပ်ရန် အလွန် ခက်ခဲသော အနေ အထား ဖြစ်လာသည်။ တခြား အန္တရာယ်ကြီးသော ကူးစက်ရောဂါ များ လည်း ပြန့်ပွားနေသည်။ ၂၀၁၀ တွင် HIV ရောဂါသည် ၁ သန်း ခန့်ရှိသည် ဟုခန့် မှန်းရသည်။
ကွန်မြူနစ် ပါတီ စနစ်ကို မဖျက်သိမ်း သေးသော ကြောင့် လူအခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင် ရာတွင် လည်း ပြဿနာ များစွာ ရှိနေသည်။ စီးပွားရေးကို တိုးတက် ရန်သာ အဓိက တွန်းအား ပေးခဲ့သောကြောင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုတ်ယုတ်မှု များစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အမြတ် ရမည် ဆိုပါက မည်သည့် အလုပ်မဆို မကြောက် မရွံ့ လုပ်လာ ကြသည်။
မူပိုင်ခွင့် ရဲတင်းစွာ ချိုးဖောက် ကြသည်။ အစိုးရ မှလည်း ထိရောက်စွာ အရေးမယူ။ ဈေးပေါသော အလုပ်သမားထု ကြီး ကို မက်၍ လာရောက် ရင်းနှီး မြုပ်နှံသူတိုင်း တရုတ်တို့၏ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှု နှင့် နည်းပညာ စုပ်ယူမှု ခံရသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလီယံ စတင် မြုပ်နှံ ခဲ့သော အနောက် ကမ္ဘာ နှင့် ဂျပန် တို့မှာ အထိအနာဆုံး ဖြစ်သည်။ တွက်ချက်မှု များအရ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဒေါ်လာ ၆၀ ဘီလီယံခန့်နှစ်စဉ် ဆုံးရှုံးသည်။ နည်းပညာ စုပ်ယူ ခံရသည် ကိုပါ ထည့်တွက် ပါက ရင်းနှီး မြုပ်နှံသူများ များစွာအရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် တရုတ်တို့ နှင့် ဆက်ဆံ ရမည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များ စိတ်ကုန် လာကြသည်။
၁၉၈၀ တရုတ်ပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သော ယခု အသက် ၆၀ နှင့် ၇၅ နှစ်ကြားရှိ မီးငှက် မျိုးဆက် များမှာ အလွန် ဆင်းရဲသော တံခါးပိတ် အုပ်ချုပ်မှုအောက် ကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထု မက်မောမှု နည်းသည်။ ပညာ မတတ်ကြ။ နှိမ်နှိမ်ချချ နေကြသည်။ ခြိုးခြိုး ခြံခြံ နေ၍ ပြင်းထန်စွာ ကြိုးစား ကြသည်။ ယခု မျိုးဆက်ကား တရုတ်ပြည် ချမ်းသာချိန်တွင် မွေး၍ နိုင်ငံ တကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း နိုင်သော ပညာ၊ ဘာသာစကား၊ ကြွယ်ဝမှု နှင့် နည်းပညာတို့ရရှိပြီး ယခင် မျိုးဆက် များထက်ပင် အဆမတန် ပိုမို ချမ်းသာလာ ကြသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုပြင်းထန် လာပြီး ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း ဆိုင်ရာ မက်မောမှု၊ ကျင့်ဝတ် မစောင့်ထိန်းမှု၊ အလွန် အမင်း ဇိမ်ခံမှု နှင့် မောက်မာမှု တို့ စတင် သန္ဓေ တည်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ထဲပင် တရုတ် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဝမ်ကျန်လင်၏ သားမှ သာမန်လူ ဝယ်မဝတ် နိုင်သော Apple Watch နှစ်လုံးကို ၎င်းအိမ်မွေးခွေး လက်တွင် ပတ်ပေး၍ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်တင် ကြွားလုံးထုတ် ခဲ့ရာ ဝေဖန်မှု များစွာ ကြုံ့ခဲ့ရသည်။ သိန်းထောင် ဂဏန်းတန် လက်ပတ် နာရီ ပတ်၍ ဓာတ်ပုံ ရိုက်တင် ကြွားသော မြန်မာ နိုင်ငံရှိ သူဌေးသား များကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူတန်းစား ကွာဟမှု အလွန် ကြီးမား လာပြီး အာဏာပိုင် များနှင့် ဘီလီယံနာ များ၏ သားသမီး များမှာ အနောက်ကမ္ဘာမှ အကောင်းဆုံး ပြိုင်ကားများ၊ နာရီ၊ လူသုံးကုန်၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဇိမ်ခံ ပစ္စည်း များ အလျှံပယ် ပြိုင်ဆိုင် သုံးဖြုန်း နေသောကြောင့် ပြည်သူ များကြား မကျေနပ်မှု တိုးပွား လာသည်။
အနောက်ကမ္ဘာမှ တရုတ်ပြည် ထုတ်ကုန် များကို ကန့် သတ်၍ တရုတ် ကြီးထွားလာမှုကို ရပ်တန့် လို လှသော်လည်း တရုတ်တို့ ၏ ကမ္ဘာ အကြီးဆုံး ဈေးကွက် နှင့် ဈေးပေါသော လုပ်သားထု ကို လက်လွတ် မခံနိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေး ကောင်း၍ ဈေးပေါသော ထုတ်ကုန် ရရှိနေခြင်း နှင့် တရုတ် ပြည်တွင်း ကျွံဝင်နေသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များကြောင့် အခက်တွေ့ နေပါသည်။ ဥပမာ အမေရိကန်မှ တရုတ်လုပ် ပုဇွန်၊ သားငါး များကို အရည် အသွေး မမှီဟု ဆိုပြီး ပိတ်လိုက်ရာ တရုတ်ရှိ ဥရောပ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စက်ရုံထွက် ပစ္စည်းများက ပိုများနေသည်။ ဥရောပမှ တရုတ် ပစ္စည်းကို စံချိန်မမှီဟု ဆိုပြီး ပိတ်ပြန်ရာ တရုတ်ရှိ အမေရိကန် လုပ်ငန်းရှင် များ၏ စီးပွားရေး အထိနာပြန်သည်။ ဂျပန် မှာလည်း ရှိသမျှ နည်းပညာနှင့် မူပိုင်ခွင့် များအကုန် ကူးယူခံရသဖြင့် အကြပ်ရိုက် နေသည်။
အာဆီယံ အနေဖြင့် တရုတ်၏ ပါဝါကို ထိန်းချုပ်ချင်သော အနောက်ကမ္ဘာ အတွက် ဈေးပေါသော လုပ်သားထု၊ တန်ဖိုးသင့် အရည် အသွေးရှိ ထုတ်ကုန်များ၊ ဥပဒေ စိုးမိုးမှု နှင့် ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု များ အပေါ် စနစ် တကျ အကာအကွယ် ပေးမှုများ ဖန်တီးပေးနိုင် ပါက အခွင့်အလမ်း ကြီးစွာ ရှိပါသည်။ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း နှင့် မလေးရှား တို့မှာ လုပ်ခ လစာ အတန်အသင့် မြင့်မားနေပြီ ဖြစ်၍ လက်ကျန် မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား တို့ အတွက် အခွင့်အလမ်းကို ရယူရန် အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များစွာ ပြုလုပ်ပြီး ကောင်းစွာ အခွင့်အရေး ယူခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသာ စနစ်ပြောင်းလဲမှု ထိရောက်စွာ လုပ်နိုင်ပါက မဟာဗျူဟာမြောက် ပထဝီ အနေ အထား၊ စိုက်ပျိုးမြေ များပြားမှု၊ သယံဇာတ ကြွယ်ဝမှု၊ ပေါများလှသည့် ရေချို အရင်းအမြစ်၊ သန်းငါးဆယ် ရှိသော ဈေးကွက် နှင့် တနေ့သုံးဒေါ်လာပင် မရသေးသော လုပ်သားထု ကြောင့် ဓားမ နောက်ပိတ်ခွေး ဖြစ်ခဲ့ရသော တိုင်းပြည် ဘဝမှ အာရှ၏ အံ့သြဖွယ်ရာ တစ်ခု အဖြစ် ပြန် ခုန်တက် လာရန် အခွင့် အလမ်း ကြီးစွာ ရှိနေပါသည်။
ဖီးနစ် သို့မီးငှက် (၉) (ဇာတ်သိမ်း)
တရုတ်တို့ သည် ၎င်းတို့နှစ်ရှည်လများ ခံစား ခဲ့ရသည့် မခံချင်စိတ်ကို စစ်ရေးတွင် မဖောက်ခွဲဘဲ စီးပွားရေးတွင် ဖောက်ခွဲခဲ့ ခြင်းကြောင့် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှု ရခဲ့သည်။ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဘဝမှ ထိပ်တန်း နိုင်ငံ များကို လျင်မြန်စွာ ကျော်ဖြတ်လာပြီး ကမ္ဘာ့ဒုတိယ နေရာသို့ရောက်ရှိ လာသည်။ ရာစုသစ်၏ နံပါတ်တစ် အဖြစ် ဆက်ခံဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၏။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး တွင် ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု တွင် ဖြစ်စေ၊ မြောက် ကိုရီးယား အရေးတွင် ဖြစ်စေ တရုတ်တို့မပါဘဲ ဖြေရှင်း၍ မရတော့သော အခြေအနေ သို့ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
စူပါပါဝါ ဖြစ်လာ တော့မည့် ထို တရုတ်နိုင်ငံ သည် တချိန်တုန်းက
- ဥရောပသားတို့ ၏ ဘိန်းကြွေးမှုကြောင့် လမ်းဘေးရှိ လေလွင့် ကလေးလေး များကို လက်တွန်းလှည်း ဖြင့် လိုက်ကောက် ခဲ့ရသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- ဆန်ပြုတ်ဖြူ တပန်းကန်ကို ဆားခတ်ပြီး လူများ ဝိုင်းသောက် ခဲ့ရသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- ကျားမ အားလုံး ဇင်ပိတ်ပြာကိုသာ ဝတ်ဆင် ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- အစာ ငတ်ပြတ်မှုကြောင့် လူသန်း ၃၀ကျော် သေဆုံး ခဲ့ရသော နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။
- ဖက်ဆစ် ဂျပန်တို့ ၏ စော်ကားမှုနှင့် အရှက်ခွဲ ခံရမှုကို အနစ်နာဆုံး ခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- မှားယွင်းသည့် မူဝါဒများကြောင့် တိုင်းပြည် တည်ထောင်ပြီး နှစ်သုံးဆယ် ကျော် ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေ ခဲ့ရသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများကို မကျွေးနိုင်တော့၍ အမေရိကန်သာ လိုချင်ပါက ပို့ ပေးပါမည်ဟု ဇာတိပုည ဂုဏ် မာနကို အောက်ချ၍ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ရသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- စားစရာ မရှိအောင် ဆင်းရဲနေသည့် ကြားမှ ကမ္ဘာ ပါဝါလွန် အမေရိကန်နှင့် စစ်စရိတ် ကြီးမားစွာ တိုက်ခိုက် ခဲ့ရသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ စစ်အင်အား အကြီးဆုံး ဆိုဗီယက် ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကြားမှ အဏုမြူ စစ်အင်အား ရအောင် တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့သော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
- အပေါစား ဖီးနစ်တံဆိပ် ရာဘာ ဖိနပ်ကို နှစ်ပေါက်အောင် စီး၍ ပြည်ပတွင် တနေ့ နာရီ ၂၀ ထိ အလုပ်လုပ်ပြီး ကျွန်ခံခဲ့ရသူ တို့ ၏ နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦး တက်လာပြီး ဦးဆောင်မှု မှန်သည်နှင့် ထို အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံကို နှစ်သုံးဆယ် အတွင်း မျက်လှည့်ပြ သကဲ့သို့ ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတွင် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်နေသော်လည်း တရုတ်တို့ စတင် ကြိုးစား ခဲ့ရသော အခြေအနေ ထက် အခွင့်အလမ်း များစွာ ပိုသာ နေသေးသည်။ ဥပမာဆိုရသော် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းမိုင် (၂၆၁၂၀၀) ရှိသည်။ ဧကဖွဲ့ မယ်ဆိုပါက ဧက ၁၆၇ သန်းကျော် (၁၆၇,၁၆၈,၀၀၀) ရှိ၏။ ရေခဲတောင် နဲ့ကျောက်တောင်ထွဋ် တချို့ မှအပ စိုက်ပျိုး၍ မရတဲ့ နေရာ မရှိ။ တရုတ်ပြည် တွင် စုစုပေါင်း မြေဧရိယာ ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာ စိုက်ပျိုး ၍ ရသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည် အငတ်ဘေးမှ ရုန်းထွက်ချိန်တွင် လူဦးရေ သန်း ၉၀၀ ကျော်ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း မှာ မြန်မာပြည် ကဲ့သို့မဖွံ့ ဖြိုးသေး။ စိုက်ပျိုးမြေ ရှားပါးလွန်း၍ အစစ အရာရာ ချွေတာရသည်။ ထိုချိန်က တရုတ်ခေါင်းဆောင် များမှာ သန်း ၉၀၀ ကျော် ပါးစပ်ပေါက်ကို ထမင်းပုံမှန် ကျွေး နိုင်ဖို့အရူး မီးဝိုင်းနေချိန် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လူဦးရေ ၅၁ သန်း ခန့် သာ ရှိသည်။ မြေဧကနဲ့စားကြည့်ပါက လူတစ်ဦး အတွက် (၃.၂၇) ဧကစာ စိုက်ပျိုးမြေ ရှိ၏။ မိသားစု တစ်စု အတွက် စိုက်ပျိုးမြေ အနည်းဆုံး ၁၅ ဧက ကနေ ဧက ၂၀ ကျော် ရှိသည်။ ကျိန်းသေ ပေါက် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ ရမယ့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ စားနပ် ရိက္ခာ ပိုလျှံပြီး ကမ္ဘာ လူဦးရေ အများဆုံး အဆင့် (၁၊ ၂၊ ၈) ရှိသည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အိမ်နီးချင်း သုံးနိုင်ငံသို့ထုတ်ကုန် များ ကောင်းစွာ ပြန်လည် တင်ပို့ ရောင်းချ နိုင်ရမည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၁၅၆ သန်းကျော် ရှိသော အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သည် ရှမ်းပြည်နယ် အကျယ်အဝန်းသာ ရှိပါသည်။
ရေသယံဇာတ ကိုကြည့်ရအောင်။ ရေချို မြစ်ကြီး ၄ စင်းနဲ့မြစ်ငယ် များစွာ ရှိသည်။ အဖိုးတန် သစ်တောများ၊ မြေဆီလွှာများလည်း ရှိသေးသည်။ မြေအောက် သယံဇာတ (ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့ ၊ ကျောက်မျက် နှင့် တွင်းထွက် ဓာတ်သတ္ထုများ)၊ ပင်လယ် သယံဇာတ နှင့် ပထဝီ အနေအထား အချက်အခြာ ကျမှု ပါထည့်တွက်ရင် အလွန် ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြွယ်ဝမှုသည် ယခင်ကလို စစ်အုပ်စုနှင့် အပေါင်းအပါ တသိုက် တို့ အတွက်သာ မဖြစ်သင့်ပါ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးရှိ အခြေခံ လူတန်းစား များ အတွက်သာ မက ကချင်ပြည် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များအတွက်လည်း ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မိုးခေါင် ရေရှား အညာသား ကြီး များနှင့် နာဂစ် ဒဏ်ခံ ဧရာဝတီတိုင်း အပါအဝင် ရခိုင်ရိုးမနှင့် ချင်း တောင်တန်းမှ တိုင်းရင်းသားများ အတွက်ပါ အကျုံးဝင် ရမည်။ မွန်၊ ကရင်၊ ကယား လူမျိုးစု များနှင့် တနင်္လာရီတိုင်း ကျွန်းစု များမှ မျိုးနွယ်စု များအတွက်ပါ သက်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ရွှေရောင် အခွင့်အလမ်း သည် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က လက်သန်းပြာ များ ထောင်၍ မြန်မာပြည်သို့့ တကျော့ပြန် ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ သို့ သော် အခွင့်အလမ်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရရှိရုံနှင့် မပြီး။ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ပြည်သူတို့ ပြင်းထန်စွာ ကြိုးစားမှ ဓားမ နောက်ပိတ်ခွေး ဘဝမှ လွတ် နိုင်မည် ဆိုသော အချက်ကို ထင်ရှားစေရန် ရည်ရွယ်၍ မီးငှက် စာစဉ် ကိုရေးပါသည်။
အံ့မခန်း ပြောင်းလဲခဲ့သော တရုတ်တို့ ကို လေ့လာကြည့်ပါက
၁။ ခေါင်းဆောင်များ၏ တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် ချစ်စိတ်ရှိခြင်းနှင့် မှန်ကန်သော ဦးဆောင်မှု
၂။ အနောက်ကမ္ဘာမှ ကျော်တက်သွားသော နှစ်နှစ်ရာစာ နည်းပညာကို အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည် စုပ်ယူနိုင်ခဲ့မှု
၃။ အသုံးမဝင်သည့် သန်း တစ်ထောင် လုပ်သားထုကို ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း အတွက် အသုံးဝင်သော သူများ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ ပေးခဲ့သော ပညာရေးစနစ်
၄။ ကွန်မြူနစ် စနစ် ဖြစ်ပါလျက် ရဲတင်းစွာ ဈေးကွက် တံခါးဖွင့်ခဲ့သော မူဝါဒ နှင့်
၅။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု များ ရောက်လာစေခဲ့သော အစိုးရ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ
ကို အဓိက အဖြစ်တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။
အရေးအကြီးဆုံး အချက်မှာ တရုတ် မီးငှက် မျိုးဆက် လူငယ် များ၏ ကြိုးစားမှုပင် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ရောက်နေသော ဖီးနစ်တို့ ၏ ဆင်းရဲတွင်းမှ ခုန်ထွက်လိုစိတ်၊ ရန်သူတော် ဂျပန်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် အနောက် ကမ္ဘာ၏ တိုးတက်မှုကို အောက်ကျ မခံလိုသည့် စစ်မှန်သော အမျိုးသားရေး စိတ်တို့ က ခေတ်သစ် တရုတ်ပြည်ကို မွေးဖွားပေး ခဲ့ပါသည်။
ထို မီးငှက်မျိုးဆက်သည် ယခု အသက် ၇၀ - ၈၀ တန်းကို ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ပျော် နေသော တရုတ် နဂါးကြီးကို ၎င်းတို့့၏ ချွေးစက်၊ မျက်ရည်စက်များ ဖြင့် လန့် နိုးစေ ခဲ့သည်။ ယခု အချိန် တွင်တော့ သူတို့ လက်ဖြင့် ပင်ပန်း ကြီးစွာ တည်ဆောက် ခဲ့ရသော မိခင်နိုင်ငံ အကြောင်း သားသမီး မြေးမြစ် များကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြန်ပြော နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
တချိန်က တိုင်းပြည်က ကျွေးထားခဲ့ရသော တရုတ် လူငယ်တို့၏ ပါးစပ်ပေါက်များကို ခေါင်းဆောင်တို့မှ မိခင်တိုင်းပြည် အတွက် ပြန်အန်ထုတ် ကျွေးမွေး သည့် ပါးစပ်များ ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော နှစ်သစ်မိန့် ခွန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလည်း ပြည်သူတို့ ကို တိုင်းပြည် အတွက် နှစ်သစ် လက်ဆောင် ပေးဆပ် ရန်သာ ပြင်ဆင် ထားဖို့ပြောခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာ မျိုးဆက် အနေဖြင့်လည်း မိခင်တိုင်းပြည်ကို စွမ်းနိုင်သမျှ ပြန်လည် အန်ထုတ် ကျွေးမွေး လိုပါသည်။
တချိန်က အာရှ၏ ကြယ်ပွင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကြားတွင် အစစ အရာရာ အောက်ကျ နောက်ကျ နေခဲ့ရသော မြန်မာ ဖီးနစ် မျိုးဆက်များ၏ ရင်ထဲတွင် ပန်းတွေ ပွင့်နေစရာ အကြောင်း မရှိပါ။ မခံချင်စိတ် ဆူးတွေ သီးနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
လတ်တလော ထိုင်းတွင် ဖြစ်ခဲ့သော ဝင်းနဲ့ ဇော် ကိစ္စ သည် မျက်နှာမွဲ၍ အနိုင်ကျင့်ခံ ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ် သံအမတ် ခေါ်ဆဲ လိုက်သည် နှင့် သစ်ခိုး တရုတ်များကို ၈ ရက်နှင့် လွတ်ပေး ရသည်မှာ လည်း ဆင်းရဲ ၍ ခေါင်းငုံ့ ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မလေးရှားတွင် သတ်ခံရသော ကိုယ့်နိုင်ငံသား များကို ကာကွယ်မှု မလုပ်နိုင် ခဲ့သည်မှာလည်း အင်အားမရှိ သော အခြေအနေ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ တချိန်က ရခိုင်ဘုရင် ပိုင်ခဲ့သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရေပိုင်နက် အချို့ပေးလိုက် ရသည် မှာလည်း ပြည်ပကို ခပ်မာမာ တုံ့ ပြန်နိုင်သော အနေအထား မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ရင်ထဲ အရှက်တကွဲ စူးဝင်ခဲ့ရသော ဆူးများကို ဆွဲနှုတ်ရန် အချိန်ကျ လာပါပြီ။ လာမယ့် နှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း မြန်မာ မီးငှက် များမှ အနာဂါတ် မျိုးဆက် အတွက် သမိုင်းပေး တာဝန် အဖြစ် အမိမြေကို ဆင်းရဲတွင်းမှ အမြန် ဆွဲထုတ်ရပါမည်။
ကွန်မြူနစ်ကြီး တိန့် က "ချမ်းသာတာ ကျက်သရေ ရှိပါတယ်ကွာ" ဟု ပြောခဲ့သည်။ မှန်၏။ အရင် ချမ်းသာဖို့ လိုသည်။ သို့မှသာ မိခင်တိုင်းပြည် နှင့် မောင်နှမ နိုင်ငံသား များကို စောင့်ရှောက် နိုင်မည်။ အထက်ပါ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း မှု များမှ ကာကွယ်နိုင်မည်။
ဒီလောက် အရေးကြီးသော အချိန်တွင် ဘာသာရေး အရေခြုံ အတုအယောင် အမျိုးသားရေးမျိုး ကို အလိုမရှိပါ။ စစ်မှန်သော အမျိုးသားရေး စိတ်ကိုသာ အလိုရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ မျိုသိပ်ခဲ့ရသော နာကျည်းစိတ်ကို စီးပွားရေး တွင် ဖောက်ခွဲကြမည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ခုန်ဆင်း ခဲ့ရသော ဆင်းရဲတွင်းမှ ပြန်တက် ကြမည်။
ရွှေထီး ဆောင်း ခဲ့သော အတိတ်က ရာဇဝင် ရဟတ်ဘီး ကို တပတ် ပြန်လှည့် ပြမည်။
အာရှ၏ နောက်ထပ် အံ့သြဖွယ် အသစ် တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာဖို့ " မြန်မာ မီးငှက်တို့တောင်ပံ စခတ်ကြစို့ " ဟုဆိုရင်း ဤစာစဉ်ကို အဆုံးသတ် ပါသည်။
- ဆရာ ချစ်စံဝင်း၏ “အံ့မခန်း ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက် လာသော တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ့လာချက် စာတမ်း အမှတ်(၅)" ကို အဓိက ကိုးကားပါသည်။
- ဆရာ ချစ်စံဝင်း၏ “တရုတ်နိုင်ငံ ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ လေ့လာချက် စာတမ်း အမှတ်(၄)"
- ဆရာ ကျော်ဝင်း၏ "ရာဇဝင် တွင်ရစ်မယ့် စကားဝိုင်းများ"
- Photo Credit - Internet & Original Uploader
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၁)
မွနျမာပွညျ မွောကျပိုငျးတှငျ ရှေးနှဈပေါငျး (၁.၇ သနျး) မှစ၍ လူသား မြိုးနှယျစုမြား နထေိုငျခဲ့သော နိုငျငံတဈခု ရှိပါသညျ၊ သမိုငျး မှတျတမျးကို (ဘီစီ ၂၂ ရာစု) ထဲက တှရေ့၏၊ ရှေးနှဈလေးထောငျ ကပငျ အဆငျ့မွငျ့ ပိုးထညျ ရကျလုပျတတျသညျ၊ နှဈ ၃၅၀၀ ကြျောထဲက ကွေးသှနျးနှငျ့ ကွှထေညျ လုပျငနျး တတျမွောကျသညျ၊ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေး ပညာမြား ထှနျးကား၏၊ ရအေား စှမျးအငျ၊ ရနောရီ၊ လရေဟတျ၊ ယမျး နှငျ့ ပုံနှိပျ အတတျမြား ကို စောစီးစှာ တတျမွောကျခဲ့၏၊ ကမ်ဘာ့ယဉျကြေးမှု နှငျ့ နညျးပညာ ရှဆေ့ောငျနိုငျငံ ဖွဈခဲ့သညျ၊ ဟငျးခတျ အမှေးအကွိုငျ၊ ကွှထေညျ နှငျ့ ပိုးထညျ မြားကို အနောကျ ကမ်ဘာက မကျမောစှာ ကုနျသှယျ ခဲ့ရ၏၊ ဆောကျလုပျရေး၊ ဆေးပညာ၊ စဈပညာ နှငျ့ နက်ခတ်တဗဒေမြား တဘကျ ကမျးခတျ ထှနျးကားခဲ့သညျ၊ ကမ်ဘာ့ အံ့ဖှယျ မဟာတံတိုငျး တညျဆောကျခဲ့သညျ၊ ၁၈ ရာစုက ဗွိတိသြှတို့ တညျဆောကျခဲ့သော သင်ျဘော မြားထကျ သုံးဆကွီးသော သဈသား သင်ျဘောကို ၁၅ ရာစု ကပငျ ဆောကျလုပျ နိုငျခဲ့သညျ၊ (Treasure) ရတနာ အမညျရှိ သင်ျဘောသညျ တနျခြိနျ ၇၀၀၀ ရှိပွီး နောငျ နှဈလေးရာ ကွာမှ အလားတူ သင်ျဘောမြိုးကို ကမ်ဘာက ဆောကျနိုငျခဲ့သညျ။
ဤမြှ ကွီးမားသော သမိုငျးကွောငျးရှိသညျ့ နိုငျငံသညျ ၎င်းငျးတို့၏ နညျးပညာ၊ ယဉျကြေးမှု အသာ စီးရမှု ကွောငျ့မညျသူကိုမှ အထငျမကွီးဘဲ တံခါး ပိတျဝါဒ ကငျြ့သုံးကာ ကမ်ဘာနှငျ့ အဆကျအသှယျ ဖွတျခဲ့သညျ၊ ဥရောပ၏ စကျမှု တျောလှနျရေး နှငျ့ နညျးပညာ ထှနျးကားမှုကို လဈြလြူရှုခဲ့၏၊ ထို အကြိုးဆကျ မြားကွောငျ့ ၁၉ ရာစု တှငျ ဗွိတိသြှတို့ ကြူးကြျောမှု နှဈကွိမျခံခဲ့ရပွီး သယံဇာတ နှငျ့ အခှငျ့အရေး မြားစှာ ပေးခဲ့ရသညျ၊ (၁၉၁၂) ခုနှဈ တှငျ ယိုငျတိယိုငျတိုငျဖွငျ့ သမ်မတနိုငျငံ စတညျထောငျ သညျ၊ တညျထောငျပွီး ၁၉ နှဈ အကွာတှငျ တိုငျးပွညျ အရှေ့ မွောကျဘကျ ကို ဂပြနျတို့ ကြူးကြျော သိမျးပိုကျသညျ၊ နောငျ ၆ နှဈအကွာ တှငျ တဈနိုငျငံလုံးကို ဝငျရောကျ ကြူးကြျော တိုကျခိုကျသညျ။
ဂပြနျတို့၏ အံ့မခနျး ရကျစကျမှုကို အနဈနာဆုံး ခံခဲ့ရသညျ့ နိုငျငံဖွဈသညျ၊ နမူနာ ပွရသျော နနျဂငျြးမွို့ တမျွို့တညျးတှငျ ဂပြနျတို့မှ လူပေါငျး သုံးသိနျးကြျောအား ခွောကျပတျ အတှငျး နညျးလမျး မြိုးစုံဖွငျ့ ရကျစကျစှာ သတျပွခဲ့သညျ၊ အမြိုးသမီး နှဈသောငျး ကြျော အား အဓမ်မပွုကငျြ့၊ ကိုယျလုံးတီး တနျးစီ မတျတပျရပျခိုငျး၊ ဓာတျပုံ ရိုကျယူပွီး အရှကျ တကှဲ ဖွဈစခေဲ့သညျ၊ ၎င်းငျးတို့၏ မြိုးရိုးမာနျကို ခြိုးနှိမျရနျ တမငျလုပျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ၊ ထိုထဲတှငျ ကိုယျဝနျဆောငျမြား၊ ကလေးငယျ မြား နှငျ့ အရှယျလှနျ အမြိုးသမီး မြား ပါဝငျခဲ့ပွီး ရကျစကျစှာ သတျဖွတျခွငျးလဲ ခံခဲ့ရသညျ၊ မွို့သုံးပုံနှဈပုံကို ရစရာ မရှိအောငျ ဖကျြဆီး ခဲ့သညျ၊ နရောအနှံအပွား ထိုသို့ ကြူးကြျော ခံခဲ့ရသညျ၊ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈတှငျ ဂပြနျတို့ စဈရှုံးမှသာ သကျသာရာ ရခဲ့၏၊ ထိုနောကျ မပွီးဆုံးသေးသော ပွညျတှငျးစဈကို ဆငျနှဲရပွနျသညျ။
ပွညျတှငျးစဈပွီးဆုံးပွီးနောကျ တိုငျးပွညျ ပွနျလညျ တညျထောငျသညျ၊ တညျထောငျပွီး တဈနှဈ အကွာတှငျ ကိုရီယားစဈပှဲ ဖွဈပှားရာ ဝါဒရေးရာ မဟာမိတျ မွောကျ ကိုရီးယား ဘကျမှ ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျသညျ၊ အငျအား ကွီး အမရေိကနျမှ တောငျ ကိုရီးယား ဘကျမှ ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျရာ စဈစရိတျ မြားစှာ ဆုံးရှုံးပွနျသညျ၊ ပွညျတှငျးတှငျလညျး မဟာ ခုနျပြံကြျောလှားမှု၊ ဘုံ လယျယာမွေ စနဈ နှငျ့ ယဉျကြေးမှု တျောလှနျရေး စသညျ့ မူဝါဒ အမှားကွောငျ့ (၂၆ နှဈ) အကွာတှငျ တိုငျးပွညျ သညျ အဆိုးဆုံး အခွအေနသေို့ ရောကျရှိ လာသညျ။
မြားပွားသညျ့ လူဦးရနှေငျ့ ကာမိအောငျ စိုကျပြိုးမွေ မရှိသောကွောငျ့ လူပေါငျး (သနျး ၃၀) ငတျမှတျသကွေခေဲ့၏၊ ပါဝါလှနျ အမရေိကနျ၏ ဘကျပေါငျးစုံ ထိုးနှကျခကျြ ခံရသညျ၊ စူပါပါဝါ ဆိုဗီယကျ၏ စဈရေး ရနျစမှု ပွဿနာ ပျေါလာသညျ၊ အစာ ငတျမှတျခွငျးနှငျ့ လယျယာ မွေ ရှားပါးမှု ကွောငျ့ လူပေါငျးမြားစှာ တိုငျးပွညျမှ ထှကျပွေး၍ အခွားနိုငျငံမြားသို့ ပွောငျးရှေ့ ကာ အောကျခွေ အလုပျသမားမြား အဖွဈ လုပျကိုငျ ရသညျ၊ အင်ျဂလိပျတို့၏ ဘိနျးကြှေး ခဲ့မှု ကွောငျ့ တဈပွညျလုံး ဘိနျးစား ပွဿနာကို ရငျဆိုငျ ရသညျ၊ ဒီကွားထဲ လူဦးရေ ပေါကျကှဲ မှုက သနျး ၁၀၀၀ နီးပါး ရှိလာခြိနျ တှငျ ကြှေးစရာ မရှိသော အစိုးရမှာ အရူးမီးဝိုငျး ဖွဈရပွနျသညျ၊ ဤမြှ မြားပွား သော လူဦးရေ ရှိပါလကျြ ကမ်ဘာက ဝိုငျးပယျထား၍ ကုလသမဂ်ဂသို့ ဝငျခှငျ့ မရခဲ့ခွငျးတို့ကလညျး အကူ အညီမြားစှာ ဆုံးရှုံးစသေညျ့ပွငျ တိုငျးပွညျ သိက်ခာ လညျး ကဆြငျး ခဲ့ရသညျ။
ထိုခြိနျတှငျ စကျမှုတျောလှနျရေး နှငျ့ နညျးပညာမြား လငျြမွနျစှာ ထှနျးကား လာသညျ၊ အမရေိကနျနှငျ့ ဥရောပတို့မှ နညျးပညာတှငျ ပွိုငျဘကျကငျး ဦးဆောငျ လာသညျ၊ ဆိုဗီယကျနှငျ့ အာရှ ကှနျမွူနဈ သွဇာကို ထိနျးခြုပျရနျ အမရေိကနျ၏ ကူညီမှုကွောငျ့ ဂပြနျ၊ တောငျကိုရီးယား စသညျ့ အာရှ ကြားမြား ပျေါလာသညျ၊ ထိုပွငျ အမရေိကနျမှ ၎င်းငျးတို့၏ ခန်ဓာကိုယျထဲ တံကငျြလြှို ပေးသညျ့နှယျ ရနျသူတျော ထိုငျဝမျ ကို စကျမှုနိုငျငံကွီး အဖွဈ တညျထောငျ ပေးလိုကျသညျ၊ နံကွားထဲ ထိုးသညျ့ နောကျ ဓားတခကျြ အနဖွေငျ့ ရနျသူဟောငျး အင်ျဂလိပျ ကလညျး ဟောငျကောငျကို စြေးကှကျ စီးပှားရေး ထူထောငျ ပေးသညျ၊ ပျေါတူဂီ လကျအောကျ ရောကျနသေော မကာအို မှာလညျး လငျြမွနျစှာ တိုးတကျလာသညျ၊ ထိုပွငျ သမိုငျးရနျကွှေး အကွီးဆုံး ဂပြနျသညျ အဆမတနျ ကွှယျဝခမျြးသာ လာသညျ။
ကမ်ဘာကို ကွာမွငျ့စှာ ဦးဆောငျ နိုငျခဲ့သညျ့ မွငျ့မားသော ယဉျကြေးမှု နှငျ့ အံ့မခနျး အနုပညာ မြား ပိုငျဆိုငျသောနိုငျငံ၊ ကယျြဝနျးလှ သညျ့ နိုငျငံဧရိယာ နှငျ့ သမိုငျးဂုဏျ မြိုးရိုးမာနျ ကွီးလှသော ထိုနိုငျငံသညျ ဆငျးရဲမှဲတမှေု၊ ငတျမှတျမှု၊ အနိုငျကငျြ့ စျောကားခံရမှုနှငျ့ အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျး ဖွဈရပျမြားကို ကွိတျမှိတျခံစား နခေဲ့သညျ၊ ၎င်းငျးတို့ လောကျ သမိုငျးဂုဏျ မကွီးကယျြခဲ့သော ဂပြနျနှငျ့ တောငျကိုရီးယား၊ တခြိနျက ပိုငျဆိုငျခဲ့သညျ့ ထိုငျဝမျ၊ ဟောငျကောငျ၊ မကာအို၊ သူတို့ကို ခေါငျးပုံ ဖွတျခဲ့သော ဥရောပ တို့ နှငျ့ မဟာဗြူဟာ ရနျဘကျ ကွီး အမရေိကနျတို့၏ ကွှယျဝခမျြးသာ မှုကို မြှျောကွညျ့ရငျး နာကညျြးစိတျဖွငျ့ အံကွိတျ နခေဲ့ ပါသညျ။
(၁၉၇၈) တှငျ အစိုးရ အပွောငျးအလဲ ဖွဈ၍ ခေါငျးဆောငျကောငျး တဈဦး၏ လကျထဲသို့ လုပျပိုငျ ခှငျ့ အာဏာ ရောကျလာသညျ၊ အုပျခြုပျသူ နှငျ့ စနဈ အကူးအပွောငျး တှငျ ခေါငျးဆောငျ နှငျ့ ပွညျသူမြား အားလုံး ဒီတခါတော့ အလှတျ ရုနျးတော့မညျဟု ဆုံးဖွတျပွီး နနေ့ညေ့ည ကွိုးစား၍ ဆငျးရဲတှငျးမှ ခုနျတကျခဲ့ပါသညျ။
မှနျကနျသောမူဝါဒ ဖျောဆောငျခဲ့သညျ့ ခေါငျးဆောငျကောငျး နှငျ့ ပွညျတှငျး ပွညျပရှိ နိုငျငံသားမြား နှဈဘကျပွိုငျ၍ အနိုငျကွဲခဲ့သော ဇာတျလမျးတဈပုဒျ ဖွဈသညျ၊ တမြိုးသားလုံး တအုံနှေးနှေး ခံစားခဲ့ရသညျ့ နာကညျြးစိတျ ကို စီးပှားရေးဘကျတှငျ ဖောကျခှဲခဲ့သော ကမ်ဘာ ကြျော ပုံပွငျ တဈပုဒျ လညျးဖွဈ၏၊ "ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ ပုံပွငျ" ဟု အမညျ တပျလိုပါသညျ၊ နှဈပေါငျးမြားစှာ အိပျပြျောနခေဲ့သော တရုတျ နဂါးကွီး နိုးလာခဲ့သညျ ဟုလညျး ဆိုနိုငျ ပါသညျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၂)
၁၉၆၀ လောကျမှစ၍ ဆငျးရဲ ငတျမှတျ လှနျး သောကွောငျ့ တရုတျပွညျမှ ပွညျပသို့ ထှကျခှာ လာသော အသကျ ၁၅ နှဈမှ အသကျ ၃၀ ကွား တရုတျ လူငယျ မြိုးဆကျတဈခု ရှိပါသညျ၊ နီးစပျရာ အာရှ နိုငျငံမြား၊ ဥရောပ နှငျ့ အမရေိကတိုကျ သို့ ရရာနညျး ဖွငျ့ ထှကျခှာကွသညျ၊ ရောကျရှိရာ ကမ်ဘာအနှံ့ရရာအလုပျကို ပငျပနျးဆငျးရဲ ကွီးစှာ လုပျကွသညျ၊ ၎င်းငျးတို့၏ တဈခု တညျးသော အာရုံမှာ နာကညျြးစိတျမှ ပေါကျဖှားလာသော ကွီးပှားလို စိတျပငျ ဖွဈသညျ၊ ဘိုးဘှားမြား ပွောပွ သော အတိတျက ခမျးနားသညျ့ ပုံပွငျမြားကို နားထောငျသညျ၊ ကှနျဖွူးရှပျ အဆုံးအမ မြားကို နာယူသညျ၊ ရှရေောငျ လှမျးခဲ့သညျ့ အခြိနျကို အာရုံ ပွုသညျ၊ သို့သျော လကျတှေ့ ရငျဆိုငျ နရေသညျက လူရာ မဝငျသညျ့ ဘဝ နှငျ့ ခကျခဲသညျ့ ပတျဝနျးကငျြ သဈ၊ အမိမွကေို ထပွနျခငျြ လှသျောလညျး မိသားစု အနာဂါတျ ကို စဉျးစားပွီး နရောသဈ တှငျ ရှငျသနျ နိုငျရနျသာ ကွိုးစားကွသညျ။
ရှေးရာစုနှဈမြားက ကွိုရောကျ နသေော တရုတျမြားက ထိုမြိုးဆကျသဈအတှကျ ယဉျကြေးမှု မပြောကျပကျြရနျ ဘုံကြောငျးမြား တညျထောငျ သညျ၊ ဘုံကြောငျးမှတဆငျ့ အတှေး အချေါ၊ ယဉျကြေးမှု နှငျ့ အကူအညီ မြား လကျဆငျ့ကမျး ကာ တရုတျ လူငယျ တို့၏ မခံခငျြစိတျ ကို မွတေောငျမွှောကျ ပေးခဲ့ကွသညျ။
တိုးတကျလိုစိတျဖွငျ့ အလုပျကို ပွငျးထနျစှာ ကွိုးစားသညျ၊ အောကျခွသေိမျး အလုပျမြားကို မခိုမကပျ လုပျသညျ၊ ဥရောပနှငျ့ အမရေိကနျ လုပျငနျးရှငျ မြားမှာ တရုတျတို့ကို ခိုငျးရတာ တနျသညျ၊ ၎င်းငျးတို့ နိုငျငံသားမြား ထကျ လစာ သုံးဆလြော့ပေးသညျ၊ တရုတျ လူငယျ မြားသညျ အိမျထောငျကြ ပွီးတာတောငျ အိမျခနျး ငှားမနကွေ၊ စကျရုံဟောငျးမြားတှငျ ညအိပျကွသညျ၊ ဖွဈသလို စားသညျ၊ အကငြ်္ီမြားကို စုတျပွတျနသေညျ့ အထိ ဝတျသညျ၊ တနေ့ ၁၂ နာရီ အနညျးဆုံး အလုပျ လုပျ၏၊ တခြို့ နာရီ ၂၀ နီးပါး အလုပျလုပျ၍ ၄ နာရီ ခနျ့ သာ အိပျစကျကွသညျ။
ခေါငျးဆောငျး၊ ခါးပတျ၊ ခါးသိုငျးကွိုးမြား မပါသော တရုတျ အလုပျသမား မြားသညျ အထပျ ၈၀ တိုကျ မြား ပျေါတကျကာ တနေ့ ၁၂ နာရီ အလုပျ လုပျကွ သညျ၊ မကွာခငျ တှငျ လုပျငနျးခှငျတှငျ အတျောဆုံး သူမြား ဖွဈလာ သညျ၊ သူတို့နဲ့ ယှဉျသျော ဒသေခံ အလုပျသမား မြားကို လုပျငနျးရှငျမြားမှ မခိုငျး လိုတော့၊ ထိုကွောငျ့ ဒသေခံမြားမှ လုပျစရာ စြေးကှကျ ပြောကျလာ၍ အလုပျသမား သမဂ်ဂကို တိုငျကွား ကွသညျ၊ တရုတျမြား အခြိနျပို အလှနျ အကြှံ ဆငျးနသေညျမှာ ၎င်းငျးတို့၏ အလုပျသမား အခှငျ့ အရေးကို ခြိုးဖောကျရာ ရောကျသညျဟု တငျပွ ကွသညျ၊ ထိုကွောငျ့ တနနေ့ာရီ ၂၀ လုပျခွငျးကို ရပျနား လိုကျရသညျ၊ တရုတျ တို့မှာ မကနြေပျကွ၊ သူတို့မှာ အလုပျ မြားမြားလုပျ၍ ငှမြေားမြား ရလိုသူမြား ဖွဈသညျ။
ငှကွေေးကို တတျနိုငျသမြှ ခြှတော၍ စုဆောငျးသညျ၊ မညျသညျ့လုပျငနျး လုပျနေ သညျဖွဈစေ၊ တနေ့ ကိုယျပိုငျ ဖွဈရမညျဟု စိတျကူး ယဉျကွသညျ၊ တရုတျပွညျထုတျ စြေးအပေါဆုံး ဖီးနဈ (မီးငှကျ) တံဆိပျ သားရေ ဖိနပျမြားကို စုတျပွတျ သညျထိ ဝတျကွသညျ၊ သှားပှတျတံ မြား စုတျပွတျနမှေ အသဈ ဝယျသညျ၊ ထိုကွောငျ့ ဥရောပသား မြားက ဖီးနဈတှေ (အပေါစားကောငျ) ဟု နှိမျချေါကွ၏ ။
ဤကား နိမိတျကွိုဖတျသညျ့နှယျ ဖွဈသညျ၊ ဖီးနဈ ငှကျသညျ ဒဏ်ဏာရီလာ မသသေညျ့ ငှကျမြိုး၊ သခေါနီး အခြိနျတှငျ မီးလြှံထဲသို့ ခုနျခြ၊ နုပြိုမှုမြား ပွနျရပွီး တဖနျ ပွနျ ရှငျသနျ သညျ့ မှျောမီးငှကျ ဖွဈသညျ၊ မညျမြှ ရှုံးနှိမျ့ နပေါစေ၊ မလြော့သော ဇှဲဖွငျ့ မူလထကျပငျ ပိုမို အောငျမွငျအောငျ လုပျခဲ့သူ တို့ကို ဖီးနဈဟု တငျစားကွသညျ။
ဖီးနဈတို့ သညျ ထိုသို့ အနှိမျ ခံရငျး အလုပျစုံ သိမျးကြုံး လုပျကိုငျ၍ နညျးပညာ ယူသညျ၊ ငှကွေေးစုမိ လာသညျနှငျ့ တပိုငျတနိုငျ ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးမြား စ တညျထောငျသညျ၊ တရုတျပွညျမှ ဆှမြေိုး မြားကို ၎င်းငျးတို့ဆီချေါ၍ အလုပျ သှငျးပေးသညျ၊ ရောကျလာသမြှ တရုတျ မြားမှာ အောကျ သကျကွပွေီး အလုပျစုံ သိမျးကြုံး လုပျသညျ၊ အလုပျ ကွိုးစားရငျးနှငျ့ တရုတျ မီးငှကျ မြိုးဆကျသညျ အဝေး မှနေ၍ သူတို့ ခဈြသော အမိမွကေို မြှျောကွညျ့ နခေဲ့ပါသညျ။
၁၉၇၆ တှငျ ကှနျမွူနဈပါတီ ဥက်ကဌကွီး မျောစီတုနျး ကှယျလှနျသညျ၊ ၁၉၇၈ တှငျ အသကျ ၇၄ နှဈအရှယျ အဖိုးအို တိနျ့ရှောငျဖိနျ လကျထဲ အကွှငျးမဲ့ အာဏာ ရောကျရှိ လာသညျ၊ ဦးထုတျနီ ဆောငျးထားသော တိနျ့က "ခမျြးသာတာ မင်ျဂလာပါ" ဟု မိနျ့ခှနျး စခြှသေညျ၊ "ကွောငျဖွူ ကွောငျမညျး အရေးမကွီးဘူး၊ ကွှကျခုတျရငျ ရပွီ" ဟု ဆိုသညျ၊ "အရငျ ခမျြးသာဖို့ လိုသညျ၊ မညျ့သညျ့ စနဈမဆို တိုငျးပွညျ အတှကျကောငျးရငျ လကျခံ မညျ" ဟု ဆိုလိုခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ထိုမိနျ့ခှနျးဖွငျ့ ပွညျတှငျးရှိ တရုတျတှကေို စိတျကူးယဉျ ကှနျမွူနဈ နိဗ်ဗာနျဘုံ ထဲမှ လှုပျနိုးလိုကျသညျ၊ လနျ့နိုးလာ၍ ဘေးပတျဝနျး ကငျြ ကို ကွညျ့လိုကျရာ အားလုံး နတျဘုံ နတျနနျး လို ဖွဈနပွေီ၊ မခံခငျြစိတျက ငယျထိပျဆောငျ့ တကျလာသညျ၊ ဥက်ကဌ မျော၏ သွဝါဒ မြားကို မလေို့ကျပွီ၊ ကုနျထုတျ လုပျငနျး တှငျ ၎င်းငျးတို့၏ ပွငျးပွသော ခံစားခကျြ မြားကို ဖောကျခှဲရနျ အသငျ့ဖွဈပွီ။
တိနျ့သညျ အာဏာ ရပွီးသညျနှငျ့ နိုငျငံရေး၊ ပညာရေး နှငျ့ စီးပှားရေး ပွုပွငျ ပွောငျးလဲမှု မြားစှာ လုပျသညျ၊ နိုငျငံရေး တှငျ စဈကို ရှောငျရှားရနျ ရနျလိုသော မူဝါဒ အစား စီးပှားရေးသာ အဓိက မူဝါဒကို ပွောငျးလိုကျသညျ၊ အာရှနိုငျငံ မြားသို့ ကှနျမွူနဈ အတှေး အချေါ ထုပျပိုး တငျပို့ ခွငျးကို ရပျဆိုငျးလိုကျသညျ၊ ဥက်ကဌ မျော လကျထကျထဲက အစပြိုးခဲ့သော အမရေိကနျ နှငျ့ ဆကျဆံရေး ပွနျလညျ ကောငျးမှနျ လာသညျ၊ အမရေိကနျ ကို မဟာ ဗြူဟာ ရနျဘကျမှ မဟာဗြူဟာ ပွိုငျဘကျ အဆငျ့ သို့လြော့ခြ နျိုငျခဲ့သညျ။
တိနျ့သညျ စြေးကှကျ စီးပှားရေး စနဈကို ရဲရဲ ကငျြ့သုံးခဲ့၏၊ တရုတျသညျ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ကှနျမွူနဈစနဈ ကို မဖွိုဖကျြဘဲ နှငျ့ စြေးကှကျ စီးပှားရေး တညျဆောကျ အောငျမွငျခဲ့သော ပထမဆုံး အံ့မခနျး မျောဒယျသဈ ဖွဈ၏၊ နိုငျငံပိုငျ မွယော အမြားစုကို ပုဂ်ဂလိက ပိုငျဆိုငျမှု ပွောငျးပဈ သညျ၊ ပွညျသူပိုငျ စကျရုံ မြားကို ပုဂ်ဂလိက သို့ လှဲပေးသညျ၊ စကျမှုဇုနျမြား သတျမှတျ၍ နိုငျငံခွားသား မြား စြေး သကျသာစှာ ငှားရမျး လုပျကိုငျနိငျရနျ စီစဉျပေး၏၊ လုပျငနျး လုပျကိုငျမှု မွနျဆနျရနျ ကွိုးနီ စနဈကို လြော့ခပြဈ၏၊ ဆိပျကမျးမြား၊ စကျမှုဇုနျမြား တှငျ လိုအပျသော အခွခေံ အဆောကျအအုံ၊ ဆကျသှယျရေး စနဈမြား ပွညျ့စုံစှာ တပျဆငျ ပေးသညျ၊ ပွညျပ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု မြားကို အပွညျ့အဝ ကာကှယျပေးသညျ။
နိုငျငံခွားသား ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု ကို အားပေးသော ဥပဒေ မြားစှာ ထုတျပွနျခဲ့သညျ၊ စကျကိရိယာ မြား တငျသှငျးပါက အခှနျ ကငျးလှတျ ခှငျ့ ပွုသညျ၊ ပွညျပ ရငျးနှီး မွုပျနှံမှုကို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး အထိ ခှငျ့ပွုသညျ၊ တခြို့နရော မြားတှငျ ကာလ တဈခု အထိ ရာခိုငျနှုနျးပွညျ့ အမွတျခှနျ ကငျးလှတျ ခှငျ့ ပွုသညျ၊ တရုတျ နိုငျငံသား တို့နှငျ့ ဖကျစပျ လုပျကိုငျပါက အခှနျ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး ထပျမံ လြော့ခွငျး တို့ကို ပွုလုပျသညျ၊ ယခငျက ပွညျပ ထှကျခှာ သှားသော တရုတျမြားကို သစ်စာဖောကျ ဟု သတျမှတျသော အစဉျ အလာကို ပွောငျးလဲ၍ လူငယျမြားကို နိုငျငံ ရပျခွား သို့ သှားရောကျ ပညာ သငျရနျ သို့အလုပျလုပျရနျ လှယျကူ အောငျ စီစဉျ ပေးသညျ။
ကမ်ဘာ့နညျးပညာကို ပွနျဦးဆောငျနိုငျရနျ နှငျ့ ပွညျပမှ လာရောကျ ဖှငျ့လှဈသော စကျရုံ မြားတှငျ လိုအပျသော ကြှမျးကငျြ လုပျသား ရရှိရနျ ပညာရေး စနဈကို အဓိကထား ပွုပွငျ ခဲ့သညျ၊ ကှယျလှနျသှားပွီ ဖွဈသော ဝနျကွီးခြုပျ ခြူအငျလိုငျး ၏ ပညာရေး ပွုပွငျရနျ အတှေးအချေါ ကို တိနျ့က ဆကျခံသညျ၊ ၁၉၇၈ မှ စ၍ စာမေးပှဲ ဦးတညျ ကကျြမှတျ ပညာရေးမှ နိုငျငံ အတှကျ လိုအပျသော အရညျ အသှေး ရရှိစမေညျ့ ပညာရေး ဖွဈရနျ ပညာရှငျ မြားနှငျ့ အကွိမျကွိမျ ညှိနှိုငျး၍ ဥပဒေ မြားစှာ ထုတျ၊ အပွီးတိုငျ ပွငျဆငျ ခဲ့သညျ၊ ခြူနှငျ့ တိနျ့ တို့ မြိုးစခြေ့ ခဲ့သော ကမ်ဘာ အဆငျ့ ပညာရေး အောငျမွငျမှု အိမျမကျကိုတော့ ၎င်းငျးတို့ မမွငျတှေ့ နိုငျလိုကျပါ၊ နောငျ နှဈနှဈဆယျ အကွာ ကနျြဇီမငျး လကျထကျ တှငျ သီးပှငျ့ လာသော အဆငျ့မှီ ပညာရေး ကို တမလှနျမှ ခေါငျးဆောငျ နှဈဦး မွငျပါက ပီတိ ဖွဈနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
ခေါငျးဆောငျကောငျး တကျလာပွီ ဆိုသညျနှငျ့ ပွညျတှငျး ပွညျပမှ တရုတျတို့၏ စိတျအား ပွနျတကျလာသညျ၊ ပွညျပရောကျ ဖီးနဈမြားမှာ နိုငျငံရေး နှငျ့ စီးပှားရေး ပွောငျးလဲမှု သတငျးမြား နားထောငျပွီး ထိနျးသိမျး မရအောငျ တကျကွှ လာသညျ၊ အမိမွေ ကို လှမျးလှပွီ၊ ဆှမြေိုး တှနှေငျ့ ပွနျတှခေ့ငျြပွီ၊ ပွညျပတှငျ မှေးခဲ့သော သားသမီးတှကေို မိခငျတိုငျးပွညျ ကို ပွနျချေါပွမညျ၊ ကိုယျမွကေိုယျရေ တှငျ ကိုယျ့ကွမ်မာ ကိုယျ ဖနျတီးကွမညျ၊ ၂၀၀၀ ခုနှဈ ပွညျ့ခါနီး တှငျတော့ ဖီးနဈမြား သူတို့ ခဈြသောမွကေို ပွနျလာ ပါပွီ၊ အလုပျကွမျး သမား မြား ဘဝဖွငျ့ ပွနျလာခွငျး တော့ မဟုတျ၊ သကျဆိုငျရာ နိုငျငံမြားမှ အရငျးအနှီး နှငျ့ နညျးပညာမြား ယူ၍ ပွနျလာခွငျး ဖွဈသညျ။
အပေါစား ဖိနပျ စီးသော မီးငှကျတို့ မကွာခငျ တောငျပံ ထခတျတော့ မညျ ဖွဈသညျ၊ နာကညျြး စိတျဖွငျ့ အံကွိတျ နခေဲ့ရသော ကာလမြား၏ နောကျဆုံး အခြိနျ နီးကပျ လာပါပွီ၊ ခေါငျးဆောငျ နှငျ့ နိုငျငံသား မြား ပွိုငျတူထ တှနျးရာမှ ရာဇဝငျ ရဟတျဘီး တပတျ ပွနျလညျတော့ မညျဖွဈပါသညျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၃)
အမိမွေ ပွနျလာသော ဖီးနဈ တို့ကို ခေါငျးဆောငျ မြားက နှေးထှေးစှာ ကွိုဆိုသညျ။ တရုတျပွညျကို ပွနျတညျဆောကျရနျ ၎င်းငျးတို့ အားပါမှ ရမညျကို ကောငျးစှာသိသညျ။ ဦးစှာ ပွညျပ ဖီးနဈတို့ ၏အားကို အသုံးပွု၍ ကုနျထုတျ လုပျငနျး မွငျ့တငျမညျ ဆုံးဖွတျသညျ။ ဖီးနဈတို့ကို ကြေးလကျ မြားတှငျ စကျရုံမြား တညျထောငျ နိုငျရနျ ငှခြေေး ပေးသညျ။ ရညျမှနျးခကျြ ကွီးသော ဖီးနဈ တို့သညျ မကွာမီ တရုတျ ကြေးလကျ တှငျ ကိုယျပိုငျစကျရုံ မြား တညျထောငျ လာကွသညျ။ ဘာသာစကား တတျမွောကျ လာခွငျး၊ ပွညျပ အတှေ့ အကွုံ၊ နညျးပညာ မြား နှငျ့ အဆကျ အသှယျ မြား ပါလာခွငျး တို့ကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့သညျ တရုတျ စီးပှားရေး၏ အဓိက မောငျးနှငျ အား ဖွဈလာသညျ။
ကမ်ဘာ အရပျရပျရှိ ၎င်းငျးတို့ အလုပျကွမျး လုပျခဲ့သော စကျရုံဟောငျး မြားကို အောကျစြေး နှိုကျကာ ပွနျဝယျယူ သညျ။ ထိုသို့ ဝယျယူနိုငျရနျ အစိုးရ မှ ငှထေုတျခြေးသညျ။ ထိုစကျအစုတျ မြားမှ အခွခေံ နညျးပညာမြား ရှာဖှသေညျ။ နညျးပညာဟောငျး မြားသညျ တရုတျတို့ အတှကျ တော့ အသဈပငျ ဖွဈသညျ။ ထိုမှ တဆငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ဉာဏျနှငျ့ ပေါငျး စပျကာ နညျးပညာသဈမြား တီထှငျသညျ။
ပွညျပရောကျ တရုတျဖီးနဈတို့၏ အဆကျ အသှယျ နှငျ့ နညျးပညာ ရရှိလာမှု၊ တရုတျပွညျ၏ စီးပှားရေး မူဝါဒ ပွောငျးလဲမှု၊ စြေးပေါသော အလုပျသမား မြားစှာ ရှိမှုတို့ကွောငျ့ ကမ်ာဘအရပျရပျမှ စီးပှားရေး သမား မြား တရုတျပွညျ သို့ လာရောကျ ရငျးနှီး မွုပျနှံ ကွသညျ။ အစိုးရမှ နှေးထှေးစှာ ကွိုဆို၍ ဥပဒနှေငျ့ အကာအကှယျ ပေးသညျ။
ထိုခြိနျတှငျ အနောကျကမ်ဘာ နှငျ့ ဂပြနျ လုပျငနျးရှငျတို့ ရငျဆိုငျရသော ပွဿနာမှာ လုပျအားခ စြေးကွီးခွငျး နှငျ့ အလုပျသမား အခှငျ့အရေး မြားစှာပေးရခွငျး ဖွဈသညျ။ တိနျ့က စြေးပေါသော အလုပျသမား ထုကွီး ကို ပွကာ ပွညျပ ရငျးနှီး မွုပျနှံမှု မြားကို ဖိတျချေါသညျ။ လုပျသား စြေးကှကျ ကို မကျမောသဖွငျ့ ပွညျပ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု မြား ဝငျရောကျလာ သညျ။ ပွညျတှငျးနှငျ့ ပွညျပ မှ ပွနျလာသော တရုတျ လုပျသား မြားမှာ နိုငျငံခွား စကျရုံ မြားနှငျ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားတှငျ အလုပျ ဝငျလုပျကွသညျ၊ နညျးပညာ မြားကို လငျြမွနျစှာ အတုခိုး ကွသညျ။ ပွညျပမှ ပွနျရောကျ လာသော တရုတျမြားသညျ တကမ်ဘာလုံး မှ နညျးပညာ အခွခေံမြား တတျမွောကျပွီး ဖွဈရာ လငျြမွနျစှာ အတုခိုးနိုငျသညျ။
ဥပမာ ဆိုရသျော အီတလီသို့ ၁၉၈၉ တှငျ ခိုးဝငျလာသော ဝမျရီဟှား သညျ ရောကျခါစတှငျ အသကျ ၁၉ နှဈသာ ရှိသေး သညျ။ အကငြ်္ီဆိုငျတှငျ မဖွဈစလောကျ လခ ဖွငျ့ အလုပျလုပျသညျ။ ငှကေိုစုပွီး လမျးဘေး အထညျဆိုငျ ဖှငျ့သညျ။ ထိုမှ တဆငျ့ အရောငျး သှကျလာကာ ဆိုငျကွီး ဖွဈလာသညျ။ အကငြ်္ီ ဒီဇိုငျးမြားကို မှတျသားပွီး အီတလီ ဒီဇိုငျးနာ တဈဦးကို အလုပျခနျ့၍ ဒီဇိုငျးဆှဲစသေညျ။ ထိုနောကျ တရုတျပွညျ ပွနျပို့၍ ခြုပျစသေညျ။ ဝမျ၏ ဒီဇိုငျးမြားကို တရုတျပွညျမှ တသှေ မတိမျး လကျရာတူ ပွနျခြုပျ၍ အီတလီ သို့ ပွနျပို့သညျ။ အီတလီရှိ အလုပျသမားခ ထကျ ဆယျဆ သကျသာ သှားပွီး အမွတျ အစှနျး မြားစှာ ရရှိ၍ မကွာခငျတှငျ Great Fashion ကုမ်ပဏီ တညျထောငျသညျ။ အီတလီ အထညျခြုပျ လုပျငနျး မြားကို ယှဉျပွိုငျသညျ။ အရညျအသှေး ထပျတူ ကွပွီး လုပျအားခ သကျသာလှသော တရုတျ အထညျ မြားကို အီတလီ အထညျခြုပျ လုပျငနျးရှငျ မြား မယှဉျနိုငျဘဲ ပိတျသိမျးရသညျ အထိ ဖွဈကုနျသညျ။
ထိုကွောငျ့ တရုတျမြားနှငျ့ ယှဉျပွိုငျနိုငျရနျ အီတလီ လုပျငနျးရှငျမြားမှ လုပျခ စြေးပေါသော တရုတျပွညျတှငျ စကျရုံ တညျဆောကျ၍ ခြုပျလုပျပွီး ပွနျပို့ရနျ စီစဉျသညျ။ အီတလီမှ ဒီဇိုငျးနှငျ့ ခြုပျနညျးစနဈ ပို့ပေးလိုကျသညျ။ မကွာခငျတှငျ တရုတျပွညျ စကျရုံရှိ တရုတျ လုပျသား တို့မှ ဒီဇိုငျးနှငျ့ နညျးပညာ အကုနျ ရယူသှားရာ အီတလီ အထညျ လုပျငနျးရှငျ မြားမှာ ဆုပျလညျးစူး စားလညျးရူး ဖွဈကုနျသညျ။
အမရေိကနျတှငျ စဈလကျနကျ ထုတျလုပျသော ရော့ချဖို့ဒျ အမညျရှိ မွို့ ရှိသညျ။ ထိုမွို့ရှိ ဆနျးထရငျး ကုမ်ပဏီမှ လယောဉျ အဆငျးအတကျ ကိစ်စမြားကို ထိနျးခြုပျသော အီလကျ ထရောနဈ နညျးပညာကို တီထှငျခဲ့သညျ။ ထိုနောကျ ၎င်းငျးတို့၏ စကျရုံပစ်စညျး အဟောငျး မြားကို စှနျ့ပဈရာ ဖီးနဈတို့မှ စြေးပေါပေါဖွငျ့ ဝယျယူသှားပွီး နညျးပညာ ရယူခဲ့ပွနျသညျ။ ထိုမွို့ရှိ အငျကာဆို ကား ထုတျလုပျရေး စကျရုံဟောငျးကွီး ကို ရောငျးခပြွနျရာ ဖီးနဈမြားမှ ဝယျယူပွီး တရုတျ ပွညျ သို့ စကျရုံတဈခုလုံး ဖွုတျသယျသှားသညျ။ ထိုစကျရုံဟောငျးမှ နညျးပညာကို လလေ့ာပွီး နညျးပညာသဈ ပံ့ပိုး၍ ကားသဈမြား ထုတျလုပျခဲ့သညျ။ ထိုမှတဆငျ့ တရုတျတို့ ကား ထုတျလုပျရေး နညျးပညာ ရသှားပွနျသညျ။
ထိုပွငျ အငျကာဆို စကျရုံ ၏ ရဒေါ မမိအောငျ ပွုလုပျသညျ့ သတ်ထုမြား ထုတျလုပျ သညျ့ သံပွားကွိတျစကျ ကို ဖီးနဈတို့ အမှိုကျစြေးဖွငျ့ ဝယျရနျ ခြောငျးနေ ပွနျသညျ။ တရုတျတို့ စှနျ့ပဈစကျရုံ ပစ်စညျးမြားကို နညျးပညာရယူရနျ လိုကျဝယျ နခွေငျးကို စီအိုငျအေ ပငျ သတိ မထားမိပါ။ ကှနျဂရကျ အမတျ မနျဇာလို မှ သတိ ထားမိလာ၍ အစိုးရကို အသိပေး သောကွောငျ့ ထို စကျရုံ ပစ်စညျးဟောငျး မြားကို တရုတျ တို့ကို မရောငျးဘဲ အီတလီ ကုမ်ပဏီ ကမျမိုဇီ သို့ ရောငျးလိုကျသညျ။ အမရေိကနျ မသိလိုကျ သညျမှာ ကမျမိုဇီ သညျလညျး တရုတျ အစိုးရမှ တဘကျလှညျ့နှငျ့ အီတလီ တှငျ ဟနျပွ ထောငျထားသော ကုမ်ပဏီ ဖွဈသညျ။ မကွာခငျ တှငျ ထိုစကျရုံဟောငျးနှငျ့ နညျးပညာ အကုနျ တရုတျတို့ လကျထဲပါ သှားပွနျသညျ။
ဂြာမနီ သညျ ဥရောပ စီးပှားရေး၏ အဓိက မောငျးအားဖွဈသညျ။ စကျမှု အထှနျးကားဆုံး ဒသေမှာ ဒေါ့မှနျမွို့ဖွဈသညျ။ ထိုမွို့သို့ တရုတျ ဖီးနဈ မြားသညျ ပနျးကနျဆေး၊ သနျ့ရှငျးရေး စသညျ့ အောကျခွေ အလုပျမြားလုပျရနျ ရောကျလာသညျ။ ဖိနပျစုတျ စီး၍ ငှစေုသညျ။ ဘာသာ စကား သငျသညျ။ ထိုနောကျ နညျးပညာကို ကွိတျ အတုယူသညျ။ အရငျးအနှီး နှငျ့ နညျးပညာ ရသညျနှငျ့ တရုတျပွညျ သို့ ပွနျယူသှားကာ စကျမှု လုပျငနျး ပွနျ ထူထောငျသညျ။ ထိုဖီးနဈ မြားသညျ ၂၀၀၀ ခုနှဈကြျောတှငျ ဂြာမနီသို့ ပွနျလာသညျ။ ယခငျ ကလို အလုပျကွမျးသမား အဖွဈတော့ မဟုတျ။ လုပျငနျးရှငျမြား အနဖွေငျ့ ဖွဈသညျ။ သူတို့တှငျ အစိုးရ ခြေးငှပေါလာသညျ။
ဒေါ့မှနျ တှငျရှိသညျ့ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈထဲက လကျကနျြ သံတိုသံစ မြားကို အမှိုကျစြေးဖွငျ့ ဝယျသညျ၊ အမှိုကျမြားကို မမွငျလိုသညျ့ ဂြာမနျမြားမှ ပေါပေါနှငျ့ ရောငျးလိုကျသညျ။ ထိုနောကျ လနျဒနျရှိ သံရညျကွို စကျရုံဟောငျး အစိတျအပိုငျး မြား ဝယျပွနျသညျ။ ဂြာမနီရှိ သကျဆငျကရပျ သံမဏိ စကျရုံကွီးကို အောကျစြေး (ဒျေါလာ ၃၇.၂ သနျး) ဖွငျ့ ဝယျသညျ။ ထိုနောကျ တရုတျပွညျသို့ သံတို သံစနှငျ့ စကျရုံ အစိတျအပိုငျး မြားပို့၍ ပွနျလညျ တပျဆငျကာ သံမဏိပွားမှ ထုတျလုပျကာ တရုတျ သံမဏိခတျေ ပွောငျးစခေဲ့ သညျ။ ထိုဖွဈရပျမြားမှ သံမဏိ ဘုရငျ ရှနျဝနျယုံ စသူတို့ ပျေါထှကျ လာသညျ။
သံတိုသံစမြား ရှငျးလငျးသှားသော ဒေါ့မှနျမွို့ လမျးမကွီးတှငျ အီတလီမှ နညျးပညာ ရယူလာ သော ဖီးနဈမြားမှ အထညျခြုပျ စကျရုံမြား လာဖှငျ့သညျ။ ၎င်းငျးစကျရုံထှကျ အထညျမြားမှာ စြေးခြို၍ အရညျအသှေး ကောငျးလှသော ကွောငျ့ ဂြာမနျ အိမျရှငျမ မြားတနျးစီ ဝယျကွသညျ။ ယခငျက ဂြာမနီတှငျ အိုးတိုကျ ပနျးကနျဆေး ခဲ့သော တရုတျဖီးနဈ တို့ မှာ ၎င်းငျးတို့ ဆီမှ အထညျမြား တနျးစီ ဝယျနသေညျ့ ဂြာမနျ အိမျရှငျမ မြားကို စောငျ့ကွညျ့၍ ပီတိဖွဈ နခေဲ့ပါသညျ။
နမူနာ တခြို့ ဖွဈပါသညျ။ တရုတျ ပစ်စညျး မြားကို စားသုံးသူက ကွိုကျနတေော့ ပွိုငျရ ခကျလှသညျ။ တခြိနျက တရုတျပွညျကို ဘိနျးစဈဖွငျ့ အဓမ်မ တံခါး တှနျးဖှငျ့၍ ဝငျလာခဲ့သော ဥရောပသားမှာ တရုတျတို့၏ လုပျသား နှငျ့ စြေးကှကျ စဈ ဖွငျ့ ပွနျ တိုးဝငျလာ ခွငျးကို အလူးအလဲ ခံနရေသညျ။ အမရေိကနျ နှငျ့ ဂပြနျ တို့ပါ ပွေးမလှတျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၄)
၁၉၇၅ ဝနျးကငျြတှငျ တရုတျပွညျ ရငျဆိုငျရသော အဓိက ပွဿနာမှာ မွယော ရှားပါးမှုနှငျ့ လူဦးရေ ပေါကျကှဲမှုပငျ ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ မတူသညျ့ အခကျြမှာ တိုငျးပွညျ ကွီးသျောလညျး စိုကျပြိုးမွေ ရှားပါးခွငျး ဖွဈသညျ။ တိုငျးပွညျ၏ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျး သာ စိုကျပြိုး၍ ရသောမွဖွေဈသညျ။ နရော အမြားစုမှာ ကြောကျတောငျမြား၊ သဲကန်တာရ မြား ဖုံးလှမျးနသေညျ။ ထိုကွောငျ့ မကွာခဏ စားနပျ ရိက်ခာ ပွတျလပျမှု ဖွဈပွီး လမျးမ ပျေါတှငျ လူမြား သဆေုံးသညျ အထိ ဖွဈရသညျ။ တရုတျပွညျ တညျထောငျ ကာစ ၁၉၅၃ တှငျ လူဦးရေ ၅၈၂.၆ သနျးရှိပွီး ၁၉၇၅ ရောကျ လာသောအခါ လူဦးရေ သနျး ၉၀၀ ကြျောလာ သညျ။ လူဦးရေ အဆမတနျ တိုးလာ သျောလညျး ကုနျထုတျ လုပျငနျး မတိုးတကျလာ။ ပွညျပသို့ ပို့ရနျ မဆိုထားနှငျ့၊ ပွညျတှငျး၌ပငျ မလုံလောကျ။ တရုတျ ခေါငျးဆောငျ မြားမှာ တိုးလာသော ပါးစပျ ပေါကျ မြားကို ဘယျနညျးဖွငျ့ ရှာကြှေး ရမညျ မသိဘဲ အရူးမီးဝိုငျး ဖွဈနသေော အခြိနျ ဖွဈသညျ။
တိနျ့သညျ ကုနျထုတျလုပျငနျး မတိုးတကျသညျ့ ကိစ်စကို အလေးအနကျ စဉျးစားသညျ။ လူဦးရေ ဆကျတိုးနသေော ကွောငျ့ တိုငျးပွညျက ကြှေးရ မညျ့ ပါးစပျပေါကျ မြားလာသညျ။ ကုနျထုတျ လုပျငနျးတှငျ သုံးမရသညျ့ ပါးစပျပေါကျ မြားလေ၊ တိုငျးပွညျ ဆငျးရဲလေ ဖွဈသညျ။ လမျးပျေါတှငျ အလုပျမရှိဘဲ ဟိုယောငျ ဒီယောငျ လုပျနသေော လူငယျစုကို မိခငျ တိုငျးပွညျအတှကျ ရုနျးကနျခိုငျး မညျဟု ဆုံးဖွတျသညျ။ တရုတျ လူငယျမြား ကုနျထုတျ လုပျငနျးတှငျ ဘာကွောငျ့ မအောငျမွငျ လဲကို လလေ့ာရာ ရှေးရိုး စာမေးပှဲ ဦးတညျ ကကျြမှတျ ပညာရေး ကွောငျ့ ဆိုသညျကို တှရေ့ သညျ၊
တရုတျတို့ အရိုးထဲ စှဲမွဲနသေော ပညာရေး မှာ နနျးတှငျးသို့ ဝငျ၍ ကဗြာ၊ စာမြား အလှတျ ရှတျပွ ကာ အစဈခံသော ပညာရေး ဖွဈသညျ၊ ဖတျအားကောငျး သူမြားသာ အောငျမွငျသော စနဈဖွဈသညျ၊ ထိုသူမြားကို ဘုရငျမှ ပညာရှိ အဖွဈ ရှေးခယျြ၍ သူကောငျးပွုသညျ၊ ထိုစနဈသညျ အလှတျကကျြ ပညာရေး ဖွဈသဖွငျ့ တရုတျတို့၏ ဉာဏျပိုငျးဆိုငျရာ တီထှငျ ဖနျတီးမှု ဆုတျယုတျ စသေညျ ဟု တိနျ့က ဆုံးဖွတျသညျ၊ ထိုကွောငျ့ ၁၉၈၀ မှစ၍ တီထှငျ ဖနျတီးတတျသော ဦးနှောကျ ဖွဈစေ ရနျနှငျ့ ကုနျထုတျလုပျငနျး အတှကျ အသုံးဝငျ ရနျ ပညာရေး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု မြားစှာ လုပျခဲ့သညျ၊ ပညာရေး ပွငျဆငျခကျြပေါငျး ၂၀၀ ကြျော ပွဌာနျးခဲ့သညျ။
တိနျ့ ၏ ပညာရေး ပွောငျးလဲမှုက နောငျ ၁၀ နှဈ ကြျောအကွာတှငျ အကြိုး သကျရောကျ လာသညျ။ တရုတျ တို့၏ ဗီဇ အသိဉာဏျ ကောငျးမှနျမှု၊ တအုံနှေးနှေး ပေါကျကှဲလိုသော အမြိုးသားရေး စိတျ နှငျ့ ကွီးပှားလိုစိတျ တို့ကို ပညာရေးဖွငျ့ လမျးခငျးပေးမညျ။ ထိုနောကျ စီးပှားရေး သို့ လမျးကွောငျးလှဲ ပေးလိုကျပါက လူငယျတို့ စိတျပါသှား နိုငျသညျ ဟု ခေါငျးဆောငျတို့ တှကျဆ၏။ တှကျကိနျး မလှဲခဲ့ပါ။ လမျးမ ပျေါတှငျ ဘာစလုပျရမှနျး မသိ၍ အခြိနျကုနျ နသေော တရုတျလူငယျ တို့မှာ အသိပညာ အနညျးငယျ ရသညျ နှငျ့ ကုနျထုတျ လုပျငနျး လမျးကွောငျးပျေါ ခုနျတကျလာသညျ။
တရုတျပွညျ အဆမတနျ တိုးတကျခဲ့ရာတှငျ ပွညျသူ လူထုကို ခနျြ၍မရ။ ထိုစဉျက တရုတျ မြိုးဆကျမှာ ကမ်ဘာ အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံတှငျ ကွီးခဲ့ရာ အလုပျ ကွိုးစား သလောကျ အသုံး အစှဲ လညျးခြှတောလှ သညျ။ မွဆေီ မွသွေဇာ မကောငျးသော မွမှော စိုကျပြိုးစကောမူ တရုတျတို့ တဧက ထှကျနှုနျးသညျ မွသွေဇာ ကောငျးသော ပါကစ်စတနျ၏ ထှကျနှုနျး ထကျ ပိုသညျဟု တရုတျပွညျ လာလညျသော ပါကစ်စတနျ တရားသူကွီးခြုပျ မှတျတမျး တငျဖူး သညျ။ ပွညျသူရော အစိုးရရော ဟနျပွအလုပျ လုပျတာ မရှိ။ ရိုးရိုးစငျးစငျးသာ ကွိုးစားကွ သညျမှာ ပါကစ်စတနျတို့ အတုယူဖှယျဟု ဆိုခဲ့ပါသညျ။ ထိုကွောငျ့ ခေါငျးဆောငျတို့က လမျးခငျး ပေးလိုကျ သညျနှငျတပွိုငျနကျ ခုနျတကျ ခဲ့သော လူထု၏ စုပေါငျး အားမာနျက တိုငျးပွညျကို ဆငျးရဲတှငျးမှ ဆှဲထုတျ ခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။
တရုတျမီးငှကျ မြိုးဆကျမှ အခြို့ကို နမူနာပွ လိုပါသညျ။
၁။ သံမဏိသူဌေး ရှနျဝနျယုံ
၁၉၄၆ တှငျ ရှနျစီမွဈ အောကျဘကျရှိ ရှာငယျလေး တှငျ မှေးသညျ။ အစာရစော အမွဲ ငတျမှတျသော ရှာလေးဖွဈသညျ။ အသကျ ၂၄ နှဈတှငျ ခညျြမြှငျ စကျရုံ တဈခုတှငျ အလုပျကွမျး လုပျရသညျ။ ထိုစကျရုံ တှငျ အလုပျ လုပျနရောမှ နောကျပိုငျး စကျမှု လုပျငနျး ဖှငျ့ဖွိုး၍ စကျရုံမြား တညျပါက သံမပါလြှငျ မပွီးသညျကို သဘော ပေါကျလာ သညျ။ ထိုကွောငျ့ ငှကွေေး စုဆောငျး၍ သံတိုသံစ မြား နှငျ့သံရညျကြို စကျ အဟောငျး တဈလုံး ဝယျကာ လုပျငနျး စတငျသညျ။
အသကျ ၂၉နှဈတှငျ Shagang Group ကို စတညျထောငျသညျ။ တိနျ့ အာဏာ ရလာသော အခါ ငှခြေေးပေးခွငျး၊ ကိုယျပိုငျ လုပျငနျး ခြဲ့ရနျ အားပေးခွငျးကွောငျ့ ရှနျသညျ အလုပျရုံ ထပျ တိုးခြဲ့သညျ။ အလုပျသမား မြားပိုမို ခနျ့ထား၍ လညျပတျရာမှ လုပျငနျး အောငျမွငျ လာသညျ။ သူ့စကျရုံမှ တဈနှဈ သံတနျခြိနျ နှဈသိနျးခှဲ ထုတျ နိုငျလာသညျ။ ထိုနောကျ လုပျငနျး တိုးခြဲ့လို၍ အင်ျဂလနျမှ လြှပျစဈ သံရညျကြို စကျရုံ အဟောငျး ကွီး ကို ဝယျယူရနျ ကွိုးပမျးသညျ။ မအောငျမွငျဘဲ ငှကွေေး ဆုံးရှုံးမှု မြား ဖွဈသှား သညျ။ ၁၉၉၂ အသကျ ၄၆ နှဈတှငျ အကွှေးမြား ပတျလညျ ဝိုငျးနပွေီ ဖွဈသညျ။ စိတျဓာတျ ကလြှနျး ၍ အားလြော့ခါနီး တှငျ တိနျ့မှ "သတ်တိ နညျးနညျး ပိုရှိလိုကျ" ဟုတိုငျးပွညျကို လှုံ့ ဆျော ရာမှ စိတျပွနျ တငျး၍ ကွိုးစားသညျ။ ထိုမှ လုပျငနျးမြား ပွနျ လညျပတျလာသညျ။
၁၉၉၅ တှငျ တရုတျ စီးပှားရေး ၁၄ ရာခိုငျနှုနျး တိုးတကျ လာသညျ။ ကမျးစပျမွို့မြားတှငျ စကျမှုဇုနျမြား တညျထောငျ ပေးရာမှ လငျြမွနျစှာ ဖှံဖွိုး လာသညျ။ တရုတျမြား ငှကွေေးပွလေညျ လာသညျ။ မကွာခငျ ကားဝယျစီးလိမျ့မညျ ဟု ရှနျက တှကျဆပွီး ကားတှငျ တပျဆငျမညျ့ သံမဏိပွား ထုတျလုပျရနျ ကွိုးစားသညျ။ ထိုနောကျ ၂၀၀၁ ခုနှဈတှငျ ဂြာမနျ သံမဏိ စကျရုံဟောငျး သကျဆငျကရပျ ကို အောကျစြေး ဒျေါလာ ၃၇.၂ သနျးဖွငျ့ ငှခြေေးဝယျသညျ။ ထိုကွောငျ့ ကမ်ဘာက သူ့ကို သတိထား မိလာသညျ။ ထိုစကျရုံကို သူဇာတိ မွို့ ကိုသယျဆောငျ၍ မူလီတဈခြောငျး မကနျြ ပွနျ တပျဆငျ၍ သံမဏိပွား စထုတျသညျ။ ၂၀၀၄ တှငျ သံမဏိ စြေးကောငျး လာရာမှ ရှနျသညျ အကွှေး မြား ကွကော အလှနျ ခမျြးသာ ကွှယျဝလာသညျ။
၁၉၇၅ က ခြေးငှေ ယှမျ လေးသိနျးခှဲနှငျ့ စခဲ့သော သူ့ ကုမ်ပဏီ Shagang Group သညျ ၂၀၀၇ တှငျ အလုပျသမားပေါငျး ၂၆၇၀၀ ကို အလုပျပေးနိုငျပွီး ပိုငျဆိုငျမှု ယှမျ ဘီလီယံ ၁၀၀ ကြျော ကွှယျဝ လာသညျ။ နှဈစဉျ သံတနျခြိနျ ၂၃ သနျး ထုတျလုပျ ပေးနပွေီး ကမ်ဘာအနှံ သို့ ပွနျလညျ တငျပို့ ရောငျးခြ သညျ။ တရုတျပွညျ၏ အကွီးဆုံး ပုဂ်ဂလိကပိုငျ သံမဏိ စကျရုံ ဖွဈသညျ။
ရှနျသညျ တိုငျးပွညျ အပွောငျးအလဲ ဖွဈခြိနျ သူ့ အသကျ၂၉ နှဈတှငျ ထရုနျးကနျ ခဲ့သော မီးငှကျ မြိုးဆကျ တဈဦး ဖွဈပွီး ယခု ၆၉ နှဈ ရှိပွီ ဖွဈသညျ။ ငတျပွတျနသေညျ့ မိခငျနိုငျငံကို ထမငျး ပွနျခှံ့ ကြှေးခဲ့သော သားကောငျး တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါသညျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၅)
၂။ ခေါကျဆှဲခွောကျကို လယောဉျလေးစီးနှငျ့ လဲခဲ့သူ
လယောဉျလေးစီး ကို ခေါကျဆှဲခွောကျ ဖွငျ့ လဲလို့ ရမညျဟု သငျထငျပါသလား။ တရုတျ ဖီးနဈ တဈယောကျ ကတော့ လဲပွ ဖူးပါသညျ။ သူ့နာမညျက မျောကီခြောငျး။ ၁၉၇၉ တှငျ ထောငျမှ လှတျလာ သညျ။ အစိုးရထံမှ ငှခြေေးကာ နိူးစကျနာရီ မြားစရောငျးသညျ။ ထိုမှ တဆငျ့ အမွတျ ရရှိလာသညျ။ ကွီးပှားမညျ့ အခှငျ့အလမျး ရှာဖှရောမှ စီခြှမျ လကွေောငျးလိုငျး အကွောငျး သိလာသညျ။ ၎င်းငျးတို့မှာ လယောဉျ ဝယျ၍ ပြံသနျး လိုသျောလညျး ဝယျရနျ ငှမေရှိ။ ၎င်းငျးတို့ လိုခငျြသော လယောဉျမှာ ဆိုဗီယကျတှငျ ရှိသညျ။
မညျသို့ အကြိုးဆောငျရငျ ကောငျးမလဲ စဉျးစားရာမှ ဆိုဗီယကျတို့လညျး လူသုံးကုနျ ပစ်စညျးမြား အရေးတကွီး လိုအပျ နသေညျကို သိလာသညျ။ တရုတျမှာလညျး အသေးစား လုပျငနျးမြား ဖှံ့ ဖွိုး နပွေီဖွဈရာ ထိုပစ်စညျး မြား ကောငျးစှာ ထုတျနိုငျသညျ။ ထိုကွောငျ့ ဆိုဗီယကျ တာဝနျရှိသူ မြားကို သှားရောကျ၍ အထညျ၊ ဖိနပျနှငျ့ ခေါကျဆှဲခွောကျ မြားကို လယောဉျနှငျ့ လဲရနျညှိသညျ။ ဆိုဗီယကျ တို့က လယောဉျကို ရောငျးရနျသာ စိတျဝငျစား သျောလညျး မျောကီခြောငျး အကွိမျကွိမျ ညှိရာမှ သဘောတူပွီး အလဲအလှယျ ဖွဈသှားသညျ။ နောကျဆုံး တရုတျ လုပျ အထညျ၊ ဖိနပျနှငျ့ ခေါကျဆှဲခွောကျ ရထား အစီးငါးရာတိုကျ ဖွငျ့ ဆိုဗီယကျ လယောဉျ လေးစီး လဲယူခဲ့သညျ။ ထိုဖွဈရပျ ပွီးနောကျ မျောကီခြောငျးမှာ နာမညျကွီး လာပွီး ဆိုဗီယကျ အာဏာပိုငျ မြား နှငျ့ ရငျးနှီး လာကာ ဆိုဗီယကျ ဂွိုလျတု လှတျတငျရေး တှငျပါ ရငျးနှီး မွုပျနှံခဲ့သညျ။
မဖွဈနိုငျဟု ထငျရသော အရောငျးအဝယျကို စိတျရှညျစှာ ရအောငျ အကွိမျကွိမျ ညှိနှိုငျး ခဲ့သညျ့ မျော သညျ တရုတျတို့ ၏ စိတျကူး အကောငျးဆုံး လုပျငနျးရှငျမြားတှငျ ပါလာ သညျ။ မွနျမာတို့ ၏ ပွနျမရနိုငျသော သဘာဝ သယံဇာတ မြားကို တနျဖိုး မရှိသညျ့ တရုတျ ထုတျကုနျမြားနှငျ့ လဲနရေခွငျးနှငျ့ နှိုငျးယှဉျ စခေငျြပါသညျ။ မျောက တော့ စီခြှမျ လကွေောငျး သမိုငျးတှငျ ခေါကျဆှဲခွောကျ နှငျ့လယောဉျ လဲစီးခဲ့သူ ဟု သမိုငျးဝငျ ခဲ့သညျ။
၃။ အခြိုရညျ လုပျငနျးရှငျ လီရှောငျဟှေး
ငယျစဉျ စာသငျနခြေိနျတှငျ ယဉျကြေးမှု တျောလှနျ ရေး ဂယကျကွောငျ့ ရုရှားနယျစပျ ပို့ခံရပွီး တောငျသူ လုပျရသညျ။ ပညာရေး တပိုငျးတစ ဖွဈသှားသော လီရှောငျဟှေးမှာ အသကျ ၃၀ မှ မွို့ပျေါ ပွနျရောကျသညျ။ ရောကျရောကျခွငျး လုပျစရာ အလုပျမရှိ၍ နာရီတု မြား ရောငျးခသြညျ။ ထိုနောကျ ထို အလုပျကို မကွီးပှား နိုငျဟု ဆုံးဖွတျ စှနျ့လှတျကာ အမရေိကနျ လုပျ ပကျစီ၊ ကိုကာကိုလာ မြား စရောငျးသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ အခြိုရညျ ကိုယျတိုငျထုတျလုပျပွီး ရောငျးခြ သညျ။ထိုလုပျငနျးကို ဇောကျခြ လုပျကိုငျရာမှ ၁၉၉၄ တှငျ တရုတျပွညျ၏ ဒုတိယ အကွီးဆုံး အခြိုရညျ လုပျငနျးရှငျ ဖွဈလာသညျ။
၄။ အသကျ ၄ဝမှ စာအုပျလကျပှေ့ ရောငျးရသူ (သို့) လီဖနျး သူဌေး ယငျမငျရှနျ
၁၉၄၀ တှငျမှေးသညျ။ အသကျ ၁၈ နှဈ အရှယျတှငျ လကျယာ အတှေးအချေါ လှမျးမိုးသညျ ဆိုပွီး ကြောငျးထုတျခံရသညျ။ နောကျ သုံးနှဈအကွာတှငျ အရငျးရှငျ ဝါဒ ကိုငျးညှတျသညျ ဆိုကာ ထောငျ ၉ လ ခခြံရသညျ။ အသကျ ၂၃ ရောကျသော အခါ သူငယျခငျြး ဖွဈသူကို အမရေိကနျ သှားနိုငျရနျ ကူညီမိ သောကွောငျ့ သစ်စာဖောကျဟု တံဆိပျ တပျပွီး အလုပျကွမျးနှငျ့ ထောငျဒဏျ အနှဈ နှဈဆယျ ခခြံရပွနျသညျ။ အသကျ ၄၀ ဝနျးကငျြ တှငျ ထောငျမှ လှတျလာသညျ။
ထောငျမှ လှတျလာခြိနျတှငျ ဝနျထမျးလုပျရနျ စစဉျးစားသညျ။ တိနျ့ အာဏာရသှားပွီး စီးပှားရေး မူဝါဒ ပွောငျးလဲမညျ ဟု သတငျးကွား၍ ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ ဖွဈကာ ကိုယျပိုငျလုပျငနျး ထူထောငျရနျ ကွံစညျသညျ။ အစိုးရဆီမှ အသေးစား ခြေးငှေ ခြေး၍ စာအုပျလကျပှေ့ ရောငျးသညျ။ ဝနျထမျး ဘဝထကျ ဝငျငှပေိုရ လာသညျ။ မကွာမီ စာအုပျဆိုငျ ပိုငျရှငျ ဖွဈလာသညျ။ စာအုပျဆိုငျ ထိုငျရငျး အသှားအပွနျ လုပျနသေော လူမြားကို ကွညျ့ကာ မျောတျော ဆိုငျကယျ ရောငျးရငျ ကောငျးမလား ဟု အတှေး ပျေါလာသညျ။ ထိုနောကျ ၁၀ နှဈနီးပါး လုပျကိုငျ ခဲ့သော စာအုပျဆိုငျကို ရောငျးခကြာ ဆိုငျကယျ စတငျ ထုတျလုပျရနျ စီစဉျသညျ။
အသကျ ၅၂ အရှယျ ၁၉၉၂ တှငျ ယငျ သညျ ဝနျထမျး ၉ ယောကျငှားကာ ခြုံကငျး မွို့တှငျ ဆိုငျကယျ ထုတျလုပျရနျ စတငျသညျ။ ကနဦး ရငျးနှီးငှေ (ဒျေါလာ ၃၆၀၀၀) ဖွဈသညျ။ ဂပြနျ ဟှနျဒါ (Honda) ကို သဘောကြ၍ သူဆိုငျကယျကို (Hongda) ဟု ဆငျတူယိုးမှား နာမညျပေးသညျ။ မကွာမီ ပွညျတှငျး စြေးကှကျတှငျ အောငျမွငျ လာသညျ။ ထိုနောကျ စြေးကှကျ ကို မခနျ့မှနျးဘဲ ယုံကွညျမှု လှနျကဲပွီး ဆိုငျကယျ ၁၅ သနျး ထုတျလိုကျရာ ၅ သနျးသာ ရောငျးထှကျ ပွီး ကနျြ ဆိုငျကယျ ၁၀ သနျးကို သံရညျကြို စြေးဖွငျ့ ရောငျးလိုကျရသညျ။ စီးပှားပကျြမလို ဖွဈ သှား ခြိနျတှငျ ဂပြနျ ကုမ်ပဏီ ဟှနျဒါမှ ဆငျတူယိုးမှား နာမညျ သုံးသဖွငျ့ တရားစှဲခံရသညျ။
ယငျ သညျ ဇှဲမလြော့ဘဲ ဆကျကွိုးစား ပွနျသညျ။ မကွာခငျ ပွညျတှငျးတှငျ ဆိုငျကယျ ထုတျလုပျ သညျ့ စကျရုံပေါငျး တဈထောငျ ကြျော ဖွဈလာ ပွနျရာ စြေးကှကျ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျ လာသညျ။ ထိုကွောငျ့ ဗီယကျနမျ စြေးကှကျ သို့ ဝငျရနျ ကွိုးစားသညျ။ ဗီယကျနမျ တှငျ ဂပြနျကုမ်ပဏီ ဟှနျဒါက စြေးကှကျ အုပျထားသညျ့ အပွငျ ယငျ၏ Hondga နာမညျကို တရားစှဲ ထားသောကွောငျ့ နာမညျသဈ လီဖနျး (Lifan) ကို သုံးကာ ဝငျပွိုငျရာမှ မထငျမှတျဘဲ စြေးကှကျသဈ ရရှိ အောငျမွငျ ခဲ့သညျ။
ယခုအသကျ ၇၅ နှဈရှိပွီ ဖွဈသော ယငျ သညျ တရုတျ ၏ အခမျြးသာဆုံး လုပျငနျးရှငျမြားမှ တဈယောကျ ဖွဈလာပွီး ဝနျထမျး ၅၀၀၀ ကြျောကို အလုပျခနျ့ ပေးထားနိုငျခဲ့သညျ။ လကျရှိ ခြုံကငျး ပွညျနယျ အစိုးရအကွံပေး အဖှဲ့၏ ဒုဥက်ကဌ လညျး ဖွဈပါသညျ။ ၁၉၉၂ မှ စ၍ ယနထေိ့ လူမှုအကြိုးပွု လုပျငနျး မြား အတှကျ ယှမျ (၆၄၁၃) သနျး လှူဒါနျးခဲ့သညျ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈ စာရငျး အရ လီဖနျး ဆိုငျကယျနှငျ့ လယျယာ သုံး စကျမြား၊ ကားမြားကို ပွညျတှငျး ပွညျပ သို့ ယှမျ (၁၂.၁၆) ဘီလီယံဖိုး ရောငျးခခြဲ့ရသညျ။
ငယျဘဝ နှဈနှဈဆယျ ကို အပွဈမရှိဘဲ ထောငျထဲ တှငျ အခြိနျကုနျခဲ့ရသော၊ အသကျ ၄၀ မှ စီးပှားရေး စလုပျခဲ့ရသော၊ အရှုံးမြားစှာ ရငျဆိုငျ ခဲ့ရသညျ့ စာအုပျ လကျပှေ့ ရောငျးသူ သညျ နောငျ ၂၅ နှဈ အကွာ ၂၀၁၄ ခုနှဈ တှငျတော့အစိုးရသို့ အခှနျ ဒျေါလာ ၁၅ သနျး ဆောငျနိုငျ သညျ့ လုပျငနျးရှငျ ဖွဈလာ သညျ။ သူသညျ မိခငျတိုငျးပွညျ အတှကျ အရှုံးမပေး တတျသော ကြားကုတျ ကြားခဲ ဇှဲကွီးလှသညျ့ စိတျဓာတျ ပိုငျရှငျ သားကောငျး တဈဦး လညျး ဖွဈပါသညျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၆)
၅။ ရခေဲမုနျ့ ရောငျးတဲ့ ခြောငျကငျြဟို
၁၉၄၅ တှငျမှေးသညျ။ အတနျးပညာ ပုံမှနျသာ တတျသညျ။ ကြောငျးပွီးခြိနျတှငျ လယျတော၌ အလုပျ လုပျရသညျ။ အသကျ ၃၄ နှဈမှ မိခငျဖွဈသူ ကြောငျးဆရာမ အလုပျမှ အနားယူ သောကွောငျ့ လုပျကြှေးရနျ အိမျပွနျ လာသညျ။ မှေးရပျမွတှေငျ အလုပျရှာရာ သာမနျ ပညာ အရညျအခငျြး ဖွဈ၍ အလုပျကောငျး မရ။ အလုပျကွမျးမြား လုပျရငျး ငှစေု နခေဲ့သညျ။
အသကျ ၄၀ ရောကျမှ ကြောငျး တဈကြောငျးတှငျ အသေးစား ကုနျစုံဆိုငျ ဖှငျ့ခှငျ့ ရသညျ။ ထိုနရော တှငျ စာရေးကိရိယာ၊ အခြိုရညျ၊ ရသေနျ့၊ ရခေဲမုနျ့ နှငျ့ နို့ပုလငျးမြား ရောငျးရာမှ အကွံပျေါလာသညျ။ ရခေဲမုနျ့ နှငျ့ နို့ ကို ကိုယျတိုငျ ထုတျရောငျးမညျ ဆုံးဖွတျပွီး စကျနှငျ့ ပစ်စညျးဖိုး အရငျး တှကျကွညျ့ ရာ ဒျေါလာ ၂၀၀၀၀ ကြျော (ယှမျ ၁၄၀၀၀၀) ကနြသေညျ။ ထို ငှမေရှိ သောကွောငျ့ အငွိမျးစား ကြောငျးဆရာ နှဈဦး နှငျ့ ရှယျယာ စပျ၍ ငှခြေေး လုပျကိုငျခဲ့သညျ။ ကြောငျးရှိ ကလေးမြား စိတျ ဝငျစားရနျ "ဝါးဟားဟား" ဟု နာမညျ တံဆိပျ တပျ၍ ကုမ်ပဏီ တညျထောငျ ခဲ့သညျ။
နောငျ အနှဈသုံးဆယျ အကွာတှငျ ကြောငျး ကုနျစုံဆိုငျလေးမှ သန်ဓေ စတညျခဲ့သော ဝါးဟားဟား ကုမ်ပဏီ သညျ တရုတျနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံး ရသေနျ့၊ လကျဖကျရညျ၊ နို့၊ အခြိုရညျ နှငျ့ ရခေဲမုနျ့ ရောငျးခသြညျ့ ကုမ်ပဏီ ဖွဈလာ ခဲ့သညျ။ ခြောငျသညျ ကုမ်ပဏီ၏ အစုရှယျယာ ၈၅% ပိုငျဆိုငျသညျ။ ၂၀၁၂ တှငျ တရုတျပွညျ၏ အခမျြးသာဆုံး ပုဂ်ဂိုလျ အဖွဈ စာရငျးတငျခံရသညျ။ ၂၀၁၃ ဒုတိယ အခမျြးသာဆုံး ပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈသညျ။
၂၀၁၃ နောကျပိုငျးတှငျ အိုငျတီ နညျးပညာ ပေါကျကှဲမှု ကွောငျ့ ခြောငျသညျ တရုတျ နိုငျငံ၏ အခမျြးသာဆုံး နရောကို ဒုတိယ မြိုးဆကျမှ အိုငျတီ လုပျငနျးရှငျမြား ဖွဈသော အလီဘာဘာ စီအီးအို "ဂကျြမား" နှငျ့ ရှောငျးမီ စီအီးအို "လကြှေငျး" သို့ ဖယျပေး လိုကျရသညျ။ ၂၀၁၄ တှငျ ခြောငျ ဝငျငှေ ၈ ရာခိုငျနှုနျး ကဆြငျးပွီး ဝါးဟားဟား၏ ရောငျးအား ဒျေါလာ ၁၁ ဘီလီယံ ရှိသညျ။ တဈဦးတညျးသော သမီး ကယျလီခြောငျ သညျ ဝါးဟားဟား၏ အရိုကျ အရာကို ဆကျခံ မညျ့သူ ဖွဈပွီး တရုတျပွညျ၏ အခမျြးသာဆုံး အမြိုးသမီး ဖွဈလာလိမျ့မညျ။ ခြောငျ၏ လကျရှိ ပိုငျဆိုငျမှု ဒျေါလာ ၂၀ ဘီလီယံ ရှိမညျ ဟု ခနျ့မှနျး ရသညျ။
အသကျ ၇၀ ရှိပွီ ဖွဈသော ခြောငျသညျ အလုပျ စှဲနသေူ ဖွဈသညျ။ ယနထေိ့ လညျး အနား မယူသေး။ နရောအနှံ့ တှငျ သူ၏ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု မြားစှာရှိသညျ။ အမရေိကနျ အမွဲတမျး နထေိုငျခှငျ့ လကျမှတျ ကိုငျထားကာ ကမ်ဘာအနှံ့ သှား၍ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြား ကှပျကဲ သညျ။ ကြောငျး ကုနျစုံဆိုငျလေးတှငျ ရခေဲမုနျ့ နှငျ့ နို့ရောငျးသညျ့ ခြောငျသညျ ကံ စီရငျသမြှကို လကျမခံဘဲ သူ ကွမ်မာ သူ ဖနျတီးခဲ့သူ ဖွဈပါသညျ။
မွောကျမွားစှာသော မီးငှကျ မြိုးဆကျ မြား ကနျြပါသေးသညျ။ ၎င်းငျးတို့ အကွောငျးရေးပါက ကုနျနိုငျဖှယျ မရှိ။ လကျရှိ တရုတျ ပွညျမကွီး တှငျပငျ ဘီလီယံနာ ၅၉၆ ဦး ရှိကာ အမရေိကနျ ထကျ ပိုမြားပါသညျ။ အမရေိကနျ တှငျ လကျရှိ ဘီလီယံနာ ၅၃၇ ဦး ရှိပါသညျ။ ဟောငျကောငျ၊ ထိုငျဝမျ နှငျ့ မကာအိုရှိ ဘီလီယံနာ ၁၁၉ ယောကျ နှငျ့ ထပျပေါငျးပါက စုစုပေါငျး တရုတျ ဘီလီယံနာ ၇၁၅ ယောကျ ရှိပွီ ဖွဈသညျ။ လကျရှိ တရုတျ အခမျြးသာဆုံး ပုဂ်ဂိုလျမှာ အိမျခွံမွေ၊ ဟိုတယျ၊ စူပါမားကတျ နှငျ့ ရုပျရှငျရုံ ကှငျးဆကျ လုပျငနျး မြား လုပျကိုငျနသေော ဝမျဒါ အုပျစု၏ သူဌေး ဝမျကနျြလငျ ဖွဈပွီး ဒျေါလာ (၃၄.၄) ဘီလီယံ ကွှယျဝမညျဟု ခနျ့မှနျးရသညျ။ ဒုတိယမှာ အလီ ဘာဘာ သူဌေး ဂကျြမား ဖွဈပါသညျ။
တိနျ့၏ တခြို့လူတှကေို အရငျပေး ခမျြးသာ လိုကျပါ။ ခမျြးသာတာ ကကျြသရေ ရှိပါတယျ ဆိုသညျ့ မိနျ့ခှနျးက တရုတျ တို့၏ ခမျြးသာလိုစိတျ ကို နှိုးဆှခဲ့ပွီး တိနျ့ဖှငျ့ ပေးသော စီးပှားရေး အခှငျ့ အလမျး တံခါးမှ တရုတျ လူငယျတို့ ထပွေး၍ ကမ်ဘာ အလယျတှငျ အောငျပှဲ ခံခဲ့ပါသညျ။
တရုတျတို့၏ နညျးပညာ စုပျယူမှုမြား
တရုတျပွညျ ခတျေနောကျကြ ခဲ့ခွငျးမှာ နညျးပညာ နောကျကခြဲ့ ခွငျးကွောငျ့ ဟု တိနျ့က သုံးသပျ သညျ။ ဥရောပသညျ ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစု စကျမှုတျောလှနျရေး တှငျ နညျးပညာ အသဈမြား တီထှငျ ဦးဆောငျနိုငျ၍ ကိုလိုနီ နယျခြဲ့ကာ ခမျြးသာလာသညျ။ ယခုရာစုသဈ တှငျလညျး နညျးပညာကို ဥရောပနှငျ့ အမရေိကနျ ကသာ ဦးဆောငျ နသေညျ။ နညျးပညာ လိုကျမမှီ ပါက ယှဉျနိုငျဖို့ မလှယျ။ ထိုကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ နညျးပညာ ကို အခြိနျတို အတှငျး စုပျယူရနျ စီမံကိနျးမြား ခခြဲ့သညျ။
တရုတျ ခေါငျးဆောငျ မြားမှ စြေးပေါသော သနျးတဈထောငျ လုပျသားစြေးကှကျ ကိုပွ၍ အနောကျ ကမ်ဘာမှ လုပျငနျးရှငျမြားကို ဆှဲဆောငျ သညျ။ စီးပှားရေး လုပျကိုငျနိုငျရနျ လမျးကွောငျးမြား ဖှငျ့ပေးသညျ။ လုပျငနျးရှငျ မြား ဝငျရောကျလာသော အခါ တရုတျ အလုပျသမား မြားကို အလုပျကွမျး တှငျ သာမက ပညာရှငျပိုငျး တှငျပါ မဖွဈမနေ ထညျ့သုံးခိုငျးသညျ။ လုပျငနျးရှငျ မြားလညျး နညျးပညာ ပွရမညျ့ အပိုငျးကို တရုတျ တို့အား မခိုငျးလို သျောလညျး စြေးပေါသော လုပျအား စြေးကှကျကို လကျမလှတျ နိုငျ၍ အလြော့ပေး လိုကျရသညျ။ တရုတျမြားကို ၎င်းငျးတို့ နိုငျငံသို့ ချေါ၍ သငျတနျးမြား တကျစပွေီး လကေ့ငျြ့ပေးရ၏။ ထိုမှ တဆငျ့ တရုတျတို့ နညျးပညာ ရရှိလာသညျ။
ပွညျတှငျးတှငျလညျး အစိုးရမှ နညျးပညာ အတုခိုးရနျ ဌာန တဈခုဖှဲ့စညျးသညျ။ ထိုဌာနတှငျ အငျဂငျြနီယာ နှငျ့ ပညာရှငျမြားစှာ ခနျ့ထား၍ တရုတျပွညျသို့ လာရောကျသော ပွညျပ စကျရုံ မြားမှ နညျးပညာ မြားကို သုတသေန ပွုစသေညျ။ ထိုပွငျ ကမ်ဘာ အရပျရပျမှ ဝယျယူ လာသော စကျရုံဟောငျး မြားကို နှဈမြိုး အသုံးခသြညျ။ တရုတျတို့ သုံးစှဲရနျ ထုတျကုနျ ထုတျခိုငျးသညျ့ အပွငျ ထိုစကျမြား အလုပျ လုပျပုံကို လလေ့ာ စသေညျ။ တဘကျတှငျလညျး ဉာဏျပိုငျး ဆိုငျရာ တီထှငျမှု တိုးတကျစသေော ပညာရေး ပွုပွငျမှုမြား ပွုလုပျသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ တရုတျတို့သညျ မူပိုငျခှငျ့ ခြိုးဖောကျ အတုယူ ကူးခသြညျ့ နရောတှငျပါ အလှနျအမငျး ထူးခြှနျ လာသညျ။
ဥပမာ- ဂကြေရေိုးလငျး က ဟယျရီပျေါတာ အတှဲ ၆ မရေးခငျ တရုတျတို့က ကွိုရေး၍ ရောငျးသညျ။ အင်ျဂလိပျ လိုရေးသညျ့ အစဈ ပျေါလာရငျလညျး ခကျြခွငျး ဘာသာပွနျ၍ တငျရောငျးသညျ။ စာရေးဆရာ ၏ ဇာတျသိမျး မကွိုကျရငျ ပွငျ၍ ပငျရေးသေးသညျ။ တခွား နာမညျကြျော စာရေးဆရာ တို့၏ စာအုပျမြား အကုနျ ကူးယူခွငျး ခံရသညျ။ ဟောလိဝုဒျတှငျ ဇာတျကား တဈကား ရုံတငျ၍ အောငျမွငျပွီး ခှေ မထုတျရသေးခြိနျ တရုတျပွညျတှငျ ထိုခှေ စရောငျးနပွေီ ဖွဈသညျ။ မူပိုငျခှငျ့ မြား ခြိုးဖောကျ ရာတှငျ တရုတျ တို့ကို မှီသူမရှိ။
၁၉၉၀ တှငျ ဗောကျ(ဈ)ဝကျဂငျ ကား ကုမ်ပဏီ တရုတျ သို့ ရောကျလာသညျ။ Jekka မျောဒယျကို ထုတျလုပျရာ မကွာမီ သူနှငျ့ ပုံစံတူ ခယျြရီကား ပျေါလာသညျ။ စြေးကို တဝကျဖွငျ့ ခရြောငျးသညျ။ ဂပြနျက ယာမဟာ မျောဒယျ Jinbao ဆိုငျကယျကို ၁၉၉၅ တှငျ ထုတျရောငျးသညျ။ လအနညျးငယျ အတှငျး Jinbao အတု စကျရုံ ၃၆ ရုံ ပျေါလာသညျ။ မူရငျးနှငျ့ ခှဲမရအောငျ တူသော ထို ဆိုငျကယျမြား မွနျမာ စြေးကှကျ သို့ပငျ ရောကျရှိ လာခဲ့သညျ။ တရုတျတို့၏ ထူးခွားခကျြ မှာ မညျသညျ့ နညျးပညာ မြားကို မဆို လငျြမွနျစှာ အတုခိုးနိုငျခွငျး ဖွဈသညျ။
တရုတျ တို့သညျ သူတို့ မလုပျ နိုငျသော တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြားကို အနောကျ ကမ်ဘာ မှ ကုမ်ပဏီ မြားကို ဖိတျ၍ ပှငျ့လငျး မွငျသာ စှာ တငျဒါ ချေါစသေညျ။ အကောငျးဆုံး နှငျ့ စြေး အသကျသာ ဆုံး ကုမ်ပဏီကို ရှေးခယျြသညျ။ ထို တညျဆောကျရေး လုပျငနျးတှငျ တရုတျ အငျဂငျြနီယာ တို့ကို မဖွဈမနေ ထညျ့သုံး ရသညျ။ ထိုလုပျငနျး ပွီးသညျ နှငျ့ တပွိုငျနကျ နညျးပညာကို တရုတျတို့ လကျထဲ ကနျြရဈ စရေနျ တခါတညျး စီမံထားသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ မီးရထားလမျး၊ ကားလမျး၊ မိုးပြံရထား၊ ရအေောကျလမျးမြား ဆောကျလုပျမှု အတတျ ပညာ၊ ရကောတာ နှငျ့ ရအေား လြှပျစဈ ထုတျယူမှု၊ မွို့ပွ တညျဆောကျမှု နညျးပညာ အကုနျ တရုတျတို့ လကျထဲ ပါသှားပွနျသညျ။
ပွညျပမှ လာရောကျ အခွစေိုကျ သော ကုမ်ပဏီ မြားစှာ၏ နညျးပညာမြား အားလုံး တရုတျတို့ လကျထဲရောကျကာ တရုတျပွညျ လငျြမွနျစှာ တိုးတကျလာသညျ။ အနောကျတိုငျးမှ ပညာရှငျ မြားက တရုတျတို့သညျ နညျးပညာကို သုတသေန ဖွငျ့ အဓိက မရယူဘဲ ပွညျပ ကုမ်ပဏီ မြားနှငျ့ ကုနျသှယျရေးပွုလုပျပွီး ထိုမှ တဆငျ့စုပျယူ ၍ ကွီးထှားစေ ခဲ့သော နိုငျငံဟု သုံးသပျကွ၏။ တရုတျ တို့မှာ နညျးပညာကို စုပျယူရငျး တပွိုငျနကျ တညျး ကမ်ဘာကြျော မိုကျခရိုဆော့၊ တိုယိုတာ အစရှိသော ကုမ်ပဏီ တို့နှငျ့ ပူးပေါငျးကာ နညျးပညာ သုတသေန လညျး ပွုလုပျ နပေါသညျ။
၁၉၇၃ တှငျ ကုနျသှယျရေး ပျေါလစီနှငျ့ ပတျသတျ၍ မျောစီတုနျး နှငျ့ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး ဟငျနရီ ကဈဆငျးဂြား တို့ ပွောခဲ့သော စကားဝိုငျး တဈခုရှိသညျ။ မျောက တရုတျပွညျ တှငျ ဘာပို့ကုနျ မှ မထုတျလုပျ နိုငျကွောငျး၊ ပေါပေါ မြားမြား ပို့စရာ အမြိုးသမီး မြားသာ ရှိကွောငျး စိတျပကျြစှာ ပွောဖူးသညျ။ ကဈဆငျးဂြား မှ ထိုပစ်စညျး မြားဆို အခှနျမကောကျပါ ဟုပငျ အရှနျးဖောကျ ဖူးသညျ။ ယခုတော့ တရုတျ တို့သညျ သူတို့ အမြိုးသမီး မြားကို ပို့မညျ မဟုတျတော့ပါ။ ကလေး တဈယောကျ ပျေါလစီ ကွောငျ့ တရုတျတို့၏ အမြိုးသမီး လိုအပျခကျြ လှနျစှာ ကွီးမားလာပွီး နှဈစဉျ သတို့ သမီး သနျး ၂၀ ခနျ့ ပွနျလို နပေါသညျ။ နီးစပျရာ မွနျမာ အပါအဝငျ အာဆီယံနိုငျငံ မြားနှငျ့ အိမျနီးခငျြး နိုငျငံ မြားမှ အမြိုးသမီး မြားကို ပွနျလညျ လူကုနျကူး၍ ရယူနပွေီ ဖွဈသညျ။
တခြိနျက ပွညျတှငျး၌ပငျ ထုတျကုနျ ပစ်စညျး လုံလောကျအောငျ မထုတျနိုငျခဲ့သော နိုငျငံ သညျ နညျးပညာမြား စုပျယူ၍ ကမ်ဘာ ပျေါတှငျ ထုတျကုနျ ပစ်စညျး အမြားဆုံး ပွညျပသို့ ပွနျ တငျပို့သော နိုငျငံ ဖွဈအောငျ နှဈနှဈဆယျ အတှငျး လုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ သညျ။ ထို စှမျးဆောငျမှု တှငျ ခေါငျးဆောငျ တို့၏ တိုငျးပွညျ အပျေါ စတေနာ ထားမှု နှငျ့အတူ ပွညျသူ တို့၏ ကွိုးပမျးမှု တို့က အခရာ ကခြဲ့သညျ။
ရိုးရှငျးစှာနထေိုငျခွငျး၊ ခြှတော သုံးစှဲခွငျး၊ အပငျပနျးခံ အလုပျလုပျခွငျး၊ ရညျမှနျးခကျြ ကွီးမားခွငျး နှငျ့ အခငျြးခငျြး ကူညီ စောငျ့ရှောကျခွငျး တို့သညျ တရုတျ မီးငှကျ မြိုးဆကျကို အောငျပှဲရစခေဲ့သော အခကျြမြား ဖွဈပါသညျ။ ထိုအခကျြမြားကို လုပျကိုငျသော မညျသညျ့ နိုငျငံသား မဆို ကမ်ဘာ ရှတေ့နျးသို့ ပွနျရောကျ နိုငျသညျကို လှနျခဲ့သော နှဈလေးဆယျက ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံး တရုတျ နိုငျငံသား တို့က သကျသေ ပွခဲ့သညျ။ လကျရှိ မွနျမာ မီးငှကျ (ခှပျဒေါငျး) မြိုးဆကျ အနဖွေငျ့ လာမညျ့ နှဈနှဈဆယျ အတှငျး ထိုသို့ ယှဉျပွိုငျ သကျသပွေ ပွီး ကမ်ဘာ မကျြနှာစာ သို့ ပွနျရောကျလို လှသညျ။
ဖီးနဈ သို့ မီးငှကျ (၇)
နှဈနှဈဆယျ အတှငျး အံ့မခနျး တိုးတကျမှုမြား
အမရေိကနျသညျ (၁၉၅၀ မှ ၁၉၉၀ ထိ) နှဈပေါငျး လေးဆယျ အတှငျး ဒျေါလာ ၁ တဈထရီလီယံ (ဘီလီယံ ၁၀၀၀) အကုနျခံ၍ အဝေးပွေး လမျးမကွီး မြား ဖောကျလုပျသညျ။ တရုတျတို့လညျး ထို နမူနာကို ယူ၍ (၁၉၉၀ မှ ၂၀၂၀ ထိ) နှဈပေါငျး သုံးဆယျ အတှငျး ၎င်းငျးတို့ ၏ ပငျမ အဝေးပွေး လမျးမကွီး (National Trunk Highway) ကို ကီလိုမီတာ (၈၆၀၀၀) အရှညျထိ ဖောကျလုပျရနျ ပဈမှတျ ခခြဲ့သညျ။
ထို ပဈမှတျကို သတျမှတျခြိနျထကျ ၈ နှဈ စောပွီး ၂၀၁၂ တှငျ ပွီးစီးခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးလမျးမ ကွီးတှငျ တောငျ/ မွောကျ ခြိတျဆကျ ထားသော လမျးမကွီး ၉ လမျးနှငျ့ အရှေ့ /အနောကျ ခြိတျဆကျထားသော လမျးမကွီး ၁၈ လမျး ပါဝငျ သညျ။ ယခုအခြိနျတှငျ ကီလိုမီတာ တဈသိနျး တဈသောငျး ကြျောထိ ထပျမံ တိုးမွငျ့ ဖောကျလုပျ ပွီးစီးပွီ ဖွဈသညျ။
၂၀၁၂ ထဲက တရုတျတို့ ၏ ထိုလမျးကွီးသညျ အမရေိကနျတို့၏ အဝေးပွေးလမျးမ မြားတှငျ အရှညျဆုံး၊ အကွီးကယျြဆုံး၊ အကောငျးဆုံး ဆိုသော ဂုဏျပုဒျကို လှဲယူ ခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၂၀ တှငျ အဝေးပွေးလမျးမြားကို ကီလိုမီတာ သုံးသနျးထိ တိုးမွှငျ့ ဖောကျလုပျရနျ ပဈမှတျ ခထြားသညျ။ ယခငျက ကွာမွငျ့ စှာ သှားရသော မျွို့မြားကို အခြိနျနှငျ့ ကုနျကြ စရိတျ သုံးပုံ နှဈပုံထိ သကျသာ သှားအောငျ ပွုလုပျ ပေးနိုငျခဲ့၍ သယျယူ ပို့ဆောငျရေး အထူး တိုးတကျ လာကာ ကုနျစညျ စီးဆငျးမှု မွနျဆနျ စခေဲ့သညျ။
ကီလိုမီတာ တဈထောငျကိုးရာ ကြျော ရှညျလြားသညျ့ ကှနျဟိနျး - တိဘကျ မီးရထား လမျးကို ဖောကျလုပျ ခဲ့သညျ။ (၈၁၅) ကီလိုမီတာ ကို ၁၉၈၄ ထဲက ဖောကျလုပျ နိုငျခဲ့ပွီး ပငျလယျ ရမေကျြနှာပွငျ အထကျ အမွငျ့ပေ (၁၄၅၀၀) ကြျောတှငျရှိသော (၁၁၄၂) ကီလိုမီတာကို ၂၀၀၆ တှငျ ဖောကျလုပျ ပွီးစီးခဲ့သညျ။ ကမ်ဘာ အမွငျ့ဆုံး မီးရထားလမျး အဖွဈ ဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပွီး တံတားပေါငျး (၆၇၅) ခုပါသညျ။ တရုတျ အငျဂငျြနီယာ တို့မှ အမရေိကနျ တို့၏ ဆာရာ နာဗာဒါး (Sierra Navada) ဒသေတှငျ ဖောကျလုပျ ခဲ့သညျ့ ဗဟိုမီးရထား ကှနျယကျကို နညျးပညာ အသာစီး ယူ၍ ဖောကျလုပျ နိုငျခဲ့သညျဟု ကမ်ဘာက အသိအမှတျ ပွုရသညျ။
ရှနျဟိုငျးတှငျ မွအေောကျ မီးရထားလမျး ငါးလိုငျး ရှိသညျ။ နစေ့ဉျလူဦးရေ နှဈသနျး သယျယူ ပို့ဆောငျ ပေးသညျ။ ယခုနောကျထပျ ခွောကျလိုငျး တိုးခြဲ့နရော ပွီးဆုံးပါက ကမ်ဘာအကွီးဆုံး မွအေောကျ မီးရထားလမျး ဖွဈလာမညျ။
လှနျခဲ့သော နှဈရှဈဆယျကြျောက တရုတျ ခေါငျးဆောငျ ဆှနျယကျဆငျမှ ယနျစီမွဈ နှငျ့ မွဈဝါမွဈကို ရကောတာ ဆောကျရနျ စိတျကူး ယဉျဖူးသညျ။ ဆောကျလုပျနိုငျခဲ့ပါက မွငျးကောငျရေ သနျး ၁၀၀ ရှိသော စှမျးအငျကို ပေးစှမျးနိုငျမညျ ဟုဆိုခဲ့သညျ။
ဆှနျယကျဆငျ အိမျမကျ သညျ ၂၀၁၃ တှငျတော့ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ ယနျစီမွဈပျေါရှိ ရကောတာကွီး သုံးခု (Three Gorges Dam) သညျ အမရေိကနျတို့ ဆောကျလုပျထားသော ရကောတာ မြားကို ကြျောတကျ၍ ကမ်ဘာ အကွီးဆုံး ရကောတာ ဖွဈသှားသညျ။ ထိုရကောတာ မြားမှ လြှပျစဈစှမျးအငျ မြားစှာ ရသညျ့ အပွငျ ခြုံကငျး ရလှေောငျကနျကို ၂၀၀၄ မှ စ၍ ရဖွေညျ့ ပေးနိုငျသောကွောငျ့ ယနျစီ မွဈညာပိုငျးနှငျ့ ခြုံကငျးတို့ ဆကျစပျသှားကာ ပငျလယျကူး သင်ျဘောမြား ခြုံကငျးထိ သှားလာနိုငျပွီ ဖွဈသညျ။ ခြုံကငျးတှငျ ဆိပျကမျးနှဈခုကို ထပျမံ တညျဆောကျနရော လုပျငနျးပွီးစီးပါက ကုနျပစ်စညျး သယျယူစရိတျကို ၇၀ မှ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးထိ လြော့ခြ နိုငျမညျ ဟု ခနျ့မှနျးထားသညျ။
စီးပှားရေးနှငျ့ နညျးပညာ ဖှံ့ ဖွိုးမှုအောငျပှဲ
၂၀၀၇ တှငျ တကမ်ဘာလုံး စီးပှားရေး တိုးတကျမှု နှုနျးတှငျ တရုတျက အမရေိကနျကို ပထမဆုံး ကြျောတကျခဲ့သညျ။ အမရေိကနျ အနဖွေငျ့ ၁၉၃၀ နောကျပိုငျး ပထမဆုံး အကြျောခံ လိုကျရခွငျး ဖွဈသညျ။ ပညာရှငျမြား၏ ခနျ့မှနျးခကျြ အရ ၂၀၂၀ တှငျ တရုတျ ဂြီဒီပီ သညျ ဒျေါလာ ၃၀ ထရီလီယံ ရှိမညျ ခနျ့မှနျးထားပွီး အမရေိကနျ ဂြီဒီပီမှာ ၂၈ ထရီလီယံ သာ ရှိနိုငျ၍ တရုတျတို့ နံပါတျတဈ နရောကို ယူလိမျ့မညျဟု ခနျ့မှနျးထားသညျ။
ဥရောပသားတို့ နှဈနှဈရာ နီးပါး ဖွတျသနျးပွီးမှ ရရှိခဲ့ရသော မွို့ပွ တညျဆောကျရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး နှငျ့ နညျးပညာ ဖှံဖွိုးမှု အားလုံးကို တရုတျ တို့က နှဈနှဈဆယျဖွငျ့ အမှီ လိုကျခဲ့သညျ။ ဆယျဆ အမွနျနှုနျး ဖွငျ့ လိုကျခဲ့သညျ ဟုဆိုရမညျ။ နညျးပညာ စုပျယူမှုကွောငျ့ မယုံနိုငျဖှယျ ဧရာမ ခုနျပြံ ကြျောလှားမှုကွီး ဖွငျ့ အောငျမွငျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ နိုငျငံတကာ အဆငျ့မှီ မွို့ကွီးမြား၊ တက်ကသိုလျမြား၊ လမျး တံတားမြား၊ ဆိပျကမျးမြားကို ဤနှဈနှဈဆယျ အတှငျး ပျေါထှကျစခေဲ့ပွီး လူပေါငျး သနျး ၄၀၀ ကို ဆငျးရဲတှငျးမှ ဆှဲထုတျနိုငျ ခဲ့ပါသညျ။
၁၉၉၂ မှစ၍ ပရောဂကျြ ၉၂၁ အမညျ ပေးထားသော အာကာသ စီမံကိနျး စတငျခဲ့သညျ။ လူမဲ့ လှတျတငျမှုမြားကို ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ ခုနှဈမြားတှငျ လေးကွိမျ စမျးသပျ လှတျခဲ့သညျ။ ၂၀၀၃ အောကျတိုဘာ ၂၃ တှငျ အာကာသယာဉျ ရှငျဇူး ၅ (Shenzhou -5) ကို လှတျတငျနိုငျခဲ့သညျ။ တရုတျ အာကာသ ယာဉျမှူး ရနျလီဝေ လိုကျပါ သှား၍ ကီလိုမီတာ ရှဈသိနျး အထိ ပြံသနျး နိုငျခဲ့ သညျ။ ၂၁ နာရီ ၂၂ မိနဈ ၄၅ စက်ကနျ့ ကွာသညျ။ အောကျတိုဘာ ၂၀၀၅ တှငျ ရှငျဇူး ၆ ကို လူနှဈယောကျ လိုကျပါသှားပွီး ထပျမံ၍ အောငျမွငျစှာ လှတျတငျခဲ့သညျ။ အာကာသ အောငျပှဲကို နိုငျငံ တကာမှ စဈရေးအတှကျ လှတျတငျသညျဟု သံသယ ဖွဈခဲ့သျောလညျး တရုတျတို့သညျ စီးပှားရေး တိုးတကျမှု အတှကျသာ ဦးတညျခဲ့သညျ။
ဤမြှ တိုးတကျခဲ့သညျ့ တရုတျတို့၏ အတိတျကို တခကျြ ပွနျကွညျ့ ရအောငျ။
၁၉၇၅ စကျတငျဘာ တှငျ ဗီယကျနမျ အလုပျသမား ပါတီ အတှငျးရေးမှုး လီဒှပျ တရုတျတို့ထံမှ အကူအညီ တောငျးခံရနျ ရောကျလာသညျ။ မျောစီတုနျးက "ခငျဗြားတို့ တိုငျးပွညျက အဆငျးရဲဆုံး မဟုတျဘူးဗြ။ အဆငျးရဲ ဆုံးက ကြုပျတို့။ လူဦးရေ သနျး ၈၀၀ ကြျောတယျ။ စားဖို့တောငျ မလောကျဘူး။ ခေါငျးဆောငျ ပိုငျး မှာလညျး လုပျနိုငျတဲ့သူ မရှိတော့ဘူး။ ထူထူ ထောငျထောငျ ဆိုလို့ တိနျ့ တဈယောကျပဲ ကနျြတော့တယျ" ဟု ညညျးတှား ခဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ မျော သညျ ၈၂ နှဈ ရှိပွီ ဖွဈပွီး ဝနျကွီးခြုပျ ခြူအငျလိုငျးမှာ ဆေးရုံပျေါတှငျ ကငျဆာရောဂါ ဖွငျ့ နောကျဆုံး အခြိနျ ဖွတျသနျးနပွေီ ဖွဈသညျ။
ထိုနှဈ အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျတှငျ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး ကဈဆငျးဂြားနှငျ့ မျော ထပျတှခေဲ့သညျ။ မျောက အမရေိကနျ နှငျ့ ဆိုဗီယကျ တို့ နှဈဘကျ အစညျးအဝေးမြား စိပျ လာခွငျးကို သံသယ ရှိနေ၍ ကဈဆငျးဂြားမှ လာရောကျ ဖွရှေငျးခွငျး ဖွဈသညျ။ ဆှေးနှေးရာမှ ကဈဆငျးဂြားမှ အမရေိကနျသညျ တရုတျအပျေါ အမွတျထုတျမညျ မဟုတျကွောငျး ပွောသောအခါ မျောက ဒေါပှ၍ ဤသို့ ပွော၏။
မျောစီတုနျး - တရုတျဆီက ခငျဗြားတို့ ထိုငျဝမျကို အမွတျ ထုတျပွီး ပွီလေ။
ကဈဆငျးဂြား - ဒီကိစ်စက ကြှနျတျောတို့ ညှိပွီးပွီလေ ဥက်ကဌကွီးရယျ။
မျောစီတုနျး - ဟုတျပါပွီလေ။ ခငျဗြား ပွနျပေး ရငျတောငျ ကြုပျခု မယူနိုငျပါဘူး။ နောငျ နှဈတဈရာ ဆိုရငျတော့ ပွနျယူမယျ။
ကဈဆငျးဂြား - (ရယျမောရငျး) နှဈတဈရာတော့ မလုပျပါနဲ့ ဥက်ကဌကွီးရယျ။
မျောစီတုနျး - (မကျြနှာကွကျ ကို ငေးမောနရေငျး ငိုငျသှားကာ) တကယျလို့ ကြုပျ ကောငျးကငျဘုံ မှာ ဘုရားသခငျ နဲ့ တှခေဲ့ရငျ ထိုငျဝမျကို အမရေိကနျ လကျထဲမှာပဲ ထားမယျ ပွောမိမှာပါ။
ကဈဆငျးဂြား - ဗြာ ...... ဘုရားသခငျ တော့ အံ့သွ ကုနျတော့မှာပဲ ဥက်ကဌကွီးရယျ။
မျော သညျ ထိုငျဝမျကို တရုတျပွညျမ ထဲသို့ ရအောငျ ပွနျသှငျးမညျဟု ဆုံးဖွတျ ထားသညျ့ အတငျးမာဆုံး လူဖွဈပါသညျ။ ထိုငျဝမျကိစ်စမှ လှဲ၍ အမရေိကနျနှငျ့ အားလုံး ညှိနှိုငျး နိုငျသညျ ဟုပွောခဲ့သူ ဖွဈပါသညျ။ အနုမွူကိုပငျ ဂရုမစိုကျ၊ စက်ကူကြား ဟုပွောခဲ့သော ဧရာမ အာဏာရှငျကွီး ၏ နောကျဆုံး အခြိနျ တှငျတော့ ၎င်းငျး၏ ကဆြုံး တိုငျးပွညျကို တိုးတကျနသေညျ့ ထိုငျဝမျနှငျ့ ယှဉျကွညျ့၍ စိတျ အားလြော့ ခဲ့ဟနျ တူပါသညျ။
ထို အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံသညျ မူဝါဒ ပွောငျးလဲပွီး နောငျ နှဈသုံးဆယျ ခနျ့ အကွာ တှငျ လကျရှိ ကမ်ဘာ၏ စူပါ ပါဝါ နရောကို စိနျချေါလိမျ့မညျ ဆိုတာ ကိုတော့ မျော တှကျဆ နိုငျလိုကျ မညျ မထငျပါ။ မျော ကှယျလှနျပွီး ၁၉၇၈ ဝနျးကငျြထိ နိုငျငံတကာနှငျ့ ပတျသတျမှု မရှိဘဲ အထီးကနျြ နသေော တရုတျ တို့သညျ တိနျ့၏ဦးဆောငျမှု အောကျတှငျ ကမ်ဘာ မကျြနှာစာ သို့ပွနျရောကျလာသညျ။ ၁၉၈၂ ခုနှဈ၌ နိုငျငံ တကာ ကုနျသှယျရေး အဖှဲ့ (GATT) ယခု (WTO) ကို လလေ့ာသူ အဖွဈ ဝငျရောကျ နိုငျခဲ့သညျ။ ၁၉၈၆ ခုနှဈတှငျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာငှကွေေး ရနျပုံငှေ အဖှဲ့ (IMF) နဲ့ ကမ်ဘာ့ ဘဏျ တို့၏ အဖှဲ့ဝငျ ဖွဈလာ ပါသညျ။
ထိုစဉျက အာရှတိုကျ၏ အလားအလာ အကောငျးဆုံး ကွယျပှငျ့ ဖွဈခဲ့သော မွနျမာ နိုငျငံတှငျ ၁၉၇၄ မဆလ တဈပါတီ ဖှဲ့စညျးပုံဖွငျ့ အုပျခြုပျ လကျြရှိပွီး ကမ်ဘာဘဏျတှငျ ရှိနသေော စံလငျး ၊မောငျကောငျး တို့၏ ငှကွေေး အာမခံ ရှမြေား စတငျ ကုနျခမျး နပွေီ ဖွဈသညျ။ အိမျနီးခငျြး တရုတျ ခေါငျးဆောငျ နှငျ့ ပွညျသူ တို့ ဆငျးရဲတှငျးမှ ရုနျးထ နသေညျ့ တခြိနျတညျးတှငျ စဈခေါငျးဆောငျ တို့ ၏ မှားယှငျးသော အုပျခြုပျမှု ကွောငျ့ အာရှ ၏ ထိပျဆုံး နရောမှ ကမ်ဘာ ဘိတျဆုံး ဆငျးရဲ တှငျး ထဲသို့ ခုနျဆငျး ခဲ့ရသော မွနျမာနိုငျငံ အဖွဈမှာ ရငျနာစရာ ကောငျးလှနျး လှပါသညျ။
ဖီးနဈ သို့မီးငှကျ (၈)
တရုတျတို့ ၏ အံမခနျး တိုးတကျမှုနှငျ့ အတူ အပွဈ အနာဆာမြား ရောပါလာခဲ့ပါသညျ။ လူဦးရေ အဆမတနျ တိုးပှားလာခွငျးကွောငျ့ သဘာဝ ဂဟေ စနဈကို ထိခိုကျစသေော ပွဿနာ မြားစှာပျေါလာသညျ။ ဥပမာ ခြုံကငျးမွို့တဈမွို့ ထဲတှငျ နှဈစဉျ အညဈ အကွေး တနျခြိနျ တဈဘီလီယံ ထှကျသညျ။ ၎င်းငျးကို ယနျစီမွဈထဲသို့ပိုကျလုံးကွီးမြား နှငျ့ စှနျ့ ပဈနရော ရထေု ညဈညမျးမှု ဆိုးရှားစှာ ဖွဈပျေါနသေညျ။ ထိုပမာဏမှာ လြော့ရနျ မရှိဘဲ နှဈစဉျ တိုးရနျသာ ရှိသညျ။ သနျ့ ရှငျးသော သောကျသုံးရေ ရရှိဖို့ လညျး အခကျအခဲ ကွုံနေ သညျ။ ရှနျဟိုငျး တှငျ ရရှိနိုငျသော မွပေျေါရေ ၏ ၁ ရာခိုငျနှုနျး သာ သောကျသုံးရနျ စိတျခရြသညျ။
ပီကငျး၊ ရှနျဟိုငျး၊ ကှမျကြိုး ၊ ဟောငျကောငျ စသော မွို့ ကွီးမြားတှငျ လထေု ညဈညမျးမှု ဆိုးရှားစှာ ဖွဈပျေါနသေညျ။ မြားပွားလှသော စကျရုံ မြားကွောငျ့ ကာဗှနျဒိုငျ အောကျဆိုဒျ ထုတျလှတျမှု တှငျလညျး အမရေိကနျ နှငျ့ ဂပြနျကို ကြျောတကျ သှားသညျ။ ဓာတျ မွသွေဇာ အဆမတနျ အသုံးပွု ခွငျးကွောငျ့ မွထေုတှငျ ဓာတုဓာတျကွှငျး အာနိသငျ မြားပွားပွီး မွဆေီလှာ ပကျြဆီးမှု မြား ရငျဆိုငျ နရေသညျ။
ကမ်ဘာ့ အကွီးဆုံး ဆညျမြား ဆောကျလုပျ ခွငျးကွောငျ့ စှမျးအငျလိုအပျခကျြ ရရှိပွီး ပို့ ဆောငျ ဆကျသှယျရေး လှယျကူလာ သျောလညျး သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ မြားစှာ ထိခိုကျပွီး ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှု ဖွဈပျေါစေ ခဲ့သညျ။ နမူနာ ဆိုရသျော ယနျစီမွဈပျေါရှိ ရကောတာကွီး သုံးခုကွောငျ့ လူပေါငျး ၁၃ သိနျး နရော ရှေ့ ပေး ခဲ့ရပွီး ရှေးဟောငျး ယဉျကြေးမှု နယျမွမြေားစှာ ရလှေမျးမိုး ခံခဲ့ရသညျ။ ထိုကွောငျ့ တရုတျတို့ သညျ အနာဂါတျ စှမျးအငျလိုအပျခကျြ အတှကျ အခွားနိုငျငံမြားတှငျ မွဈဆုံကဲ့သို့ သော ဆညျမြား ဆောကျလုပျပွီး ရယူရနျ လုပျဆောငျနခွေငျး ဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့ ၏ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ နှငျ့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲ ခွငျးကို ပွနျလညျ ထိနျးသိမျးရနျ စီစဉျ နသေညျ။
လူဦးရေ မြားပွားခွငျး ကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာ ဖူလုံရနျ မှေးမွူရေး တိုးခြဲ့လုပျကိုငျရသညျ။ ထိုနရောမြား တှငျ ကွကျ/ ငှကျ တုပျကှေး၊ ဆားဈ ကဲ့သို့ သော ကူးစကျရောဂါမြား ဖွဈပါက ထိနျးခြုပျရနျ အလှနျ ခကျခဲသော အနေ အထား ဖွဈလာသညျ။ တခွား အန်တရာယျကွီးသော ကူးစကျရောဂါ မြား လညျး ပွနျ့ပှားနသေညျ။ ၂၀၁၀ တှငျ HIV ရောဂါသညျ ၁ သနျး ခနျ့ရှိသညျ ဟုခနျ့ မှနျးရသညျ။
ကှနျမွူနဈ ပါတီ စနဈကို မဖကျြသိမျး သေးသော ကွောငျ့ လူအခှငျ့အရေး နှငျ့ ဒီမိုကရစေီ ဖျောဆောငျ ရာတှငျ လညျး ပွဿနာ မြားစှာ ရှိနသေညျ။ စီးပှားရေးကို တိုးတကျ ရနျသာ အဓိက တှနျးအား ပေးခဲ့သောကွောငျ့ ကငျြ့ဝတျပိုငျးဆိုငျရာ ဆုတျယုတျမှု မြားစှာ ဖွဈပျေါလာသညျ။ အမွတျ ရမညျ ဆိုပါက မညျသညျ့ အလုပျမဆို မကွောကျ မရှံ့ လုပျလာ ကွသညျ။
မူပိုငျခှငျ့ ရဲတငျးစှာ ခြိုးဖောကျ ကွသညျ။ အစိုးရ မှလညျး ထိရောကျစှာ အရေးမယူ။ စြေးပေါသော အလုပျသမားထု ကွီး ကို မကျ၍ လာရောကျ ရငျးနှီး မွုပျနှံသူတိုငျး တရုတျတို့၏ မူပိုငျခှငျ့ ခြိုးဖောကျမှု နှငျ့ နညျးပညာ စုပျယူမှု ခံရသညျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈတှငျ ဒျေါလာ ၅၆ ဘီလီယံ စတငျ မွုပျနှံ ခဲ့သော အနောကျ ကမ်ဘာ နှငျ့ ဂပြနျ တို့မှာ အထိအနာဆုံး ဖွဈသညျ။ တှကျခကျြမှု မြားအရ မူပိုငျခှငျ့ ခြိုးဖောကျမှုကွောငျ့ ဒျေါလာ ၆၀ ဘီလီယံခနျ့နှဈစဉျ ဆုံးရှုံးသညျ။ နညျးပညာ စုပျယူ ခံရသညျ ကိုပါ ထညျ့တှကျ ပါက ရငျးနှီး မွုပျနှံသူမြား မြားစှာအရှုံးပျေါ ခဲ့သညျ။ ထိုကွောငျ့ တရုတျတို့ နှငျ့ ဆကျဆံ ရမညျကို လုပျငနျးရှငျမြား စိတျကုနျ လာကွသညျ။
၁၉၈၀ တရုတျပွောငျးလဲမှုကို ဦးဆောငျခဲ့သော ယခု အသကျ ၆၀ နှငျ့ ၇၅ နှဈကွားရှိ မီးငှကျ မြိုးဆကျ မြားမှာ အလှနျ ဆငျးရဲသော တံခါးပိတျ အုပျခြုပျမှုအောကျ ကာလကို ဖွတျသနျးခဲ့ရဖွငျ့ ရုပျဝတ်ထု မကျမောမှု နညျးသညျ။ ပညာ မတတျကွ။ နှိမျနှိမျခခြ နကွေသညျ။ ခွိုးခွိုး ခွံခွံ နေ၍ ပွငျးထနျစှာ ကွိုးစား ကွသညျ။ ယခု မြိုးဆကျကား တရုတျပွညျ ခမျြးသာခြိနျတှငျ မှေး၍ နိုငျငံ တကာနှငျ့ ရငျဘောငျတနျး နိုငျသော ပညာ၊ ဘာသာစကား၊ ကွှယျဝမှု နှငျ့ နညျးပညာတို့ရရှိပွီး ယခငျ မြိုးဆကျ မြားထကျပငျ အဆမတနျ ပိုမို ခမျြးသာလာ ကွသညျ။ ပွိုငျဆိုငျမှု ပိုမိုပွငျးထနျ လာပွီး ရုပျဝတ်ထုပိုငျး ဆိုငျရာ မကျမောမှု၊ ကငျြ့ဝတျ မစောငျ့ထိနျးမှု၊ အလှနျ အမငျး ဇိမျခံမှု နှငျ့ မောကျမာမှု တို့ စတငျ သန်ဓေ တညျနပွေီ ဖွဈသညျ။
ယခုနှဈထဲပငျ တရုတျ အခမျြးသာဆုံး ပုဂ်ဂိုလျ ဝမျကနျြလငျ၏ သားမှ သာမနျလူ ဝယျမဝတျ နိုငျသော Apple Watch နှဈလုံးကို ၎င်းငျးအိမျမှေးခှေး လကျတှငျ ပတျပေး၍ လူမှုကှနျယကျတှငျ ဓာတျပုံ ရိုကျတငျ ကွှားလုံးထုတျ ခဲ့ရာ ဝဖေနျမှု မြားစှာ ကွုံ့ခဲ့ရသညျ။ သိနျးထောငျ ဂဏနျးတနျ လကျပတျ နာရီ ပတျ၍ ဓာတျပုံ ရိုကျတငျ ကွှားသော မွနျမာ နိုငျငံရှိ သူဌေးသား မြားကဲ့သို့ ပငျဖွဈပါသညျ။ လူတနျးစား ကှာဟမှု အလှနျ ကွီးမား လာပွီး အာဏာပိုငျ မြားနှငျ့ ဘီလီယံနာ မြား၏ သားသမီး မြားမှာ အနောကျကမ်ဘာမှ အကောငျးဆုံး ပွိုငျကားမြား၊ နာရီ၊ လူသုံးကုနျ၊ အဝတျအထညျနှငျ့ ဇိမျခံ ပစ်စညျး မြား အလြှံပယျ ပွိုငျဆိုငျ သုံးဖွုနျး နသေောကွောငျ့ ပွညျသူ မြားကွား မကနြေပျမှု တိုးပှား လာသညျ။
အနောကျကမ်ဘာမှ တရုတျပွညျ ထုတျကုနျ မြားကို ကနျ့ သတျ၍ တရုတျ ကွီးထှားလာမှုကို ရပျတနျ့ လို လှသျောလညျး တရုတျတို့ ၏ ကမ်ဘာ အကွီးဆုံး စြေးကှကျ နှငျ့ စြေးပေါသော လုပျသားထု ကို လကျလှတျ မခံနိုငျခွငျး၊ အရညျအသှေး ကောငျး၍ စြေးပေါသော ထုတျကုနျ ရရှိနခွေငျး နှငျ့ တရုတျ ပွညျတှငျး ကြှံဝငျနသေော ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု မြားကွောငျ့ အခကျတှေ့ နပေါသညျ။ ဥပမာ အမရေိကနျမှ တရုတျလုပျ ပုဇှနျ၊ သားငါး မြားကို အရညျ အသှေး မမှီဟု ဆိုပွီး ပိတျလိုကျရာ တရုတျရှိ ဥရောပ လုပျငနျးရှငျမြား၏ စကျရုံထှကျ ပစ်စညျးမြားက ပိုမြားနသေညျ။ ဥရောပမှ တရုတျ ပစ်စညျးကို စံခြိနျမမှီဟု ဆိုပွီး ပိတျပွနျရာ တရုတျရှိ အမရေိကနျ လုပျငနျးရှငျ မြား၏ စီးပှားရေး အထိနာပွနျသညျ။ ဂပြနျ မှာလညျး ရှိသမြှ နညျးပညာနှငျ့ မူပိုငျခှငျ့ မြားအကုနျ ကူးယူခံရသဖွငျ့ အကွပျရိုကျ နသေညျ။
အာဆီယံ အနဖွေငျ့ တရုတျ၏ ပါဝါကို ထိနျးခြုပျခငျြသော အနောကျကမ်ဘာ အတှကျ စြေးပေါသော လုပျသားထု၊ တနျဖိုးသငျ့ အရညျ အသှေးရှိ ထုတျကုနျမြား၊ ဥပဒေ စိုးမိုးမှု နှငျ့ ရငျးနှီး မွုပျနှံမှု မြား အပျေါ စနဈ တကြ အကာအကှယျ ပေးမှုမြား ဖနျတီးပေးနိုငျ ပါက အခှငျ့အလမျး ကွီးစှာ ရှိပါသညျ။ စငျကာပူ၊ ထိုငျး နှငျ့ မလေးရှား တို့မှာ လုပျခ လစာ အတနျအသငျ့ မွငျ့မားနပွေီ ဖွဈ၍ လကျကနျြ မွနျမာ၊ ဗီယကျနမျ၊ လာအို နှငျ့ ကမ်ဘောဒီးယား တို့ အတှကျ အခှငျ့အလမျးကို ရယူရနျ အကောငျးဆုံး အခြိနျဖွဈပါသညျ။ ဗီယကျနမျမှ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု မြားစှာ ပွုလုပျပွီး ကောငျးစှာ အခှငျ့အရေး ယူခဲ့သညျ။
မွနျမာနိုငျငံသာ စနဈပွောငျးလဲမှု ထိရောကျစှာ လုပျနိုငျပါက မဟာဗြူဟာမွောကျ ပထဝီ အနေ အထား၊ စိုကျပြိုးမွေ မြားပွားမှု၊ သယံဇာတ ကွှယျဝမှု၊ ပေါမြားလှသညျ့ ရခြေို အရငျးအမွဈ၊ သနျးငါးဆယျ ရှိသော စြေးကှကျ နှငျ့ တနသေုံ့းဒျေါလာပငျ မရသေးသော လုပျသားထု ကွောငျ့ ဓားမ နောကျပိတျခှေး ဖွဈခဲ့ရသော တိုငျးပွညျ ဘဝမှ အာရှ၏ အံ့သွဖှယျရာ တဈခု အဖွဈ ပွနျ ခုနျတကျ လာရနျ အခှငျ့ အလမျး ကွီးစှာ ရှိနပေါသညျ။
ဖီးနဈ သို့မီးငှကျ (၉) (ဇာတျသိမျး)
တရုတျတို့ သညျ ၎င်းငျးတို့နှဈရှညျလမြား ခံစား ခဲ့ရသညျ့ မခံခငျြစိတျကို စဈရေးတှငျ မဖောကျခှဲဘဲ စီးပှားရေးတှငျ ဖောကျခှဲခဲ့ ခွငျးကွောငျ့ ကွီးမားသော အောငျမွငျမှု ရခဲ့သညျ။ အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံဘဝမှ ထိပျတနျး နိုငျငံ မြားကို လငျြမွနျစှာ ကြျောဖွတျလာပွီး ကမ်ဘာ့ဒုတိယ နရောသို့ရောကျရှိ လာသညျ။ ရာစုသဈ၏ နံပါတျတဈ အဖွဈ ဆကျခံဖို့အဆငျသငျ့ ဖွဈနပွေီ ဖွဈ၏။ ကမ်ဘာ့ကုနျသှယျရေး တှငျ ဖွဈစေ၊ ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးလာမှု တှငျ ဖွဈစေ၊ မွောကျ ကိုရီးယား အရေးတှငျ ဖွဈစေ တရုတျတို့မပါဘဲ ဖွရှေငျး၍ မရတော့သော အခွအေနေ သို့ရောကျရှိ ခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
စူပါပါဝါ ဖွဈလာ တော့မညျ့ ထို တရုတျနိုငျငံ သညျ တခြိနျတုနျးက
- ဥရောပသားတို့ ၏ ဘိနျးကွှေးမှုကွောငျ့ လမျးဘေးရှိ လလှေငျ့ ကလေးလေး မြားကို လကျတှနျးလှညျး ဖွငျ့ လိုကျကောကျ ခဲ့ရသညျ့နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- ဆနျပွုတျဖွူ တပနျးကနျကို ဆားခတျပွီး လူမြား ဝိုငျးသောကျ ခဲ့ရသညျ့နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- ကြားမ အားလုံး ဇငျပိတျပွာကိုသာ ဝတျဆငျ ခဲ့ရသညျ့ နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- အစာ ငတျပွတျမှုကွောငျ့ လူသနျး ၃ဝကြျော သဆေုံး ခဲ့ရသော နိုငျငံ ဖွဈပါသညျ။
- ဖကျဆဈ ဂပြနျတို့ ၏ စျောကားမှုနှငျ့ အရှကျခှဲ ခံရမှုကို အနဈနာဆုံး ခံခဲ့ရသညျ့ နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- မှားယှငျးသညျ့ မူဝါဒမြားကွောငျ့ တိုငျးပွညျ တညျထောငျပွီး နှဈသုံးဆယျ ကြျော ဒုက်ခ ပငျလယျဝေ ခဲ့ရသော နိုငျငံဖွဈသညျ။
- အမြိုးသမီးမြားကို မကြှေးနိုငျတော့၍ အမရေိကနျသာ လိုခငျြပါက ပို့ ပေးပါမညျဟု ဇာတိပုည ဂုဏျ မာနကို အောကျခြ၍ ကမျးလှမျး ခဲ့ရသော နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- စားစရာ မရှိအောငျ ဆငျးရဲနသေညျ့ ကွားမှ ကမ်ဘာ ပါဝါလှနျ အမရေိကနျနှငျ့ စဈစရိတျ ကွီးမားစှာ တိုကျခိုကျ ခဲ့ရသော နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- ကမ်ဘာ့ ဒုတိယ စဈအငျအား အကွီးဆုံး ဆိုဗီယကျ ၏ ခွိမျးခွောကျမှုကွားမှ အဏုမွူ စဈအငျအား ရအောငျ တညျဆောကျနိုငျ ခဲ့သော နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
- အပေါစား ဖီးနဈတံဆိပျ ရာဘာ ဖိနပျကို နှဈပေါကျအောငျ စီး၍ ပွညျပတှငျ တနေ့ နာရီ ၂၀ ထိ အလုပျလုပျပွီး ကြှနျခံခဲ့ရသူ တို့ ၏ နိုငျငံ ဖွဈသညျ။
ခေါငျးဆောငျကောငျး တဈဦး တကျလာပွီး ဦးဆောငျမှု မှနျသညျနှငျ့ ထို အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံကို နှဈသုံးဆယျ အတှငျး မကျြလှညျ့ပွ သကဲ့သို့ ပွောငျးလဲ နိုငျခဲ့သညျ။
မွနျမာနိုငျငံသညျ အာရှတှငျ အဆငျးရဲဆုံး နိုငျငံတဈခု ဖွဈနသေျောလညျး တရုတျတို့ စတငျ ကွိုးစား ခဲ့ရသော အခွအေနေ ထကျ အခှငျ့အလမျး မြားစှာ ပိုသာ နသေေးသညျ။ ဥပမာဆိုရသျော မွနျမာ နိုငျငံ၏ ဧရိယာ အကယျြအဝနျးမှာ စတုရနျးမိုငျ (၂၆၁၂၀၀) ရှိသညျ။ ဧကဖှဲ့ မယျဆိုပါက ဧက ၁၆၇ သနျးကြျော (၁၆၇,၁၆၈,၀၀၀) ရှိ၏။ ရခေဲတောငျ နဲ့ကြောကျတောငျထှဋျ တခြို့ မှအပ စိုကျပြိုး၍ မရတဲ့ နရော မရှိ။ တရုတျပွညျ တှငျ စုစုပေါငျး မွဧေရိယာ ၏ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျး သာ စိုကျပြိုး ၍ ရသညျနှငျ့ နှိုငျးယှဉျရနျ ဖွဈသညျ။
တရုတျပွညျ အငတျဘေးမှ ရုနျးထှကျခြိနျတှငျ လူဦးရေ သနျး ၉၀၀ ကြျောပွီး ကုနျထုတျ လုပျငနျး မှာ မွနျမာပွညျ ကဲ့သို့မဖှံ့ ဖွိုးသေး။ စိုကျပြိုးမွေ ရှားပါးလှနျး၍ အစစ အရာရာ ခြှတောရသညျ။ ထိုခြိနျက တရုတျခေါငျးဆောငျ မြားမှာ သနျး ၉၀၀ ကြျော ပါးစပျပေါကျကို ထမငျးပုံမှနျ ကြှေး နိုငျဖို့အရူး မီးဝိုငျးနခြေိနျ ဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ တှငျ လူဦးရေ ၅၁ သနျး ခနျ့ သာ ရှိသညျ။ မွဧေကနဲ့စားကွညျ့ပါက လူတဈဦး အတှကျ (၃.၂၇) ဧကစာ စိုကျပြိုးမွေ ရှိ၏။ မိသားစု တဈစု အတှကျ စိုကျပြိုးမွေ အနညျးဆုံး ၁၅ ဧက ကနေ ဧက ၂၀ ကြျော ရှိသညျ။ ကြိနျးသေ ပေါကျ ကွှယျဝ ခမျြးသာ ရမယျ့ နိုငျငံ ဖွဈသညျ။ စားနပျ ရိက်ခာ ပိုလြှံပွီး ကမ်ဘာ လူဦးရေ အမြားဆုံး အဆငျ့ (၁၊ ၂၊ ၈) ရှိသညျ့ တရုတျ၊ အိန်ဒိယ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အိမျနီးခငျြး သုံးနိုငျငံသို့ထုတျကုနျ မြား ကောငျးစှာ ပွနျလညျ တငျပို့ ရောငျးခြ နိုငျရမညျ့ နိုငျငံ ဖွဈသညျ။ လူဦးရေ ၁၅၆ သနျးကြျော ရှိသော အိမျနီးခငျြး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ သညျ ရှမျးပွညျနယျ အကယျြအဝနျးသာ ရှိပါသညျ။
ရသေယံဇာတ ကိုကွညျ့ရအောငျ။ ရခြေို မွဈကွီး ၄ စငျးနဲ့မွဈငယျ မြားစှာ ရှိသညျ။ အဖိုးတနျ သဈတောမြား၊ မွဆေီလှာမြားလညျး ရှိသေးသညျ။ မွအေောကျ သယံဇာတ (ရနေံ၊ ဓာတျငှေ့ ၊ ကြောကျမကျြ နှငျ့ တှငျးထှကျ ဓာတျသတ်ထုမြား)၊ ပငျလယျ သယံဇာတ နှငျ့ ပထဝီ အနအေထား အခကျြအခွာ ကမြှု ပါထညျ့တှကျရငျ အလှနျ ကွှယျဝသော နိုငျငံ ဖွဈပါသညျ။
ထိုကွှယျဝမှုသညျ ယခငျကလို စဈအုပျစုနှငျ့ အပေါငျးအပါ တသိုကျ တို့ အတှကျသာ မဖွဈသငျ့ပါ။ ရနျကုနျ၊ မန်တလေးရှိ အခွခေံ လူတနျးစား မြား အတှကျသာ မက ကခငျြပွညျ နှငျ့ ရှမျးပွညျနယျရှိ စဈပွေး ဒုက်ခသညျ မြားအတှကျလညျး ဖွဈသငျ့ပါသညျ။ မိုးခေါငျ ရရှေား အညာသား ကွီး မြားနှငျ့ နာဂဈ ဒဏျခံ ဧရာဝတီတိုငျး အပါအဝငျ ရခိုငျရိုးမနှငျ့ ခငျြး တောငျတနျးမှ တိုငျးရငျးသားမြား အတှကျပါ အကြုံးဝငျ ရမညျ။ မှနျ၊ ကရငျ၊ ကယား လူမြိုးစု မြားနှငျ့ တနင်ျလာရီတိုငျး ကြှနျးစု မြားမှ မြိုးနှယျစု မြားအတှကျပါ သကျဆိုငျရမညျ ဖွဈသညျ။
ရှရေောငျ အခှငျ့အလမျး သညျ ၂၀၁၅ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ လကျသနျးပွာ မြား ထောငျ၍ မွနျမာပွညျသို့့ တကြော့ပွနျ ရောကျရှိလာပွီ ဖွဈသညျ။ သို့ သျော အခှငျ့အလမျးနှငျ့ ခေါငျးဆောငျကောငျး ရရှိရုံနှငျ့ မပွီး။ ပွညျတှငျး ပွညျပရှိ ပွညျသူတို့ ပွငျးထနျစှာ ကွိုးစားမှ ဓားမ နောကျပိတျခှေး ဘဝမှ လှတျ နိုငျမညျ ဆိုသော အခကျြကို ထငျရှားစရေနျ ရညျရှယျ၍ မီးငှကျ စာစဉျ ကိုရေးပါသညျ။
အံ့မခနျး ပွောငျးလဲခဲ့သော တရုတျတို့ ကို လလေ့ာကွညျ့ပါက
၁။ ခေါငျးဆောငျမြား၏ တိုငျးပွညျကို အမှနျတကယျ ခဈြစိတျရှိခွငျးနှငျ့ မှနျကနျသော ဦးဆောငျမှု
၂။ အနောကျကမ်ဘာမှ ကြျောတကျသှားသော နှဈနှဈရာစာ နညျးပညာကို အခြိနျတိုအတှငျး ပွနျလညျ စုပျယူနိုငျခဲ့မှု
၃။ အသုံးမဝငျသညျ့ သနျး တဈထောငျ လုပျသားထုကို ကုနျထုတျ လုပျငနျး အတှကျ အသုံးဝငျသော သူမြား ဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲ ပေးခဲ့သော ပညာရေးစနဈ
၄။ ကှနျမွူနဈ စနဈ ဖွဈပါလကျြ ရဲတငျးစှာ စြေးကှကျ တံခါးဖှငျ့ခဲ့သော မူဝါဒ နှငျ့
၅။ ပွညျပ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု မြား ရောကျလာစခေဲ့သော အစိုးရ၏ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲမှုမြား
ကို အဓိက အဖွဈတှေ့ ရမညျ ဖွဈသညျ။
အရေးအကွီးဆုံး အခကျြမှာ တရုတျ မီးငှကျ မြိုးဆကျ လူငယျ မြား၏ ကွိုးစားမှုပငျ ဖွဈသညျ။ ပွညျတှငျးနှငျ့ ပွညျပ ရောကျနသေော ဖီးနဈတို့ ၏ ဆငျးရဲတှငျးမှ ခုနျထှကျလိုစိတျ၊ ရနျသူတျော ဂပြနျ၊ ထိုငျဝမျနှငျ့ အနောကျ ကမ်ဘာ၏ တိုးတကျမှုကို အောကျကြ မခံလိုသညျ့ စဈမှနျသော အမြိုးသားရေး စိတျတို့ က ခတျေသဈ တရုတျပွညျကို မှေးဖှားပေး ခဲ့ပါသညျ။
ထို မီးငှကျမြိုးဆကျသညျ ယခု အသကျ ၇၀ - ၈၀ တနျးကို ရောကျနပွေီ ဖွဈပါသညျ။ အိပျပြျော နသေော တရုတျ နဂါးကွီးကို ၎င်းငျးတို့့၏ ခြှေးစကျ၊ မကျြရညျစကျမြား ဖွငျ့ လနျ့ နိုးစေ ခဲ့သညျ။ ယခု အခြိနျ တှငျတော့ သူတို့ လကျဖွငျ့ ပငျပနျး ကွီးစှာ တညျဆောကျ ခဲ့ရသော မိခငျနိုငျငံ အကွောငျး သားသမီး မွေးမွဈ မြားကို ဂုဏျယူစှာ ပွနျပွော နိုငျပွီ ဖွဈသညျ။
တခြိနျက တိုငျးပွညျက ကြှေးထားခဲ့ရသော တရုတျ လူငယျတို့၏ ပါးစပျပေါကျမြားကို ခေါငျးဆောငျတို့မှ မိခငျတိုငျးပွညျ အတှကျ ပွနျအနျထုတျ ကြှေးမှေး သညျ့ ပါးစပျမြား ဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ပါသညျ။ ပွီးခဲ့သော နှဈသဈမိနျ့ ခှနျးတှငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှလညျး ပွညျသူတို့ ကို တိုငျးပွညျ အတှကျ နှဈသဈ လကျဆောငျ ပေးဆပျ ရနျသာ ပွငျဆငျ ထားဖို့ပွောခဲ့ပါသညျ။ လကျရှိ မွနျမာ မြိုးဆကျ အနဖွေငျ့လညျး မိခငျတိုငျးပွညျကို စှမျးနိုငျသမြှ ပွနျလညျ အနျထုတျ ကြှေးမှေး လိုပါသညျ။
တခြိနျက အာရှ၏ ကွယျပှငျ့ ဖွဈခဲ့ပွီး ယခု အိမျနီးခငျြး နိုငျငံမြားကွားတှငျ အစစ အရာရာ အောကျကြ နောကျကြ နခေဲ့ရသော မွနျမာ ဖီးနဈ မြိုးဆကျမြား၏ ရငျထဲတှငျ ပနျးတှေ ပှငျ့နစေရာ အကွောငျး မရှိပါ။ မခံခငျြစိတျ ဆူးတှေ သီးနမေညျသာ ဖွဈသညျ။
လတျတလော ထိုငျးတှငျ ဖွဈခဲ့သော ဝငျးနဲ့ ဇျော ကိစ်စ သညျ မကျြနှာမှဲ၍ အနျိုငျကငျြ့ခံ ခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ တရုတျ သံအမတျ ချေါဆဲ လိုကျသညျ နှငျ့ သဈခိုး တရုတျမြားကို ၈ ရကျနှငျ့ လှတျပေး ရသညျမှာ လညျး ဆငျးရဲ ၍ ခေါငျးငုံ့ ခံခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ မလေးရှားတှငျ သတျခံရသော ကိုယျ့နိုငျငံသား မြားကို ကာကှယျမှု မလုပျနိုငျ ခဲ့သညျမှာလညျး အငျအားမရှိ သော အခွအေနေ ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ တခြိနျက ရခိုငျဘုရငျ ပိုငျခဲ့သော ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကို ရပေိုငျနကျ အခြို့ပေးလိုကျ ရသညျ မှာလညျး ပွညျပကို ခပျမာမာ တုံ့ ပွနျနိုငျသော အနအေထား မရှိသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
ထိုကဲ့သို့ရငျထဲ အရှကျတကှဲ စူးဝငျခဲ့ရသော ဆူးမြားကို ဆှဲနှုတျရနျ အခြိနျကြ လာပါပွီ။ လာမယျ့ နှဈနှဈဆယျ အတှငျး မွနျမာ မီးငှကျ မြားမှ အနာဂါတျ မြိုးဆကျ အတှကျ သမိုငျးပေး တာဝနျ အဖွဈ အမိမွကေို ဆငျးရဲတှငျးမှ အမွနျ ဆှဲထုတျရပါမညျ။
ကှနျမွူနဈကွီး တိနျ့ က "ခမျြးသာတာ ကကျြသရေ ရှိပါတယျကှာ" ဟု ပွောခဲ့သညျ။ မှနျ၏။ အရငျ ခမျြးသာဖို့ လိုသညျ။ သို့မှသာ မိခငျတိုငျးပွညျ နှငျ့ မောငျနှမ နိုငျငံသား မြားကို စောငျ့ရှောကျ နိုငျမညျ။ အထကျပါ အရှကျတကှဲ အကြိုးနညျး မှု မြားမှ ကာကှယျနိုငျမညျ။
ဒီလောကျ အရေးကွီးသော အခြိနျတှငျ ဘာသာရေး အရခွေုံ အတုအယောငျ အမြိုးသားရေးမြိုး ကို အလိုမရှိပါ။ စဈမှနျသော အမြိုးသားရေး စိတျကိုသာ အလိုရှိပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့နှဈပေါငျးမြားစှာ မြိုသိပျခဲ့ရသော နာကညျြးစိတျကို စီးပှားရေး တှငျ ဖောကျခှဲကွမညျ။
ပွီးခဲ့သော နှဈငါးဆယျအတှငျး ခုနျဆငျး ခဲ့ရသော ဆငျးရဲတှငျးမှ ပွနျတကျ ကွမညျ။
ရှထေီး ဆောငျး ခဲ့သော အတိတျက ရာဇဝငျ ရဟတျဘီး ကို တပတျ ပွနျလှညျ့ ပွမညျ။
အာရှ၏ နောကျထပျ အံ့သွဖှယျ အသဈ တဈခု ပျေါထှကျလာဖို့ " မွနျမာ မီးငှကျတို့တောငျပံ စခတျကွစို့ " ဟုဆိုရငျး ဤစာစဉျကို အဆုံးသတျ ပါသညျ။
- ဆရာ ခဈြစံဝငျး၏ “အံ့မခနျး ဖှငျ့ဖွိုး တိုးတကျ လာသော တရုတျပွညျဆိုငျရာ လလေ့ာခကျြ စာတမျး အမှတျ(၅)" ကို အဓိက ကိုးကားပါသညျ။
- ဆရာ ခဈြစံဝငျး၏ “တရုတျနိုငျငံ ပညာရေးပွုပွငျ ပွောငျးလဲမှု ဆိုငျရာ လလေ့ာခကျြ စာတမျး အမှတျ(၄)"
- ဆရာ ကြျောဝငျး၏ "ရာဇဝငျ တှငျရဈမယျ့ စကားဝိုငျးမြား"
General Knowledge History Knowledge Soup for Souls အတိုအထွာစာပေများ